Uploaded by CKK
ပန်းမြိုင်လယ် က ဦးရင်မူး ရေးသူ သာဒင်
ကျနော့် နာမည်က ရင်မူးပါ၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော် ဗမာပြည်က ထွက်လာတဲ့ ပါတ်စ်ပို့ မှာ ကြားက လုပ်ပေးတဲ့ ပွဲစား ကောင် သောက်သုံး မကျ
တာနဲ့ ဗမာတွေ ထုံးစံ အတိုင်း နာမည် ရှေ့မှာ မောင် တွေ၊ ကိုတွေ၊ ဦးတွေ ပါလာ တော့ ပြန်ပြောင်းလို့လည်း ခက်တော့ ဦးရင်မူး ဆိုတဲ့
နာမည် ရလာခဲ့တာပေါ့၊ ကျနော်က ထွက်လာတုန်းက သချာင်္ အဓိက နဲ့ ဘွဲ့ရလာတာလေ၊ အမေရိက ရောက်မှ ကွန်ပြူတာကလပ်စ် တွေ
ရှောက်တက် ပြီး စာမေးပွဲ တွေ၊ စာတီဖီကိတ် တွေ ဖြေယူ ပြီးတော့ အိုင်တီသမား ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့၊ ကံကလည်း ကောင်းချင်တော့ မိန်းမ
ကလည်း ၀င်ငွေကောင်းတဲ့ ဖာမစ်စစ်၊ ဗမာလို ဆိုရင်တော့ ဆေးစပ်သူ ခေါ်မလား၊ ဒီမှာကတော့ ဖာမေစီ ဆိုတဲ့ ဆေး ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ
မှာ လုပ်ကြတယ်၊ ဆေးလာယူတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ ၊ ရှောင်ရန် ဆောင်ရန် စသဖြင့် ပြောပေးတဲ့သူတွေပေါ့၊ သူနဲ့
ဘယ်လိုဖူးစာ ဆုံသလဲ ပြန်ပြောရရင် သိပ်ရှည်သွားလိမမ
့် ယ် ထားလိုက်တော့ အခု ကျနော်တို့ မှာ ၃ နူစ်သား ကလေး တယောက်ရနေပြီ
၊ ကျနော်တို့က မြောက်ပိုင်း ကာလီဖိုးနီးယားမှာ နေကြတယ်။
ကျနော့် မိန်းမ အကြောင်းတော့ နည်းနည်းပြောပြ ထားရအုန်းမယ် ဇာတ်လမ်းထဲ မှာ နောက်လည်း ပါလာမှာ မို့လို့၊ သူ က မွေးချင်း
ခြောက်ယောက် မှာ နံပါတ် ၃၊ သူ့ အထက် အကြီးဆုံးအမ က ခရေ တဲ့ ယူနီဗာစတီအော့ မင်နီဆိုးတား မှာ တွင်စီတီး ဆိုတဲ့
အင်ဂျင်နီယာ ကောလိပ်မှာ စာပြ နေတယ်၊ အပျိုကြီးပေါ့၊ အသက် ၃၀ နားနီးနေပြီ၊ နောက် အကိုက ၀င်းမော် တဲ့ ၊ သူက သူတို့
မွေးချင်းထဲ မှာ အစောဆုံးအိမ်ထောင်ကျတာပေါ့၊ ခလေးနူစ်ယောက်ရနေပြီ ၊ သူ့မိန်းမ နာမည်က သဇင် တဲ့၊ ၀င်းမော်က အင်တာနက်
ကုမ္ပဏီ တခု မှာ လုပ်ပြီး သဇင်ကတော့ ဟောက်စ၀
်ိုက်ပေါ့ ၊ အိမ်အလုပ်နဲ့ ကလေး အလုပ်ပေါ့၊ သူတို့က တက်စ်ဆက် မှာနေကြတယ်၊
ပြီးတော့မှ ကျနော့် မိန်းမ မြနူင်းဆီ၊ သူ့အောက်မှာ က စပယ်၊ စပယ် က အောင်ကြည် ဆိုတဲ့ ကောင်နဲ့ ရတယ်၊ နူစ်ယောက်စလုံးက
စာရင်းကိုင် လုပ်တယ် ကာလီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်း မှာ နေကြတယ်၊ ခလေး မရှိသေးဘူး၊
စပယ် အောက်မှာတော့ ဇီဇ၀ါ နဲ့ ခတ္တာ ဆိုတဲ့ အပျိုမ နူစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ဇီဇ၀ါက ကျနော်တို့ မြို့နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ စတန်းဖို့ တက္ကသိုလ်မှာ
တက်နေတယ်၊ တက္ကသိုလ်က အဆောင်မှာပဲ နေတယ်၊ ခတ္တာကတော့ အခုမှ ၁၁ တန်းပဲ ရှိသေးတယ်၊ သူ့ အဖေအမေ များဖြစ်ကြတဲ့
ဦးကြီးမောင်၊ ဒေါ်ကန့်ကော် တို့နဲ့ ဖလော်ရီဒါက ဘိရှ် အရမ်းလှတဲ့ မြို့ တမြို့ မှာ နေတယ်၊ ဦးကြီးမောင်နဲ့ ဒေါ်ကန့်ကော်တို့ က
အင်ဂျင်နီယာတွေပဲ၊ သူတို့ နေတဲ့ ကောင်တီ ရဲ့ ပတ်ပလစ်ဝပ် မှာလုပ်တယ်၊ မြို့နယ် အစိုးရ အလုပ်ပေါ့၊ ဦးကြီးမောင်က ၅၂ နူစ်
ဒေါ်ကန့်ကော်က ၄၉ နူစ် ပဲ ရှိသေးတယ်၊ ငယ်ငယ်လေး နဲ့ အိမ်ထောင်ကျ ခလေးမွေး ပြီး အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်လာကြတာ
တော်တော်ချီးကျူး ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ထင်တာပဲ အဟီး၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့က စပယ်လေး ကိုယ၀
် န် စတုန်း မှာ ဗီဇာလိုတို လည်းပေါက်လာ၊
ဦးကြီးမောင်ဘက်က အမျိုးတွေကလည်း အမေရိက မှာ အခြေကျနေပြီ ဆိုတော့ ရောက်တာနဲ့ အလုပ်တွေရ
အရမ်းအဆင်ပြေသွားကြတာပေါ့၊ ကဲ အဲဒါတွေကတော့ ဇာတ်လမ်းနဲ့ သိပ်မဆိုင်တော့ အသေးစိတ်မသွားတော့ဘူး၊ လူပုံသဏ္ဍန် တွေ
အကျင့်စရိုက်တွေတော့ သူတို့ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အခန်းရောက်ရင် ရှင်း ပြ သွားမယ်ဗျာ။
ကျနော့် ယောက္ခထီး ဦးကြီးမောင်က တရုပ်သွေးတော်တော်ပါတယ်ဗျ၊ ၇၅ ရာခိုင်နူံးလောက်ပြောလို့ရတယ်၊ ယောက္ခမ ဒေါ်ကန့်ကော်
ကတော့ ရှမ်းတရုပ်စပ်ဗျ၊ အဲဒါကြောင့် သားသမီးတွေ အကုန်လုံးက အသား က ဖြူဝင်းနေကြတယ်၊ ကျနော့် မိန်းမ မြနှင်းဆီ ဆိုရင်လည်း
အသားအရည်က ၀င်းနု နေပြီး မျက်လ၀
ုိုံင်းဝိုင်း နဲ့ ဆောင်းတွင်းဆို ပါးလေး နူစ်ဘက်က ဆေးဆိုးထားသလို ပန်းရောင်ပြေးနေတာ၊ သူက
အရင်တုန်းက ဘော်ဒီ က မော်ဒယ်လိုပဲ ၊ ဂျင်အမြဲသွား အစားအသောက်လည်း ဆင်ခြင်တော့ ၊ ခါးသေးရင်ချီ တကိုယ်လုံးက ချပ်ရပ်
ဖုဖေါင်းနေတာပေါ့၊ ခလေးတယောက်မွေး ပြီးတော့ အရင်က လို ကျစ်ကျစ် သေးသေး တော့ ပြန်မရ တော့ဘူး၊ နည်းနည်းလေး
၀ကစ်ကစ် ဖြစ်ချင်လာတယ်၊ နောက်သူ့ အလုပ်ချိန်တွေကလည်း ရှည်တယ် တနေ့တနေ့ ၁၀ နာရီလောက်နဲ့ တပတ်မှာ
လေးရက်လောက် ပဲ လုပ်ရတယ်၊ ဆိုတော့ သူ့ကိုယ်သူ အရင်ကလောက် ဂရု မစိုက်နိူင်တော့ဘူး ၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်က အဲ
လိုကိုယ်လုံးလေး ကို ပိုကြိုက်တယ်ဗျ ၊ အဟီး၊ ဒါပေမဲ့ ဗျာ သူ့ အလုပ်ရှယ်ဂျူး ကျနော့် အလုပ်ရှယ်ဂျူး ၊ ခလေး တယောက် နဲ့ ဆိုတော့
ကျနော်တို့ ကာမ ကိစ္စ က တော်တော့်ကို ကသိကအောက်ပဲ ဗျ၊ ဘာမှ ပုံမှန်ကို မရှိဘူး၊ တခါတလေ တပတ်လုံး တခါမှ ကို
မလုပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ အခါတွေလည်း ရှိတယ်၊ ကျနော့် အလုပ်က လည်း ခရီးတော်တော် ထွက်ရတယ် ဗျ၊
ကဲ ကျနော့် ဇာတ်လမ်း အစ ကတော့ အဲ လောက်ပဲ ဗျာ၊ လူတွေ အင်ထရိုဂျူ့စ် လုပ်နေရတာနဲ့ တောင် တော်တော် ရှည်နေပြီ၊
နောက်တော့လည်း အဲဒီလူတွေ ဇာတ်လမ်းထဲ ပါလာရင် ရှင်းပြ စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ အဟီး ၊ ခုရှုတ်မှ နောင်ရှင်း ဆိုတဲ့ စကား ထုံး
အင်း ကျနော် အရင်က ပြောခဲ့ သလိုပဲ ကျနော့် မိန်းမ က အပျံစား ပေမဲ့ သူနဲ့ ကျနော်နဲ့ က အချိန် တွေ အကုန်လွဲ နေတယ်၊ သူပြန်လာတဲ့
အချိန် ကျနော်က သိုးနေပြီ အိပ်ပျော်နေတာ၊ ကျနော်က သူအိပ်ယာ မထခင် အစောကြီး အလုပ်ကို လစ်ရတယ်၊ သူက ကျနော့် နောက်မှ
ထ ပြီး သားလေးကို ကျောင်းပို့၊ သားက ပရိုက်ဗိတ် စကူး ဆိုတော့ တနေ့လုံးတော့ ထားလို့ ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကျနော်က ညနေအလုပ်က
ပြန်လာပြီး သူတို့ ပုံမှန် ဆင်းချိန်လောက်ဆို သွားကြိုတယ် နောက် သူနဲ့ ဆော့ ညနေစာစား၊ သူ့ ကို အိမ်စာလေး ဘာလေး ကူလုပ်၊
နောက် သူ့ ကို သိပ်ပြီးရင် ကျနော်က ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်၊ အင်တာနက်ထဲ ၀င် ဟိုရှောက်ကြည့် သည်ရှောက်ဖတ် ပေါ့၊ နောက် မနက်
အစောကြီးထ ရမှာ ဆိုတော့ သိပ်ညနက် မနေနိူင်၊ မြနှင်းဆီ ပြန်ရောက်လာတာ၊ တခါတလေလည်း သိတယ်၊ တခါတလေလည်း
မသိဘူး၊ ကိုက အင်တာနက် တွေထဲ မှာ နှာစာပေ တွေ ဖတ် ၊ ပုံတွေ ကြည့်ပြီး စိတ်လာ နေတဲ့ အချိန် အိပ်မပျော်သေး လို့ သူပြန်လာ ရင်
ကိုက စဖက်ရမ်း လုပ်ရင်၊ တခါတလေ အဆင်ပြေရဲ့ ၊ တခါတလေကျတော့လည်း မောင်ရယ် မြ ဒီနေ့ ပင်ပန်းလာတယ်၊ နောက်မှ ကွာ
ဆိုလို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေလည်း ရှိလာတယ်၊ ကို စိတ်မလာ တဲ့ချိန် သူလာရင်လည်း သူ့ အလိုလိုက်မယ်
စိတ်ကူးမိသော်လည်း၊ အလုပ်က ပရက်ရှာ က တခါတလေ လီး ကို တောင် မတောင်နိူင်၊ မနက်ဖြန် သူများ တွေ ကွန်ပလိမ်းလုပ်ထားတာ
ငါမဖြေရှင်းနိူင်ရင် စောက်ပြဿနာပဲ ဆိုပြီး စာအုပ်တွေ လှန်လှော ဖတ်နေရသည့် အချိန်နှင့်လည်း ကြုံရသေးသည်။
အဲ လိုဆိုတော့ ယောက်ကျားပီပီ ကာမ ဆန္ဒ တွေက ကိုယထ
်ဲသွေးကြော ထဲ မှာ တအုံ့အုံ့ နဲ့ အချိန် မရွေး ပေါက်ကွဲ တော့မည့် မီးတောင်
အဲ ဒီမှာ ဒေလီယာ နဲ့ ဇာတ်လမ်းစခဲ့ရလေတော့သည်။
ဒေလီယာ မှာ အဖြူမ ဟု ခေါ်ရမည် ဖြစ်သော ကော့ကေးရှန်း စစ်စစ် ဖြစ်လေသည်၊ အဖေအမေ က အမေရိက အလယ်ပိုင်း ပြည်နယ်
ဘက်မှ ဖြစ် ပြီး အခု ထိ လည်း အဲဒီမှာ ပဲ နေနေတုန်းဖြစ်သည်၊ ဒေလီယာ မှာ အသက် ၃၅ နူစ်ခန့် ရှိပြီး ကျနော် တို့ ကုမ္ပဏီ မှာ ပင်
လုပ်သည့် ၀န်ထမ်းတယောက်ဖြစ်လေသည်၊ အရပ်မှာ ၅ ပေ ၈ လောက်မို့ ၅ ပေ ၁၁ ရှိသော ကျနော်နဲ့ သိပ်မတိမ်းမယိမ်းလိုထင်ရသည်၊
သူမ ဟိုက်ဟီး စီး လိုက်ရင် ကျနော်ထက်တောင် မြင့်သလို ထင်ရသည်၊ သူမ ကိုယ်လုံးမှာ နည်းနည်း လေး ၀ သည် လို့ ပြောလို့
ရသော်လည်း ခါးသေး ရင်ချီ သူ့ အချိုးနဲ့ သူ ကျနလှသည်မို့ ယောက်ကျားတွေ လမ်းမှာ ခေါင်းလည် ကြည့်ခံရသူ ဖြစ်လေသည်။ ဆံပင်မှာ
လည်း ရွှေအိုရောင် ခေါ်မလား၊ အမဲဘက် ယိမ်းနေသော ရွှေရောင် ဆံပင် နူင့်ဖြစ်သည်၊ ဆံပင် ကို ပုခုံးလောက်ထိ မရောက်တရောက် ပဲ
ထားထား ကာ ပွယောင်းယောင်းလေး လုပ်ထားသည့် စတိုင်ဖြစ်သည်၊ သူမ နှင့် ကျနော်က ပထမ တော့ မျက်နှာမြင်ဘူးရုံ လောက်သာ
သိကြ သည်၊ နောက် ပရောဂျက် တခု မှာ အတူလုပ်ဖို့ အဖွဝ
ဲ င် တွေ ဖြစ်လာကြတော့ မှ တယောက်နာမည် တယောက် သိကြ ရခြင်း
တနေ့ ပရောဂျက် အဖွဝ
ဲ့ င်များ မိတင် မှာ ကျနော်တို့ နူစ်ယောက်ထဲ စောရောက် နေကြပြီး ဆွေးနွေးပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်နေကြစဉ်၊
...အား ..ငါ့ ခေါင်းကိုက်လိုက် တာ ကွာ၊ ဘယ်လိုဖြစ်လဲ မသိဘူး..
...အင်း ငါ့မှာ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတော့ ရှိတယ် ယာယီ သက်သာချင်ရင်တော့..
….ငါ ဆေး နူစ်လုံးလောက် ချေး လို့ရမလား....
..ချေး လို့ မရဘူး....
ဒေလီယာ့ မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ ကျနော့်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး
..အပိုင်ယူမယ် ဆိုမှ ပဲ ပေးနိူင်မယ်..ဟဲဟ.ဲ ..
အဲဒီတော့ မှ ကျနော် နောက်တာမှန်း သိသွားပြီး ပြုံး လိုကက
်ာကျနော့် ဆီမှ ဆေးကို ယူပြီး သူ့ ရေဘူးနဲ့ မော့သောက်ချလိုက်သည်။
...ကျေးဇူး ပဲ နောက် နင် အကူညီလိုရင်လည်း ငါ့ကိုပြောလေ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်..
...တကယ် ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လား ဟီးဟီး..
နောက်ပိုင်း ရင်းနှီး သွား မှ ဒေလီယာ့ အကြောင်းကို ကျနော် ပိုပြီးသိလာရတယ်၊ ဒေလီယာက အခု ဒုတိယ အိမ်ထောင်နဲ့ ဖြစ်သည်၊ အခု
သူနှင့် အိမ်ထောင်ကျနေသော ဂျိုး ကလည်း ဒုတိယ အိမ်ထောင် ဖြစ်သည်၊ ဒေလီယာ က သားသမီး မထွန်းကား သော်လည်း ဂျိုးက
သားတယောက်ပါလာသည်၊ အခု ဟိုက်စကူး ဂျူနီယာ ဆိုတော့ ၁၆ နူစ်လောက် ရှိပြီ ဖြစ်လေသည်၊ သူမ ကလည်း ကျနော်
အိမ်ထောင်နူင့် ခလေး တယောက် ဆိုတာ သိသွားခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်း တလ နူစ်လ လောက် အတွင်းမှာ ပိုရင်းနှီး လာတော့ ကျနော်တို့ တခါတလေ နေလည်စာ အတူထွက်စားဖြစ်ကြသည်၊ တနေ့
မှာ သူ့ ကို ကြည့်ရတာ စိတ်နည်းနည်း အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေသလိုပဲ လို့ ထင်ရသည်၊ ခါတိုင်းလည်း ကျနော့်စိတ်ထဲ မှာ သူ့
ကြည့်ရတာ အိမ်တွင်းရေးပြဿနာ များ ရှိ နေမလား လို့ ထင်နေခဲ့မိတာ အဲဒီနေ့ ကျမှ သူ့ ဆီက နည်းနည်း ပါစင်နယ် ဆန်တဲ့ စကား များ
...ဂျိုး က ငါ့ကို ၀ တယ် လို့ ထင်နေတယ်...
..ဟိုက.် ..ကြံကြီးစီရာကွာ....ဘယ်က လာ ၀ရမှာလဲ...
...သူက ငါ့ကို ဖင်ကြီးမ တဲ့၊ နောက်ပြီး အိမ်ပြန်လာရင် ဘာမှ ကူဖေါ်လောင်ဖက်မရဘူး၊ တခါတလေ စားပြီး တီဗီကြည့်ပြီး ဧည့်ခန်းထဲက
ဆိုဖာပေါ်မှာတင် အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ အိပ်ခန်းထဲ တောင် ၀င်လာ မအိပ်တော့ဘူး...
...ဒေလီယာ.နင်က ဘယ်က ၀ ရမှာလဲ၊ ငါ့ အမြင်မှာတော့ နင်က ဘောဒီတော်တော်မိုကတ
်ာပဲ၊ ဂျိုးက နင်နဲ့ လာမအိပ် ဘူး ဆိုရင်တော့
ဒီကောင် ရူးနေလို့ နေလိမ့်မယ်၊ နင်က တော်တော့် ကို မိုက်တဲ့ ဟာ၊ ဘယ်ယောက်ကျား လေးက မှ မကြိုက်တဲ့သူ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး...
ဟိုက် ကျနော့် ပါးစပ်က စိတ်ထဲ ရှိတာ ထွက်သွား လိုက်တာ ဘရိတ်အုပ်ဖို့ အချိန်မမှီလိုက်၊ ရုံးမှာ ဆက်ရရ
ူ ယ်ဟာရက်စ်မန့် နဲ့
တရားစွဲခံရရင် နာအုန်းမယ် လို့ တဆက်ထဲ တွေးလိုက်မိတယ်၊
..ကျေးဇူး ပါပဲ ဦး ရယ် နင်ငါ့ ကို အဲ လို အားပေးတာ...
အဲ ဒီနောက် ပိုင်း စကားတိုလီမုတ်စတွေ ပြောရင်းက မှ ပါစင်နယ် ဂျီမေး အကောင့်တွေ ဖလှယ်ဖြစ်ကြပြီး ဂျီတော့မှာ ချပ်ဖြစ် ခဲ့ကြတယ်၊
ဒေလီယားပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တုန်းက ငါ့ကို နားလည်မှု အပြည့်နဲ့ အားပေးခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပဲ ဦး
ကျနော်းငါက အမှန်တိုင်း ပြောတာပါ၊ ငါတို့ က သူငယ်ချင်း ချင်းပဲလေဟာ
ဒေလီယားနင် အဲ လိုပြောလိုက်တော့ ငါတော်တော် ပျော်သွားတယ်၊
ကျနော်းငါ က နင် ငါ့ကို တမျိုးထင်သွားမှာတောင် စိုးတာ
ဒေလီယားဟင့်အင်း မထင်ပါဘူး ၊ ဂျိုးက အဲ ဒါမျိုး ငါ့ကို တခါမှ မပြောဖူးဘူး၊ နင် မပြောရင် သေလိမ့်မယ် ဆိုတာတောင် ပြောမှာ
ကျနော်းဂျိုး က သူ့ ဘာသာ သူ ရွှေချောင်း ဖင်ခုထိုင်ထားတယ် ဆိုတာ သိမှာ မဟုတ်ဘူး ဟီးဟီး
ဒေလီယားမြနှင်းဆီ ကရော သိလ့လ
ကျနော်းမသိဘူးထင်တာပဲ ဟင်းဟင်း
ဒေလီယားတကယ်တော့ သူ ရွှေချောင်းကြီး လက်ထဲ မှာ ဆုပ်ကိုင်ထားတာ ကို သူမသိတာ ခစ်ခစ်
ကျနော်းဟေး တော်ရင်ကောင်းမယ် နော် နင် ငါ့ကို ဖီးလာအောင်လုပ်နေတယ် ထင်ရတယ် ခိခိ
ဒေလီယားအင် ငါက ကြိုးစားနေတာလေ မသိဘူးလား
အဲ ဒီလို လေးတွေက နေ စပြီး တဖြေးဖြေး နဲ့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ပိုပိုကဲ လာလိုက်ကြတာ၊ နောက်ဆုံး တနေ့ ရုံးကနေ စောဆင်းပြီး
တနေရာမှာ ဆုံကြဖို့ ချိန်းတဲ့ အထိ ဖြစ်သွားတော့တယ်၊
ကျနော် တို့ ချိန်းထားတဲ့ ရှော့ပင်း ပလာဇာ တခု ရဲ့ ပါကင်လော့ အစွန်ဆုံးနေရာ တခု မှာ ကျနော့် ရဲ့ အိပ်ခ်ျ သရီး ဟမ်မာ ဂျစ်ကားကို ထိုး
လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ၊ ဒေလီယာ တယောက် သူ့ ကားလေး ထဲက ထွက်ပြီး ကျနော့် ကားနား ရောက်လာခဲ့တယ်၊ ကျနော့် ကားရှေ့ခန်းကို
ဆွဲဖွင့်ပြီး ဘေးမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တယ်၊ ဒေလီယာ က ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်နဲ့ ဘလောက်အင်းကျီ ပွပွ အဖြူ ကို ၀တ်ထားပြီး လက်ထဲ မှာ
ုဆံအိပ်လေး တခု ပဲ ယူလာတယ်၊ ကျနော်က သူ့ ကိုယ်ကို သိုင်းဖက်လိုက်တော့ သူ့ခေါင်းလေး ကို ကျနော့် ပုခုံးပေါ်
မှေးတင်ထားလိုက်တယ်၊ စကားစမြည် နည်းနည်း ပါးပါး ပြောဆိုပြီး တော့ ကျနော်က စလှုပ်ရှား ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ကျနော်က သူ့ကို
သိုင်းဖက်ထားတဲ့ လက်ကို သူ့ ပုခုံးပေါ်ကနေ အသာ လျှောချပြီး ဂျိုင်းအောက်က လျို လို့ သူ့ နိူ့ကြီး တွေကို ကိုင်လိုက်တယ်၊ ၀ိုး ဘယ်
အချိန်တုန်းက ချွတ်ထားခဲ့မှန်း မသိဘူး ဘရာဇီယာ မပါလို့ နိူ့ကြီးတွေကို အိကနဲ တန်းညှစ်မိတယ်၊ ကျနော်က သူ့ နိူ့တွေကို စလည်း
ညှစ်ရော သူက ကျနော့် ဘက်ကို လှည့်ပြီး ကျနော့် နူတ်ခမ်း တွေကို လာစုပ်တော့တယ်၊ ကျနော်လည်း သူ့ နူတ်ခမ်းတွေကို ပြန်စုပ်ရင်းနဲ့
လက်က သူ့ အင်းကျီ ကျယ်သီးတွေ ကို ဖြုတ်လိုက်တယ်၊ သူ့ နိူ့တွေက ကျွဲကော်သီးတွေ လိုပဲ ကြီးထွားလှလို့ အောက်ကို နည်းနည်းလေး
...ဟား..စို့လို့ ကောင်းမဲ့ နိူ့ကြီးတွေပ.ဲ ..
...နင် က ထင်လို့လား....
ပြောပြီးတာနဲ့ ကျနော်က ကုန်းစုပ်တော့တာပဲ၊ အဟီး၊ ကျနော် သူ့ နိူ့ကြီးတွေ ကို ဆုပ်နှယ် သမ ပြီး ကုံးစုပ်နေတာ ၁၅
မိနစ်လောက်ကြာတော့ ၊ စိတ်ထဲ နည်းနည်း မသန့် လာဘူး၊ ဒီဟာက ကားပါကင်လော့ ဆိုတော့ တော်ကြာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေ
မြင်သွားနိူင်တယ်၊ အဲဒါနဲ့ သူ့ ကို ခန ဆိုပြီး ကျနော့် ဟမ်မာကို စက်နိူးပြီး လမ်းသွယ်လေး တွေကနေ ယာခင်းတွေ ရှိတဲ့ ဘက်နားကို
မောင်းသွားလိုက်တယ်၊ မြေလမ်းလေးနဲ့ အရိပ်ကောင်းတဲ့ သစ်ပင်ကြီး တပင်အောက် ထိုးရပ်လိုက်ပြီးတော့ မှ သူ့ ကို
ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်၊ သူက လည်း ကျနော့် ကို ပြုံးစစ နဲ့ ကြည့်နေတယ်၊ ခုချိန်ထိ သူက ကျနော့် လီးကို ကိုင်ဖို့ မကြိုးစားသေးတော့
..နင့်ကို ငါ ပြစရာ တခုရှိသေးတယ်...
ကျနော်က ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဆွဲ ဖြုတ်လိုက်ပြီး မာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော့် ကောင်ကြီးကို အတွင်းခံ ပါအောက်လျှောချရင်း
...ပြေတာပေါ့ ဟ၊ ငါထင်တာ အေးရှား ကောင် တွေ ဆို သေးသေး လေးမှတ်နေတာ ခစ်ခစ်...
ပြောပြောဆိုဆို ပါပဲ ဒေလီယာက ကိုယ်ကို ကျနော့်ဘက်ကိုင်းပြီး ကျနော့် လီးကြီး ကို ငုံစုပ်လိုက်တော့တယ်၊ ဒေလီယာက
တကယ်လီးစုပ်ကောင်းမှန်း ကျနော် ချက်ချင်း သိလိုက်ရတယ်၊ ကျနော့် မိန်းမ မြနှင်းဆီက လုပ်ခိုင်းလို့ မရ ဘူး၊ သူ့ ကိုလည်း
အမှုတ်မခံဘူး၊ ဘာလို့ မှန်း မသိဘူး၊ ကျနော်လည်း အတင်း မတောင်းချင်တော့ဘူးလေ၊ လူပျိုဘ၀ တုန်းက ကဲ လာခဲ့ ဘူးလို့သာ
ဒေလီယာ ပုလွေမှုတ်ကောင်းမှန်း ချက်ချင်း ပြောနိူင်တာ၊ ကျနော်က ဒေလီယာ့ ကောင်းဘီကို လှမ်းပြီး ဇစ်ဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့
အနေအထားက နည်းနည်း ခက်နေတယ် သူဝတ်ထားတာက လည်း အကျပ် ဆိုတော့ ပို ဆိုးနေတယ်၊ ကျနော်လည်း အိမ်ထောင်ကျ
ပြီးကထဲ က ပြတ်နေခဲ့ရတဲ့ ပုလွေကို အခု မှ ပြန်ခံစားရတာ အပြင် ဒေလီယာကိုယ်တိုင်
ကလည်း တော်တော့ ကို အမှုတ်ကောင်းတော့ ပီးချင်လာပါတယ်၊ အဲဒါကြောင့်၊ သူ့ ကို ဆွဲထူလိုက် ပြီး သူ့နူတ်ခမ်းတွေကို
..ဒေလီယာ ငါ ပြီးသွားတော့ မယ် ထိန်းထားဖို့ မလွယ်ဘူး.
...နင်ပြီးချင်ရင် ငါ့ ပါးစပ်ထဲ ပြီးလို့ရတယ်လေ၊ ..
ဒေလီယာ က ပြန်ငုံ့ ပြီး ကျနော့် လီးကြီး ကို စုပ်ပေးပြန်ပါတယ်၊ သိပ်အကြာကြီး မခံပါဘူး၊ ကျနော့် လီးကြီးက သုတ်ရည်တွေ
. . ဒေလီယာ မျက်နှာနည်းနည်း မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူက ရပါတယ် လို့ ပြောပြီး သူ့အင်းကျီကို ကျယ်သီးတွေ ပြန်တပ်လိုက်ပါတယ်၊ ကျနော်လည်း အခုနက ကားပါကင် ကို ပြန်မောင်းလာခဲ့ပြီး သူ့ကားလေး ဘေးနားမှာ ရပ်ပေးလိုက်ပါ တော့တယ်။ တနေ့ ကျနော် အလုပ် မှာ နောက်ကျ နေတယ် လက်စ မသိမ်းနိူင်တာ က တခု၊ နောက်တခုက မြနှင်းဆီ လည်း ဒီနေ့ အလုပ်မသွားရဘူး ဆိုတော့ သူက ခလေး ကြိုလိမ့်မယ်၊ အချိန်ရတာလည်း ပါတယ်၊ ရုံးက ကျနော်တို့ ၁၆ ထပ် တခုလုံးမှာ လူတယောက်မှ မကျန်တော့ဘူးထင်တာပဲ တိတ်ဆိတ်လို့၊ ကျနော် လည်း အလုပ်လေး နည်းနည်း တနေ့စာ လက်စသတ်လိုက်တယ်၊ အတွေးပင်လယ်ပြာ ဖိုရမ် ထဲ ၀င်လိုက်ပြီး ဇာတ်လမ်း လေးတွေ လိုက်ဖတ်နေမိတယ်၊ ကိုဘိုမောင် ရေးတဲ့ စပွန်ဆာ အန်ကယ်ကြီးတွေ ဖတ်ပြီး လီးက တောင်လာတယ်၊ အင်း အိမ်ပြန်ပြီး ကိုယ့်မိန်းမ ပဲ ကိုယ်တီးရတော့မှာပဲ ၊ စပွန်ဆာ အန်ကယ်ကြီး လို ဆိုရင်တော့ မိုက်မှာပဲ လို့ တွေးနေတုန်း၊ ဗြုံးဆို အခန်းထဲ ဒေလီယာ ၀င်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်၊ …..ဟိုက် ငါကလေး ကျောင်းသွားကြိုရတော့မယ်...ကောင်းလိုက်တာ၊ စပွန်ဆာ အန်ကယ်ကြီး အရှိန်နဲ့တင်းနေတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ အကြောတွေ က နွေးထွေး နူးညံ့လှတဲ့ ဒေလီယာရဲ့ အာခံတွင်းထဲ မှာ၊ ကျနော် က ကျနော့် သားရေဖုံး ထိုင်ခုံနောက်မှီ မှာ ကိုယ်ကို လျှောချ လိုက်ပြီး ဒေလီယာ့ အာဂေါင်ထဲ ကျနော့်ကောင်ကြီးကို ၀င်နိူင်သမျှ ထိုး သွင်း ပေးရင်းက ဒေလီယာ့ ရွှေရောင် ဆံပင် လေး တွေကို ဖွပေးနေမိတယ်၊ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ ဒေလီယာ့ လည်ချောင်း ထဲ မှာ သုတ်ရည်တွေလည်း ပန်းထွက်သွားရော သူ့ ဆံပင်တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ပဲ ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်မိတယ်၊ ...နင် အချိန်ဘယ်လောက်ရလဲ...ဟေး ဒေလီယာ မပြန်သေးဘူးလား.တဗြုတ်ဗြုတ် နဲ့ ပန်းထွက်သွားပါတော့တယ်၊ ဒေလီယာ က တစက်မှ အပြင် မထွက်အောင်ကို မျိုချပစ်ရုံတင် မက ဘူး ကျနော့် လီးကြီးကို ပါ ပြောင်စင်အောင် ရက်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်၊ ကျနော်လည်း ကိုယ်တချီ ပြီးသွားတော့နာရီကို ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်၊ ..ပြန်တော့မလို့ နင့်အခန်းက မီးရောင် တွေ့နေသေးလို့ ၀င်လာကြည့်တာ...ဂျိုး က တော့ အောက်မှာ ကားနဲ့ စောင့်နေတယ် ဘာဖြစ်လို့လ.. ကျနော်က မာတောင်နေတဲ့ ကျနော့်ကောင်ကြီး ကို ဇစ်ဖြုတ် ပြလိုက်တယ်၊ ဒေလီယာ ကိုလည်း ပြုံးပြလိုက်မိတယ်၊ .. ….ဲ .. ဒေလီယာက ပြောပြောဆိုဆို နဲ့ ကျနော့် ကုလားထိုင်ရှေ့ ဒူးထောက်ထိုင် ချလိုက်ပြီး ကျနော့်ကောင်ကြီး ကို စမှုတ် တော့တာပါပဲ၊ အား ….အေး ဒေလီယာ အလုပ်ကလေး နည်းနည်း ကျန်နေလို့ ..ခွေးမသား စောင့်နေပစေတော့... ကျနော်တို့ရုံး က မီးတွေက လှုပ်ရှားမှု မရှိရင် သူ့ အလိုလို မှိန်သွားတယ်လေ၊ တခုခု လှုပ်သွားမှ မီးက ထပွင့်တာ၊ လျှတ်စစ်ဓါတ်အား ချွေတာတဲ့ သဘောပေါ့၊ တခါတခါ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ အိပ်ပျော်သွား ရင် မီးက လည်း မှိန်သွားတတ် လို့ အဲဒီ အချိန်မျိုး မှာ အသုံးချလို့ ရအောင် အလေးချိန်တူညီမှု ကို သုံးပြီး တချိန်လုံး လှုပ်နေတတ်တဲ့ အရုပ်ကလေး တွေ ဆောင်ထားရတယ်၊ ဟီးဟီး၊ .
. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX အဲ ဒီတနေ့ က နောက်အပတ်ထဲ မှာပေါ့၊ ဟီး၊ သောကြာနေ့ညနေ ရုံးဆင်းချိန်တဲ့၊ ပုံမှန် ဆိုရင် မြနှင်းဆီ သောကြာ၊ စနေ နားတဲ့ အပတ်မျိုး ဆို၊ သူ့ ညီမ ဇီဇ၀ါ က လည်း ဘယ်မှ သွားစရာ မရှိရင် အိမ်လာအိပ် တတ်တယ်၊ အိမ်မှာ တခုခု လုပ်စားကြ၊ ပြီးရင် ညီအမ နှစ်ယောက် စနေ တနေ့ လုံး ရှော့ပင်း သွာကြတယ်၊ ဆိုတော့ ကျနော့် အတွက် က လစ်ချင်ရင် လစ်လို့ ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ချင်တော့ အဲ ဒီနေ့ ကျမှ မြနှင်းဆီက အလုပ်အရေးပေါ်လို့တဲ့ သွားရမယ်၊ တဲ့ ၊ ကျနော့် မှာ ဒေလီယာနဲ့သွား ဖို့ ကို ဖျက်ရတော့ မလိုဖြစ် နေရာတုန်း ဇီဇ၀ါက သူဒီနေ့ စောလာမယ် ဖုန်းပြောလာလို့ ခလေး ပါ ၀င်ကြိုခိုင်းလိုက်တယ်၊ မြနှင်းဆီလည်း ညနေပြန်ရောက်မှာပဲ ဟာ၊ ကျနော်ကတော့ ပရောဂျက် အရေးကြီး လို့ နောက်ကျမယ်ပေါ့၊ အဟီး၊ ညနေစောင်း အလုပ်ဆင်းချိန် လူတွေ ကုန်သလောက်ရှိတော့ နဂိုလ်တိုငပ်င်ထားတဲ့ အတိုင်း တနေရာ မှာ ကျနော့်ကား ကို ရပ်ထားခဲ့ပြီး ဒေလီယာ့ကားနဲ့ ပဲ ကျနော်တို့ ထွက်ခဲ့ကြတယ်၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ချစ်ဗိမ္မန် ဖွင့်ဖို့ ကြံရွယ်ထားတဲ့ မော်တယ်ဆစ် ( ၆) ကို လစ်ကြတာပေါ့၊ လမ်းမှာ ဒေလီယာက သူ့ ဗိုဗို ကားလေး ကို စီဗီအက်စ် စတိုးဆိုင် ကားပတ်ကင် တခုထဲ ချိုးဝင်လိုက်တော့၊ .. ..တော်ပါ အခု အချိန် မရှိတော့ ပါဘူး ဒီထက် ကြာရင် ဂျိုး အပေါ်ထပ်တက်လိုက်လာလိမ့်မယ်.... .နင် က ဘာဆိုလိုတာလဲ ကွာ.ကွန်ဒန် ၀ယ်မလို့လေ နင့်မှာ မပါဘူးဆို၊ သွားဝယ်လိုက... ... ထုံးစံ အတိုင်း သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်သွား လို့ မပျော့မမာ ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့် လိင်တန်ကြီး ကို သူ့လျှာတွေနဲ့ သုတ်သင် သန့်ရှင်း ရေးလုပ်ပြီးတော့ ဒေလီယာ က ကျနော့်ကို မျက်စောင်းတချက် ထိုးလိုက်ပါတယ်၊ .. ..ဟေး ဘာဝယ်မလို့လ. .် .နင် ကြီးပဲ ကောင်းဖို့ ငါလုပ်ပေးနေတာလေ၊ ငါ့ကိုကျတော့ ဘာမှ လုပ်မပေးဘူး...ကောင်းလိုက်တာ ဒေလီယာ ရယ် ဘယ်လိုများ လုပ်လိုက်တာလဲ.အား ..ဟင်း နင် က ငါ့ ကို အသုံးပဲ ချနေတာပေါ့လေ. .ဲ ...…...အော် ဒီလိုလား ကဲ လာလေ ဟိုဆိုဖါပေါ်မျာ ငါမှုတ်ပေးမယ်.... ..အင်း ဒါဆိုလည်း ငါတို့ တနေ့ ချိန်းလိုက်ရအောင်လေ..
.... .. .ဟေး ဦး ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း အမလေး ငါ အထဲ ရောက်တော့ ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ် နင့်မိန်းမ မတွေ့ ပါဘူး.အင်း ဟုတ်မှာပေါ့ အရေးမကြီး ပါဘူး တော်ကြာ ငါဝင်သွားပြီး သူရှိနေတာနဲ့ တိုးမှာ စိုးလို့ပါ..ဟွန့် ဒါဆိုလည်း ပုန်းနေတော့ ငါနဲ့ တွေ့ရင် ဘာပြောလိုက်ရမလည်း နင် ရုံးမှာ အလုပ်များနေတယ်လို့ ပြောလိုက်ရ မလား ခစ်ခစ်..် ...ဟိုက.ကဲ သွားရအောင်ကွာ မြန်မြန်လေး.. ဒေလီယာ့ကို စကား ဟန်မပျက်ပြောရင်း တဘက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မြနှင်းဆီကား မရှိတော့ခြေ၊ .ဒါ ငါ့မိန်းမ အလုပ်လုပ်တဲ့ စတိုး ဟ၊ ငါဝင်လို့ မဖြစ်ဘူး ဟီး နင် ပဲ သွားဝယ်ပေးပါကွာ ပလိစ်စ.အိမ်ပြန်သွားပြီ ထင်တယ်..် .. .... မြနှင်းဆီ နဲ့ ဒေလီယာ ကျနော်တို့ ရုံးက ဖန်ရှင် တခု မျာ ဆုံဘူးတော့ သူ တွေ့ပြီး ပေါက်ကရတွေ ပြောနေ မှာစိုးလို့ တခါထည်း နူတ်ပိတ်လိုက်တာ၊ ကျနော်က ကားထဲ မှာ ကိုယ်ကို အသာလေး လျှောချပြီး ခေါင်းပုထား လိုက်တယ်၊ အပြင် မှာ စပြီး မှောင်နေပြီမို့ သေခြာ လူလုံးကွဲ မမြင်နိူင်သော်လည်း လိုရ မယ်ရ ကျနော်က ကြို ကာထားချင်း ပါ၊ အဲ ဒီအချိန်မှာပဲ စုံတွဲ တတွဲ ထွက်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်၊ တခစ်ခစ် ရီသံ ကြားလိုက်တာနဲ့ ဟိုက် ဒါငါ့မိန်းမ ပါလား ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်၊ အဲဒါနဲ့ အသာလေး မျက်စေ့ပဲ ဖေါ်ပြီး ချောင်းကြည့်လိုက်တယ်၊ ခုမှ ပဲ ခပ်လှမ်းလှမ်းက မြနှင်းဆီရဲ့ ဘီမန်း သရီးသာသီး အိုင်အမဲ လေး ကို သတိထားမိတော့တယ်၊ သူတို့ အဲဒီကားလေး ကို လျှောက်သွား တာ ကြည့်နေရင်းနဲ့ မှ အဲဒီဘဲ ဘယ်သူလည်း ဆိုတာ မှတ်မိသွားတော့တယ်၊ မြနှင်းဆီ ကျောင်းတုန်းက အတူတူ ကျောင်းနေဘက် ကယ်ဗင် ပဲ၊ ကပ္ပလီကောင်၊ ကျနော်နဲ့လည်း အရက် အတူသောက်ဘူးတယ်၊ ကျနော်တို့ မိသားစု ခရီးထွက် တော့ တခါပါဘူးတယ်၊ သူ့ အဲဒီတုန်းက သူ့ ကောင်မလေး က ကိုရီးယားမ ၊ အဲဒီကောင်က ကပ္ပလီ ပေမဲ့ မဲပြာနှမ်းနေတဲ့ ကပ္ပလီမျိုး မဟုတ်ဘူး၊ ခပ်ညိုညို ကြေညိုရောင် ခေါ်မလား အဲ လိုမျိုး၊ အရပ်က ခြောက်ပေကျော် တော့ ကျနော့်နဲ့ ဆိုရင် ခေါင်းတလုံး နီးပါး မြင့်နေတယ်၊ အဲဒီကောင်က လူပျို ခု ထိ တော့ မိန်းမ မရသေးပေမဲ့ ကျနော် သိတာတောင် စော် ၃ ယောက်လောက်ရှိပြီ ပြောင်းနေတာ၊ ခု သူတို့ နှစ်ယောက် တယောက်နဲ့ တယောက် ကိုယ်လုံးချင်း ထိခတ် ပြီး မြနှင်းဆီ ကားလေး ဆီကို လျှောက်သွားနေကြတာလောက် ထိကတော့ မဆန်းသေးပေမဲ့ ကျနော့် စိတ်ထဲ မှာတော့ တမျိုးကြီး ဖြစ်နေတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မြနှင်းဆီက ကားတံခါး ဖွင့်ပြီး ဒရိုင်ဘာဆိုက်မှာ မ၀င်ခင် မှာ နူတ်ဆက်တဲ့ အချိန် တယောက်နဲ့ တယောက် ဖက်လိုက်ကြပြီး ပြန်ခွာလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကယ်ဗင် က မြနှင်းဆီ နူတ်ခမ်း လေးကို လှမ်း နမ်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျနော် သွေးဆူ သွားပြီ ခွေးမသား၊ လွန်လာပြီ၊ ကားထဲ က ထွက်မလို့ လုပ်ပြီး မှ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း သတိရ လိုက်တယ်၊ ငါထိုင်နေတာ ဒေလီယာ့ကားပဲ၊ ငါ့ ကို အခုတွေ့သွားရင် လည်း ပြဿနာ ဖြစ်အုန်းမယ်၊ အခုထိကလည်း သူတို့ ဆက်ဆံရေးက ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပလဲ ကိုယ်လည်း မပြောနိူင်သေးဘူး၊ ခနစောင့်ကြည့်လိုက်အုန်းမယ်၊ ဟု တွေးကာ ပြန်ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ မြနှင်းဆီက ဒရိုင်ဘာနေရာမှာ ထိုင်ပြီး ကားစက်နိူးထားပေမဲ့ မထွက်သေးဘူး၊ ကယ်ဗင် ကလည်း ရပ်ပြီး စကားပြောနေတုန်းပဲ၊ ဘာတွေ လျှာရှည် နေတာလဲ၊ သွားတော့လေ နင်ကလည်း တော်တော်နန့်နေလား၊ ကျနော့် အတွေး မပြတ်သေးဘူး၊ ကယ်ဗင်က ကားကို အနောက်ဘက်က ပတ်သွားပြီး ရှေ့ခန်းက ပါစင်ဂျာ ထိုင်ခုံမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တယ်၊ ဟိုက် ငတ ကားထဲ ၀င်သွားပြီ၊ ဘယ်သွားကြမှာလဲ၊ ကျနော်က တဘက်ကို သည်းသည်းမည်းမည်း ချောင်းနေလို့ ဒေလီယာ ကားတံခါးဖွင့် ၀င်လာတော့ ရုတ်တရက် လန့် သွားတယ်၊ ....နင် ပေါက်ကရ ရှောက်ပြောမနေနဲ့ မတွေ့ မိဘူးလို့ပဲ ပြောလိုက် တခါထဲ. ...
. ..........ဦး . ...အင်း ဂယ်ရီဆင် တော့ ကျမကြိုလာခဲ့လို့ အိမ်ရောက်နေပြီ အမ တော့ အိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူး...ငါလည်း လောသွားတယ်.အောင်မယ် ခု မှ လောနေပြန်ပါပြီ ခစ်ခစ်...ဆောရီး ဆောရီး ...ဖြေးဖြေး ကွာ နင်က လည်း အစထည်းက ကြမ်းတာပဲလား..နင့်အမ ရော အိမ်ပြန်ရောက်ပြီလား..... .နင်ငါ့ ကို နှစ်ခါ ပြန်မှုတ်ပေးရမယ် ကြွေးရှိတယ် ခစ်ခစ်..ဟေး ဇီဇ၀ါ လား.ဘယ်လိုလဲ .သားရော အိမ်မှာလား...အား ... ဒါပေမဲ့ နောက်တော့ သူ က ပဲ ကြမ်းကြမ်းလုပ်ခိုင်းလာ လို့ ကျနော်လည်း အားသွန်ခွန်စိုက် လှုပ်ရှားလိုက်ရတယ်၊ ကျနော့်လီးကြီး သူ့ အဖုတထ်ဲ တစွတ်စွတ် ၀င်သံနဲ့ ကျနော့် ဆီးခုံနဲ့ သူ့ ဆီးခုံ တဖတ်ဖတ် ရိုက်သံပဲ အခန်းထဲ မှာ ကြားနေရတယ်၊ ကျနော် လည်း အိမ်ထောင်ကျ ကထဲက တဖုဿ ( တဖုတ်သ ) ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အပြင်ကွင်း ပထမဦးဆုံးကန်ဖူးတာ ဆိုတော့ အဖုတ်စိမ်း လည်း ဖြစ်၊ ရွှေရောင် ဆံပင်နဲ့ အဖြူမ လည်း ဖြစ်တော့ လီးမှာရော စိတ်မှာရော အရသာရှိနေ ရတာပေါ့၊ ပထမ ဆုံး အချီကတော့ သိပ်အကြာကြီ့းမဟုတ်ပါဘူး၊ နောက်ပိုင်း အချီတွေထက် စာရင် မြန်တယ် လို့ ဆိုရမှာပေါ့၊ သူရော ကိုယ်ရော ပြိုင်တူ ပြီးသွားကြတယ်လေ။ တချီပြီးသွားတော့ ခနနားပြီးတာနဲ့ ကျနော့် လီးကြီး ကို သူ့ အဖုတ်ထဲ က ဆွဲထုတ် လိုက်ပြီး ကွန်ဒန် ကို သေသေခြာခြာလေး လရည်တွေ အပြင် ထွက်မကျအောင် ဆွဲချွတ်ပြီး ရေချိုးခန်း ထဲက အမှိုက်ပုံး မှာ သွားပစ်လိုက်တယ်၊ အဲ ဒီ အချိန်မှာပဲ မြနှင်းဆီကို သတိရ လိုက်တယ်၊ အခန်းထဲ က ကုတင်နား ကို ပြန်လျှောက်လာတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန် ပြီး ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ မွေ့ယာခင်းစ ကို ဗိုက်ပေါ်အထိ ဆွဲဖုံးထားပြီး နားနေတဲ့ ဒေလီယာကို တွေ့တယ်၊ ကျနော်က သူ့ ကို ရူးတိုးတိုး ဆိုတဲ့ လက်ညိုးကို ပါးစပ်ရှေ့ မှာ ကန့်လန့်ထောင် အမှတ် အသားပြ ပြီး ကျနော့် ဆဲဖုံးကို လှမ်းယူလိုက်တော့ သူက ပြုံးပြီး ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်၊ ကျနော် မြနှင်းဆီ ဆဲဖုန်း ကို ခေါ်လိုက်တယ်၊ မက်ဆေ့ ပဲ ရတယ်၊ အဲဒါနဲ့ အိမ်ဖုန်းကို လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်၊ တဖက်က ဖုန်းကောက်ကိုင် ပြီး ဇီဇ၀ါ က လှမ်းထူးတာကြားလိုက်ရတယ်၊ ဇီဇ၀ါက အမေရိက မှာမွေးတာ ဆိုတော့ ဗမာလို မတတ် တော့ဘူး၊ တလုံးစ နှစ်လုံးစ ပဲ နားလည်တော့တယ်၊ (ကျနော့် ဇာတ်လမ်း က ဗမာလို ဆိုတော့ ကျနော် တို့ အင်္ဂလိပ် လိုပြောလည်း ဗမာလိုပဲ ရေးပြတော့မယ် နော် အဟီး ) . မော်တယ်ဆစ် က အခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး အ၀တ်အစား တွေ အမြန်ချွတ်လိုက် ကြပြီး ကျနော့် ဂတိ အတိုင်း ဒေလီယာ့ ကို ဘာဂျာ ပေးဖို့ ပြင်တော့တာပေါ့၊ တကယ်တော့ လည်း ဂတိပေးထားလို့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒေလီယာရဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် အသား အရောင်နဲ့ ပေါင်တန် တွေ က ဂတိမပေးထားလည်း ကုန်းမုတ်ချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို လှ နေတာကိုးဗျ၊ ပေါင်တန်တွေက ဖွေး ဖြုစွတ် ပြီး တော့ အဖုတ်က လည်း ပန်းနုရောင် အတွင်းသား လေး တွေနဲ့ နူတ်ခမ်းက တော့ နည်းနည်း ညို တာပေါ့လေ၊ အရည်တွေ ရွှမ်းနေပြီ၊ အဖုတ်ကတော့ ပြောင်နေအောင် ရိပ်ထားတော့ ရက်ရ မှုတ်ရတာ အဆင်ပြောတာပေါ့ဗျာ၊ သူက လည်း နည်းနည်းတော့ ထန်သဗျ ၊ ကျနော့် ဆံပင်ကို ဆွဲဆွဲ ပြီး ကျနော့် မျက်နှာကို သူ့ အဖုတ်နဲ့ အတင်း ဆွဲ ပွတ်သလို လုပ်တယ်ဗျာ ခိခိ၊ နို့ကြီးတွေကတော့ အားရ ပါးရပဲ ထွားထွားကြီးတွေ ကျနော့် လက်ဖ၀ါးတဘက်နဲ့ က အုပက်ိုင် လို့ မနိူင်ဘူး လျှံထွက်နေတယ်၊ နို့အုံကြီးတွေ ကို အားရ ပါးရ ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်နှယ်ပြီးတော့ နိူ့သီးခေါင်း တွေကို အားရ ပါးရ စုပ်တော့ သူ မခံနိူင်တော့ဘူး၊ ဦးလုပ်တော့ကွာ လို့ ပြောလာရတော့တယ်၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ကျနော့်ကောင်ကြီး ကို သူ့ အဖုတ၀်မှာတေ့ ပြီး အားရ ပါးရ ဆောင့်ထည့် ပစ်လိုက်တယ်၊ .
အင်း အဲဒါဆို မောင် ရောက်မှ ပဲ တူတူ စားတော့မယ်လေ စောင့်လိုက်မယ်၊.. .ဦး မင်း အခြေအနေကောင်းရဲ့လား …...အင်း အခု လမ်းမှာ အိမ်ရောက်ခါနီးပြီ၊...ဲ ..အခုနလေး ပဲ မောင် .ဂယ်ရီဆင်ဆိုတာက ကျနော့်သား၊ ဟင်း မြနှင်းဆီ အိမ်ပြန်မရောက်သေးပါလား၊ ကျနော် ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ လား၊ ကယ်ဗင်နဲ့ ဖြစ်နေတာလား၊ ဘယ်တုန်းထဲက ဖြစ်နေကြတာလဲ ၊ ကျောင်းကတဲကလား၊ ကျနော့် ကို အတွေးတွေက အုပ်ဆိုင်းလာတော့ ဒေလီယာကို အစွမ်းကုန် လိုးလိုက်မဟေ့ လို့ကြံထားတဲ့ ကျနော့် လီးကြီး ရံဝှု့ င်သွားသလိပဲု။ တောက် ၀ဋ်လိုက်တာက လည်း မြန်လှခြေလားဟုလည်း တွေးမိသည်၊ သူများ မိန်းမ တောင် ငါက မချရသေးဘူး ငါ့ မိန်းမ ပါသွားပြီ လို့ စိတ်ထဲ ဖြစ်မိလေသည်၊ စိတ် ကို ငြိမ်ငြိမ်ထား မလောနဲ့ ဒေါသ ဖြစ်ချိန်မှာ ဘာမှ မပြောနဲ့အုန်း၊ စသဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ဆုံးမ ပြီး အသက် မှန်မန်ှရှု နေလိုက်တာ ဒေလီယာက ..မောင်ရော ပြန်လာနေပြီလား....ဟဲလ.ို ... လို့ လှမ်းမေးလိုက်မှ သတိ ပြန်ဝင်လာတယ်၊ ဒီကြားထဲ ကိုယ့်မိန်းမ ဖြူဖြူနုနု လုံးလုံးလေး ကို ကယ်ဗင်လို မဲမဲ ထွားထွား ကောင်ကြီးက ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ကိုင် သမ နေမှာကို တွေး မိရင်း ရင်ထဲ မှာ တမျိုးကြီး ခံစားရသလိ၊ု လီးကလည်း အောကားကောင်းကောင်း ကြည့်မိလိုက်ရသလို မာတင်းထောင်ထ လာပါတော့တယ်။ မြနှင်းဆီ ပေါ် ဒေါပွသမျှ တွေကို ဒေလီယာ တယောက် ကောင်းကောင်းကြီး ခံစားသွားရရှာတာပေါ့၊ ကျနော့် တဖုန်းဖုန်း ဆောင့်သမျှ တွေကို တအီးအီး ညီးညူ ရင်းဖြင့် ကာမ အရသာကို ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် ခံစားသွားရတယ်လေ၊ ကျနော်တို့ သုံးချီလောက် ပြီးတော့ ည ၉ နာရီ လောက် ဖြစ်နေပြီ ဆိုတော့ ပြန်ဖို့ ပြင်ကြရတော့တယ်၊ ဒေလီယာက ကျနော့် ဟမ်မာ ရပ်ထားခဲ့တဲ့ နေရာကို သူ့ကားလေး ဖြင့် လိုက်မောင်းပို့ပြီး နောက် ငါတို့ အခွင့်ရရင် ထပ်ဆုံရအောင်လို့ ပြောသွားသေးတယ်။ ဒေလီယာနဲ့ လမ်းခွဲ ပြီး အိမ်ကို ပြန်လာတော့ လမ်းတလျှောက်လုံးမှာ ကားမောင်းနေရင်း က မြနှင်းဆီ ကို ဘယ်လို တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် ပြောဆို ရှင်း ရမလည်း ဆိုတာ တွေးနေခဲ့မိတယ်၊ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ်လည်း ပြန်တွေး နေမိတယ်၊ မင်းကရော သစ္စာရှိလို့လား၊ မင်းကတော့ လုပ်ချင်တာ လုပ်မယ်၊ မိန်းမ ကြတော့ မလုပ်ရဘူး ဆိုတာ တရားမလား၊ အင်း ယောက်ကျားနဲ့ မိန်းမ ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့ စည်းပုံမှ မတူတာလေ၊ စိတ်ထဲ မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စွဲချက်တင်၊ အမှုစစ် အပြစ်ပေး လျှောက်လုပ်နေမိတယ်၊ နောက်တော့ မြနှင်းဆီ ကို စိတ်ပူသွားပြန်သေးတယ်၊ ငါက လျှောက် အထင်လွဲ နေတယ် တော် ကြာ လမ်းမှာ သူ ကားအက်စီးဒန့် တို့ ဘာတို့ ဖြစ်များနေလို့ မပြန်လာနိူင်သေးတာလား၊ အိမ်ရောက်လို့ မှ ပြန်မရောက်သေးရင်တော့ ရဲ ကို အကြောင်းကြားရမလား၊ စိတ်ပူလာပြန်ပြီး ကားလက်ကိုင်ဘီး ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ တယ်လီဖုန်းမ တဲ့ပုံ ခလုပ်လေးကို လက်မ နဲ့ ဖိ လိုက်တယ်၊ ကားထဲက ဘလူးတု က ကျနော့်ဖုန်းနဲ့ တခါထဲ ဆက်ပြီးသားမို့ ဖုန်းနံပါတ်တွေက ဒက်ရ်ှဘုတ်ပေါ်က အယ်ဒီဒီ စခရင်ပေါ်မှာ ပေါ်လာတယ်၊ အိမ် ဆိုပြီး ရေးထားတဲ့ စာကို ကျနော် လက်ညိုးနဲ့ ထိလိုက်တာနဲ့ ဖုန်းက အိမ်ကို လှမ်းခေါ်တယ်၊ ... မြနှင်းဆီ အသံကို ကြားလိုက်ရတော့ ကျနော် နည်းနည်း စိတ်သက်သာ သွားတယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ အိမ်ပြန်ရောက်နေပြီပေါ့၊ . .ဟေး မြ လား ဘယ်တုန်းက ပြန်ရောက်လ. . .
.....အ.... သူ့ ဆီက ငြီးသံလေး သဲ့သဲ့ ထွက်လာပြီး ကျနော့် လည်ဂုတ်ကို တွယ်ဖက်လာပါတယ်၊ ဟင်း သူ့ အဖုတ်ထဲ မှာ အရည်တွေက အောလပုံပါလား၊ ရွဲရွဲကို စိုလို့ ဗွက်ထနေသလိုပဲ၊ ကယ်ဗင်များ သုတ်တွေ ပန်းထည့်ထားပြီး သူ မဆေးရသေးတာလား၊ ကျနော့် မိန်းမ ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေး လုံးကစ်ကစ် လေး ကို အမဲကောင်၊ ကြီး လိုးခဲ့တယ် လို့ အတွေးထဲ ရောက်လာပြန်တော့ ကျနော့် လီးကြီးက ပိုပြီးမာ လာသလိုပဲ၊ ကျနော် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် တမျိုး ဖြစ်မိတယ်၊ စာတွေထဲ မှာ ဖတ်ဘူးနေတဲ့ တချို့တွေ ကိုယ့်မိန်းမ ကို သူများလုပ်တာ ..အင်း အိုကေလေ တွေ့မယ်လေ.အ.... .အင်း တွေ့မယ်လေ. အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ကားမှာ ဆက်အပ် လုပ်ထားတဲ့ ကားဂိုဒေါင် တံခါးရီမုတ်ကို နိုပ်လိုက်တယ်၊ တံခါးအပေါ်ကို ကြွပြီး ပွင့်သွားတော့ မြနှင်းဆီရဲ့ ဘီမန်း လေး ဘေးမှာ ၀င်ရပ်လိုက်တယ်၊ အထဲ ရောက်ပြီး ဂိုဒေါင်တံခါး ပြန်ပိတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ မြနှင်းဆီရဲ့ ဘီအမ်ဒဗယူကားလေးထဲ ပြတင်းပေါက် မှန်ကနေကပ် အထဲကို ကြည့် ပြီး စပ်စု လိုက်တယ် ၊ ဘာတွေ ခြေရာလက်ရာ ပျက်နေသလဲ လို့၊ ဟင်း၊ စိတ်ထိန်းထား လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးရင်း အိမ်ထဲ ၀င်လာခဲ့တယ်၊ .ဟောမောင်လာပြီ.. မြနှင်းဆီက အပြေးလေး ရောက်လာပြီး ဖက် ရမ်း လို့ သူ့နူတ်ခမ်းထူထူ လေး ကို စုပြီး ကျနော် နမ်းဖို့ ထိုးပေးလိုက်တာနဲ့ ကျနော်က ထုံးစံ အတိုင်း ငုံစုပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးမှ ဟာ ဒီနုတ်ခမ်းနဲ့ ကယ်ဗင်ကို များ မှုတ် ပေးထားသေး လားမသိဘူး ဟု တွေးမိပြီး ပျို့ချင် အန်ချင်သလို ဖြစ်သွားမိသည်၊ အင်း သူ မှုတ်ခဲ့လည်း ခုလောက် ဆိုရင်တော့ ပါးစပ်ဆေးပြီးလောက်ပါပြီလို့ တွေးလိုက်မှ စိတ်နည်းနည်း သက်သာ သွားတော့တယ်၊ နောက်တော့ ကျနော်တို့ ညစာ အတူစားကြတယ်၊ သားကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ဒေါ်လေး နဲ့ ဆော့ ၊ ပြီးတော့ အိပ်ချိန်ရောက်လာလို့သူ့ အခန်းမှာ မြနှင်းဆီက သွားသိပ်လိုက်တယ်၊ ကျနော် ရေမိုးချိုး ပြီး လို့ သဘက်ခါးပတ်ပြီး အိပ်ခန်းထဲ မှာ ည၀တ် အင်းကျီလဲ မလို့ ပြင်နေတုန်း မြနှင်းဆီ အိပ်ခန်းထဲ ၀င်လာတယ်၊ အ၀တ်စားထားတဲ့ အခန်း ထဲက ည၀တ်အင်းကျီတထည် ဆွဲနေတုန်း မြနှင်းဆီက အနောက်ကနေ ကျနော့်ကို သိုင်းဖက်လိုက်တယ်၊ သူ့ ရဲ့ ည၀တ် အင်းကျီ ဘေဘီဒေါ ပါးပါးလေး အောက်က နိူ့သီးခေါင်း နူစ်လုံးက ထောင်မတ်နေပြီး အင်းကျီ မပါတဲ့ကျနော့် ကျောပြင် ကို လာထောက်ပြီး ပွတ်ပေးနေတော့ ကျနော့် လီးကြီးကလည်း ခါးမှာ ပါတ်ထားတဲ့ သဘက်ကြီးအောက်က နေထောင်ထလာတယ်၊ မြနှင်းဆီက အနောက်ကနေ ကျနော့် ဘိုက်သား ကြွက်သားတွေကို ပွတ်သတ်ရင်း သဘက်ကို ဖြေချလိုက် တယ်၊ နောက်တော့ သူ့ လက်ဖ၀ါးလေးက ကျနော့်ဆီးခုံကနေ တဆင့် လျှောဆင်းပြီး ကျနော့် လိင်တန်ကြီး ကို ဆုပ်ကိုင် လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့သူ့ လက်ဖ၀ါး လေးနဲ့ ဆုပ်ပြီးတော့ ဂွင်းလေး တချက်နှစ်ချက် ထုပေးလိုက်တယ်၊ ကျနော်လည်း မနေနိူင်တော့ဘူး သူ့ ဘက်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် လှည့် လိုက်ပြီး သူ့ကိုယ်လုံးလေး ကို ဖက်ပြီး သူ့ရဲ့ လှပ အိဖောင်းလှတဲ့ နုတ်ခမ်းလေး ကို ဖိနမ်းလိုက်မိတယ်၊ နောက်တော့ အရှိန်ရလာလို့ သူ့ ကိုယ်လေးကို ခါးက ဖက်ပြီး ကုတင် ရှိရာကို အသာတွန်းခေါ်သွားလိုက်တယ်၊ ကုတင် စောင်းမှာ သူ့ ဖင်ကြီးတွေကို တင်ပြီးတာနဲ့ သူ့ပေါင် နူစ်လုံးကြားကို ၀င်ရပ်ပြီး ကျနာ့်ဒူးနူစ်လုံးနဲ့ သူ့ပေါင်နူစ်လုံးကို ဖြဲကားပေးလိုက်တယ်၊ သူ့ ည၀တ် ဘေဘီဒေါ လေးက ပေါင်လယ်လောက် ရောက်ရုံလေးပဲ ရှည်တာမို့ အထူးအထွေတောင် လှန်တင်နေစရာ မလိုပါဘူး၊ အဖုတ်က တခါထဲ တန်းပေါ်နေပါပြီ၊ သူ့ ရဲ့ ဟတတ အဖုတ၀်လေး မှာ ကျနော့် လီးထိပ်ဖူးကို တေ့ပြီး တခါထည်းဆောင့်သွင်း လိုက်မပိါတယ်၊ .
ဒီနေ့ မြ အလုပ်ကထွက်တော့လေ ဘယ်သူနဲ့ တွေ့တယ် ထင်လ..ဟင် ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ခဲ့လို့လ..အဲဒါ သူ့ ကား လမ်းမှာပျက်သွားလို့လေ ထရစ်ပယ်အေ ကို ခေါ်ထားရင်း နဲ့ ဒီနားက စီဗီအက်စ် မှာ မြလုပ်တာ သိလို့ ၀င်လာတွေ့တာ၊ မတွေ့ရတာလည်း ကြာပြီ မို့တ.အင်းလေ. .အင်း အဲဒါ ကယ်ဗင်က သူ့ကောင်မလေး နဲ့ မြတို့ ဆီလာလည်အုန်းမယ်တဲ့ ဟိုတခါကလို ခရီးသွားရအောင်တဲ့ ပြောလိုက်သေးတယ်. . ဒါပေမဲ့ အခု ဗီယက်နမ် မလေးတယောက်နဲ့ အတူနေတယ်တ.....အော် ဒီကောင် လူပျိုကြီးပဲ လားခုထ.ဲ . ..ဲ့ .. .. ..ကြည့်ပြီး ပိုစိတ်တက်ကြွကြတယ် ဆိုတာ၊ အဲ လိုမျိုးကောင် ဖြစ်နေပလားပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ဗျာ၊ အဲဒီ အချီကတော့ တော်တော့် ကို ပွဲကြမ်းသွားတယ် ခေါ်ရမှာပဲ ၊ ကျနော်လည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆက်ဆံ လိုက်မိတယ်၊ သူကလည်း အရမ်းကို အပေးအယူ မျှနေတယ်၊ အဲ ဒီကုတင်စောင်းမှာပဲ ကျနော်တို့ နူစ်ယောက်စလုံး အသက်ရှုပြင်းပြင်း နဲ့ ကာမ ဘုံ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိသွားကြတော့တယ်၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ကုတင် ပေါ် မှာ တယောက်နဲ့ တယောက် ဖက်ရင်းနားနေကြရင်းမှ မြနှင်းဆီက စကားစလာတယ်၊ .... ...... . .ိ .ဲ .ကယ်ဗင်လေ မောင်သိပါတယ် ….အဲဒါ မြက လည်း အလုပ်ဆင်း ပြီ ဆိုတော့ သူ့ ကို ငါလိုက်ပို့ပေးမယ် ဆိုတော့ ရတယ်တဲ့ တက်စီနဲ့ သွားမယ် လုပ်နေသေးတယ်၊ မြက အတင်းခေါ်တော့ လက်ခံတယ်၊. .မောင်...လုပ်လိုက်လေ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ တနေရာရာ သွားကြရအောင်. .အဲဒါ သူ့အိမ် ရောက်တော့ သူ့ကောင်မလေး နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ် ခန စောင့်ပါအုန်း ဆိုလို့ ထိုငစ်ကားပြောနေရင်း .ဲ့ .အော် ဟုတ်လား...သူ့ကောင်မလေးက ပေါ်မလာပဲ အလုပ်မှာ အချိန်ပို ဆင်းရမယ် လို့ ဖုန်းဆက်တော့မှ မြလည်း ငါပြန်ရတော့မယ် ဆိုပြီး ပြန်လာခဲ့တာ. .. အင်း တော်သေးတာပေါ့ ငါ ဒေါသ ပေါက်ကွဲ ပြီး မရမ်းမိသေးလို့၊ နို့မို့ ဆိုရင် ပြဿနာပဲ လို့ကိုယ့်ဘာသာတွေးနေမိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကားနားမှာ နူတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်တာကရော၊ ဟင်း၊ မြနှင်းဆီကတော့ ငါ့ကို လိမ်မပြောလောက်ဘူးထင်တာပဲ၊ လိမ်ပြောမယ် ဆိုရင်လည်း ကယ်ဗင်နဲ့ တွေ့တာ ငါ့ကို ပြောပြ စရာမှ မလိုတာဟု ဆက်တွေးနေမိကာ ဦးနှောက်စားလာတော့သည်၊ .အော်..
....၀ါး... ဇီဇ၀ါက ရေခဲသေတ္တာထဲ က နိကပ်ဂျူ့ စ် တဗူး လှမ်း ငုံ့ယူလိုက်တော့ သူ့ ၀တ်ထားတဲ့ အင်းကျီက ကျယ်သီး မပါ ခါးမှာသာ အ၀တ်ကြိုးနဲ့ သိုင်းချည်ထားတာမို့ ရှေ့ ပိုင်း ပွင့် မထွက်သွားအောင် လက်နဲ့ စု ကိုင်ထားတယ်၊ သူက ရေခဲ သေတ္တာ တံခါးကို ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီး နောက်ပြန်လှည့်လိုက်တော့ သူ့ ပေါင်တန် တွေ ငေးကြည့်နေ တဲ့ ကျနော့် ခေါတော တထောင်အား မျက်လုံးတွေ ကို မိသွားတယ်၊ အပျို မလေး မျက်နှာ တမျိုး ဖြစ်သွားတယ်၊ ကျနော့် ကိုယ်လုံးကို လည်း ခုန လို စူးစူး စိုက်စိုက် မျက်လုံးချင်း ဆိုင် မကြည့် တော့ဘူး၊ သူ ကျနော့်နား က ဖြတ်သွားတော့ ကျနော် က ..နင် နဲ့ အဲ ဒီ ည၀တ် လေး တော်တော် လိုက်တယ် ဟ..နင်က တော်တော် ဖစ် ( ကျန်းမာရေးနဲ့ ပြည့်စုံ ) ဖြစ်တာပဲ... ပါးစပ် က ပြောလိုက်ပြီး မှ ဟ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ ဒီစောက်ပါးစပ် လို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ကျိမ်ဆဲ မိပါတယ်၊ ဇီဇ၀ါ က ပြုံးစစမျက်နှာလေး နဲ့ ၊ . ဇီဇ၀ါ က အခု မှ အိပ်ယာက ထလာပုံပဲ အပေါ်က ပေါင်လည်လောက် ရှည်တဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီ နဲ့ ရေ ခဲသေတ္တာ က ရေ လာသောက် ပုံပဲ၊ ကျနော့်ကို ခြေဆုံးခေါင်း ဆုံးကြည့်ပြီး မျက်ခုံးတချက်ပင့်ပြီး ပြုံးစစ နဲ့ အံသြသံ ၀ါးကနဲ လုပ်လိုက်တယ်၊ ဒီ ကကောင်မလေး တွေ လည်း ခက်ပါတယ်၊ ကျား ကို ကျားမှန်းမသိ ဆင်ကို ဆင်မှန်း မသိ၊ သူ့ အမ လင်မို့ သူ့ ကို အန္တယ် မရှိနိူင် ဘူးလို့ များထင်သလား မသိဘူး၊ ဟွန့်၊ သူ့လည်းကြည့်အုန်း၊ အဲ ဒီည၀တ်အင်းကျီက သူ့ အမ၊ ကျနော့် မိန်းမ ဟာ သူယူ ၀တ်ထားတာ၊ ဗစ်တိုးရိးရား စီးခရက် ကတ်သလောက် ထဲ မှာ ကျနော် က မော်ဒယ်တွေ ၀တ်ထားတာ ကြည့်ပြီး သရည်ကျလာ လို့ အဲ ဒီတုန်းက မိန်းမ ကို ဒါလေး ဈေးပေါသားပဲ ၀ယ်ပါလား မြနဲ့ ဆို တော်တော် လိုက်မယ် ဆိုပြီး ၀ယ် ဖို့ မြှောက်ပေးထားခဲ့ဘူး တာ၊ မိန်းမ က လည်း ၂ခါ မပြောရဘူး အရောင် ၃ မျိုးလောက် ၀ယ် ခဲ့တယ် ၊ ခု တော့ ဇီဇ၀ါက ခနတဖြုတ် တညတလေ လာတာ ဆိုတော့ အ၀တ်တထည်ကိုယ်တခု နဲ့ လာတာ၊ ခု သူ့ အမ ဆီက တွေ့တာ ဆွဲ ၀တ်ထားပုံရတယ်၊ အဲဒီ အင်းကျီက ပေါင်လောက်ရောက်တာ အောက်ပိုင်း က အတွင်းခံပဲ ၀တ်ထားတယ်ထင်တယ်၊ သူ့ ပေါင် တန် ဖြောင့်စင်းစင်း တွေက ကျနော့် မျက်စေ့ရှေ့ မှာ ၀င်းနေတာပဲ ၊ ဂျီး ကိုယ့် ကောင်ကြီးတောင် နိူးလာပြီ၊ ..ကိုဝင်းမော် ဆို ဗိုက်ရွဲ နေပြီ ခစ်ခစ်...တော့ တချိန်လုံး အားတာနဲ့ တီဗီရှေ့ မှ ထိုင် မနေ တာ ဟီး....နင့် အကို က အပျင်းထူ တာကိုး ငါ လည်း ဘီယာတော့ သောက်တာပါပဲ သူ့လို ..အဲလိုနဲ့ စိတ်ထဲ ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိနဲ့ ၊ လူကတော့ ဒေလီယာနဲ့ သုံးခါ၊ မြနှင်းဆီနဲ့ တခါ ဆိုတော့ တော်တော် နူံး သွားပြီး အိပ်မောကျသွားရပါတော့တယ်။ မနက် စောစော ထုံးစံ အတိုင်း ကျနော် က အိပ်ယာထတာနဲ့ ဘောင်းဘီတို ၊ တီရှပ် ၀တ်၊ အပေါ်က ချွေးစို ခံ အင်္ကျီကောက်ဝတ်ပြီး ပြေးဖို့ ထွက်လာတယ်၊ ကျနော်တို့ မြို့လေး က တောင်ကုန်းလေး ပေါ် မှာ ဆိုတော့ ရူခင်း က လှတယ် နောက်ပြီး ပင်လယ်အော် ဒေသ လို့ခေါ်တဲ့ နေရာမို့ အမြဲ တမ်းလည်း အေးနေတတ်တယ်၊ မြူခိုးတွေ ဝေလို့ပေါ့၊ သွားနေကြ လမ်းကလေး ကနေ မိုင် အနည်းငယ်လောက်ပြေးပြီး ချွေးထွက်လာတာနဲ့ အပေါ်က ချွေးခံ အိမ်င်္ကျီကို ချွတ်ပြီး ခါးမှာ ပတ်လိုက်ပြီး အိမ်ဘက် ပြန် လှည့်လာခဲ့တယ်၊ အိမ်ပြန်လမ်းက တောင်ကုန်း အတက်မို့ တော်တော်လေး ဟိုက်သွားတယ် ချွေးလည်း တကိုယ်လုံး ရေချိုးထားသလို ဖြစ်နေပြီ၊ အိမ်ထဲ ရောက်တာနဲ့ တီရှပ် ပါ ဆွဲချွတ်ပြီး မီးဖိုခန်းက အိုင်းလန်း ပေါ် ပစ်တင်လိုက်တယ်၊ ညက မြနှင်းဆီ အသီးစုံ ရောမွေ ဖျော်ထားတဲ့ ဖျော်ရည်ကို ရေခဲသေတ္တာ က ထုတ်ပြီး မီးဖိုထဲက အိုင်းလန်း ရှေ့မှာ ထိုင် လိုက်တုန်း ဇီဇ၀ါ မီးဖိုထဲ ၀င်လာတာတွေ့ လိုက်ရတယ်၊ ...
သိုင်းကျူး လို့ ပြောပြီး မှ သူ့ ကပေါင်တန် တွေ ကို လိုက်ကြည့်နေ တဲ့ ကျနော့်ကို လျှာထုတ် ပြောင်ပြပြီး သူအိပ်တဲ့ ဧည့်သည်ခန်းထဲ ၀င်ပြေးသွားပါတယ်။ ည၀တ် အင်းကျီ အသားပျော့ပျော့ အောက်က ဖင်လုံးလေး နူစ်လုံးက တုံတုံ တုံတုံ နဲ့၊ ဟီး ပြေးကိုက်ချင်လိုက်တာ၊ ကျနော်လည်း တော်တော် တော့ မွန်နေပါပြီ၊ ကျနော့် ကောင်ကြီး ကလည်း ဘောင်းဘီ ထဲ မှာ တင်းမာ ပြည့က်ျပ် နေပါတယ်၊ အဲ ဒါနဲ့ အခု န က ထုတ်ထားတဲ့ ဂျူ့စ် ခွက် ကို မော့ချလိုက်ပါတယ်၊ အေးစိမ့် နေတဲ့ ဖျော်ရည်ကြောင့် ကျနော့် ကောင်ကြီး နည်းနည်း မာန်ကျ သွားပါတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော် တို့ လင်မယား အခန်းထဲ ၀င်လာခဲ့ ပြီး ရေချိုးခန်း ထဲ တန်းဝင်၊ ရေ ခပ်နွေးနွေး ချိန် ဖွင့်လိုက်ပြီး ရေပန်း အောက် ၀င် ချိုးရင်း ကိုယ့်ကောင်ကြီး ကိုယ် ဆပ်ပြာ အမြုပ် တွေနဲ့ ပွတ်သပ် ဆေးကြော လိုက်ပါတယ်။ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX နေ့ခင်း ကျ တော့ ထုံးစံ အတိုင်း သူတို့ ညီအမ နှစ်ယောက် ရှော့ပင်း သွားကြပါတယ်၊ သားနဲ့ ကျနော် နဲ့ အိမ်မှာ ကျန် နေခဲ့တာပေါ့၊ ပထမ သားနဲ့ ဆော့နေရင်း မှ နည်းနည်း ကြာလာတော့ သူ့ ကို အိပ်စ် ဘောက်စ် ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး သူကြိုက်တဲ့ ဂိမ်း ပေးဆော့လိုက်ပြီး ကျနော့် ကွန်ပြူတာကတော အွန်လိုင်းတက်လိုက်ပါတယ်၊ ကျနော့် အွန်လိုင်း မှာ တက်နေကြ မောင်မောင်ပျား ဆိုတဲ့ ဂျီမေး အကောင့် ကို အရင် ၀င်ကြည့်လိုက်ပါတယ်၊ ဟော ပိတောက်ဝါ တောင် ရောက်နေပြီ ပဲ၊ အဗေလဗယ် မီးစိမ်းလေး ပြ နေ တယ်၊ အဲဒါနဲ့ ချပ်ကို တခါထဲ တန်းဖွင့်ပြီး နူတ်ဆက်လိုက်တယ်၊ ပျားးဟေး ပိတောက် နိူးနေပြီလား၊ ပိတောက်းနိူး နေပြီပေါ့ ၊ ပျား ရဲ့ ဘယ်အချိန်ရှိနေပလဲ၊ ဒီမှာ၊ ခစ်ခစ်၊း) ပျားးအော် ဟုတ်သားပဲ မေ့နေတာ၊ ဒီနေ့ ဘယ်မှ မသွားဘူးလား၊ ပိတောက်းဟင့်အင်း ခနနေမှ သွားမယ်၊ ပျားရော၊ ပျားးဟုတ် ပျားလည်း ခနနေမှ ထွက်မယ်၊ ခုတော့ မဟေသီ နဲ့ သူ့ညီမ တို့ ရှော့ပင်း သွားနေကြလို့ ပိတောက်းဟုတ်လား ဒါဆို ခလေးထိန်း ကျန်နေ ခဲ့တာပေါ့၊ ဟုတ်လား ခစ်ခစ်၊ ပျားးအင်း ဆိုပါတော့ ၊ဒါပေမဲ့ တကယ်ထိန်းစရာ မလိုပါဘူး၊ သူ့ဖာသာ အိပ်စ်ဘောက်စ် ဆော့နေတယ်ခု၊ အဟီး ပိတောက်းအင်း အဲ ဒါနဲ့ အွန်လိုင်း ၀င်ပြီး ဟိုဟို ဒီဒီ လျှောက်ကြည့်နေတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား ခိခိ၊ ပျားးပိတောက်က လည်း သိရဲ့ သားနဲ့၊ အချင်းချင်းတွေ ကို၊ ဟီးဟီး အဲ ဒီပိတောက်ဝါ ဆိုပြီး နစ် ယူထားတဲ့ အမျိုးသမီး နဲ့ ကျနော်နဲ့ အွန်လိုင်း မှာ ခင်နေတာ ကြာလှပါပြီ၊ သူက သူဘယ်အရွယ် ၊ အိမ်ထောင်ရလှိား ဘာညာ ၊ဘာမှ မပြောခဲ့ ပေမဲ့ ၊ ကျနော့် အကြောင်းကိုတော့ သူသိနေပါတယ်၊ နာမည်က လွဲရင်ပေါ့၊ ဟီးဟီး၊ ထုံးစံအတိုင်း ကျနော်က လည်း မြို့ ကိုတော့ အသိအကျ မပြောထားဘူးလေ၊ သူနဲ့ ကျနော်နဲ့ အချိန်က ၃ နာရီလောက် ကွာတယ် ဆိုတော့ သူက အမေရိက အရှေ့ဘက် အခြမ်းမှာ ဖြစ်လိမ့်မယ် ။ ပိတောက်ဝါ နဲ့ ကျနော် စ ရင်းနှီး လာတာက ဒီလိုဗျ၊ ကျနော် က အင်္ဂလိပ် နှာစာအုပ်တွေ အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ တွေ့ သမျှ အကုန် လိုက်ဖတ်ပြီး တော့ တဖြေးဖြေး ရိုးလာတဲ့ အချိန်၊ ဗမာ လူကြီး ဆိုက်တွေ က အလျိုအလျို ပေါ်လာကြတော့ ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲ ကျ ဆိုသလို ဖြစ်ပြီး အငမ်းမရ ရှောက်ဖတ် ပါလေရော၊ ဖတ်လို့ ကောင်းလွန်းတော့ ၊ ရုံးမှာ အချိန်အားတိုင်း ၊ အိမ်မှာ အချိန်ရတိုင်း ၀င်ဖတ်ပစ်လိုက်တော့၊ ဖတ်စရာ က ခနလေးနဲ့ ကုန်သွားတယ်ဗျ၊ အွန်လိုင်း စာရေးဆရာ တွေကလည်း ဗျာ၊ ပြီးအောင် မရေးဘူး၊ ဟိုတစ၊ ဒီတစ၊ တန်းလန်း နဲ့၊ ဇာတ်လမ်းကောင်းနေပြီ ၊ အရှိန်ရနေပြီ ဆိုရင် ပျောက်သွားပြန်ပြီ တပါတ်နူစ်ပါတ်၊ အဲ တက်တက် ကြည့်ရင်း လည်ပင်း ရှည်လာတာနဲ့၊ ဖတ်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ် အပြာစာအုပ်တွေထဲ က ဗမာတွေ ကြိုက် နိူင်မဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး .
.တခု မှီး ပြီးရေး တော့ ပို့စ် အနေနဲ့ တင်လိုက်တယ်၊ ဟီးဟီး ပထမ ပို့စ်မှာတင်၊ သိုင်းကျူး နှိပ်ကြလိုက်ကြတာ အများကြီးပဲ ၊ အရှိန်လည်း ရလာတယ်၊ အမေရိကား ရောက်နေတာ ကြာပြီ ပေမဲ့ ဗမာပီပီ မြှောက်ပေးရင် ဂွေးတက် အောင် က မယ် ဆိုပြီး စာစရေးဖို့ ပြင်တော့ တာပဲ ၊ တကယ်တမ်း ရေးတော့ မှ အွန်လိုင်း က ငါ့ ဆရာတွေ အရည်အချင်း ကောင်းကောင်း ဇာတ်လမ်း တပုဒ် ပြီးအောင် ရေးရတာ လွယ်တဲ့ အလုပမ်ဟုတ်ပါလား လို့ သဘောပေါက် လာရတယ်၊ ဟီး၊ ဒါပေမဲ့ စာရေး ရတဲ့ အရသာ၊ တွေ့သွားပြီ ဆိုတော့ အဟီး ကြိုးစား ရေးနေမိတယ်၊ အဲ ဒီမှာ အွန်လိုင်းပေါ် မှာ မိတ်ဆွေ တွေ အများကြီး တိုးလာရတော့တာ ပေါ့၊ ယောက်ကျား၊ မိန်းမ၊ အခြောက်၊ စုံနေတာပါပဲ၊ အဟီး၊ တချို့ ဆိုလည်း ယောက်ကျားနာမည်နဲ့ ၊ မိန်းမ၊ တချို့ က မိန်းမ နာမည် နဲ့ ယောက်ကျား ကြီးတွေ၊ အဟီး၊ အားလုံးလည်း အတွေ့ အကြုံ ရှိကြမျာပါ၊ အတို ပြောရရင်တော့၊ ပြောနေ ဆိုနေ ရင်းနှီး သွားရင်၊ မိန်းမ လား ယောက်ကျားလားက သိသာတယ် ဗျ၊ မိန်းခလေး နစ်နဲ့ အွန်လိုင်း မှာ လှုပ်ရှားနေပြီး၊ သူဘယ်မှာနေတယ် ဘာလုပတ်ယ်၊ စတာတွေ ရှောက်ပြောနေရင် ကျနော် က တာ့တာ ပဲ ဗျ၊ လန့်နေပြီ ဟီး၊ ကျနော် လို ယောက်ကျား တွေတောင်၊ ကိုယ့်အိုင်ဒီ ကို မရိပ်မိ ရအောင် မနည်း ဖုံး ကာနေရတာ၊ ဘယ်မိန်းခလေးက၊ သူ ဒီလိုပွန်ဆိုက် သွားနေတာ လူ သိစေချင်နေတာ က မရိုးသားဘူး လို့ ထင်တာပဲ ကျနော်က တော့ ဝေါင်ဝေါင် ရှေးတယ်၊ ဟီးဟီး၊ ပိတောက်ဝါ ကတော့ တမျိုးဗျ၊ သူက နည်းနည်း စွာတယ်၊ အွန်လိုင်းမှာ တက်နေသူ တွေ ပေါက်ကရ လာပြောရင် သူက ပြန်ဆော်တတ်တယ်၊ အတွေ့ အကြုံလည်း နည်း ပုံ မရ ဘူး၊ စာလည်း ဖတ်တယ်၊ ကျနော့် ဇာတ်လမ်း လေး ကို ထောက်ပြရင်း နဲ့ သူနဲ့ စကား စပြောဖြစ်လာတယ်၊ ပထမ ပီအမ်၊ နောက်တော့ ဂျီတော့ ပေါ့၊ ရင်းနှီးတာ ကြာလာ တာနဲ့ အမျှ သူနဲ့ ကျနော်နဲ့ ပို ပွင့်လင်း လာကြတယ်၊ သူများ ရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ကို ဆွေးနွေး ကြတယ်၊ နောက်တော့ ကျနော့် အပြင် အတွေ့ အကြုံတွေ ကို မေးတယ်၊ သူ ကတော့ ဘဲ ၃ ဗွေ လောက်တော့ ကြုံဖူးတယ် လို့ ဆိုတာ ပဲ ၊သိပ် အသေးစိတ် တော့ မပြောဘူး၊ မိန်းခလေး ဆိုတော့ ကျနော်လည်း သိပ်မမေးဘူး၊ ကျနော့် အတွေ့ အကြုံတွေ တော့ သူ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ကျနော်က လည်း မိန်းခလေး တယောက်ကို အဲ လို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောခွင့် ရတာဆိုတော့ အသေးစိတ် တစ်တစ်ခွခွ ကို ပြန်ပြောပြတတ်တယ်၊ အဲ လိုနဲ့ နောက်ပိုင်း တယောက်နဲ့ တယောက် ဖလပ် တဲ့ အဆင့် ၊ ရီးတီးယားတား ပြောတဲ့ အဆင့် ရောက်လာတယ်၊ သူ နဲ့ ပြောကြည့်သလောက်က တော့ သူလည်း ခေသူ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ပညာတတ် ထဲ က ဆိုတာတော့ သိသာတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူက လုံးဝ ကို သူ့ အိုင်ဒီ ကို ကျနော် ဘယ်လိုမှ စပ်စုလို့ မရ အောင်ကို ထိန်းထားနိူင်တယ်ဗျ၊ အဟီး ဒီနေ့ လည်း မနေ့ က ဒေလီယာနဲ့ ကျနော် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟာကို ဇာတ်ကြောင်းပြန်နေတာ၊ သူက စိတ၀်င်တစားမေး တယ်၊ ကျနော် က ပြန်လာပြီး မိန်းမ နဲ့ တချီ လုပ်လိုက်သေးတယ် ဆိုတော့ ဘုရားတ သွားတယ်၊ ဟီး ၊ ပျားက တော်တော် လုပ်နိူင်တာပဲ တဲ့၊ ကယ်ဗင် နဲ့ ကျနော့် မိန်းမ ကို မသင်္ကာ ဖြစ်နေတာတော့ ဘယ်ပြောမလဲ ဗျာ၊ အဟီး၊ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်ပြန် မထောင်းပါဘူး၊ နောက် ဒီမနက် မြင်လိုက်ရတဲ့ ခယ်မ လေး အကြောင်း ပြောလိုက်၊ တယ်၊ ခယ်မ လေး ကို အရမ်းကို လုပ်ချင်နေမိတဲ့ အကြောင်း ပေါ့ ၊ ဘယ်လို လုပ်ချင်တယ် ညာလို လုပ်ချင်တယ် ပြောရင်း ကျနော့် လီးက တောင်လာတယ်၊ ဟီးဟီး၊ ပိတောက်ဝါ ကတော့ ပြောပါတယ်၊ သတိထား ဖို့ ၊ အိမ်ထောင်ရေးကို ထိခိုက်မယ်တဲ့ ၊ သိပါတယ် လို့ ကျနော်က လည်း စိတ်ထဲ လုပ်ချင်တာ ပြောတာပါပေါ့၊ အဲ လို နဲ့ သားတော်မောင်က ဗိုက်ဆာပြီ ဆိုပြီး လာပြောတော့၊ ပိတောက်ဝါ ကို နုတ်ဆက် လော့အောက် လုပ်ပြီး သားအဖ နှစ်ယောက်၊ ဘာဂါ ဆိုင် ကို မောင်းထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ နောက် နေ့ ရုံးမှာ အတွေးပင်လယ်ပြာ တက် ပြီး စာဖတ် မလို့ ပြင်နေတုန်း ဖုန်းမြည်လာတယ်၊ ကျနော့် ဘော့စ်၊ လီလီ ဖြစ်နေတယ် ကျနော့် ကို သူ့ ရုံးခန်း ခန လာခဲ့ ပါလား ဆိုတော့ ဖွင့်လက်စ ၀က်ဆိုက် စာမျက်နှာ လေး တွေ ပိတ် ပြီး လစ်ခဲ့ရတယ်၊ လီလီ က သူရုံးခန်း ကျယ်ကြီး ထဲက မဟော်ဂနီ စားပွဲ ကြီး အနောက် မှာ ထိုင် ပြီး စာရွက်စာတမ်းတွေကို ငုံ့ဖတ်နေတယ်၊ ကျနော်က ဖွင့်ထားတဲ့ သူ့တံခါးကို ပဲ ဖွဖွလေး ခေါက် အသံပေးလိုက် မှ မော့ ကြည့်လာ ပြီး ၊ .ဟေး ဦး လာ ထိုင်ကွာ... .
...ကိစ္စ မရှိ ပါဘူး လီလီ၊ ငါက လည်း အလုပ်နဲ့ ပါတ်သက်ရင် ဘယ်တုန်းက ငြင်းဘူး လို့လည်း. …... လီလီ က အဲ တော့မှ ကျနော့် ကို အသေးစိတ် အကြောင်းအရာ တွေ ရှင်းပြပါတယ်၊ အင်း ဒီပုံ နဲ့ ဆို ကျနော် ဟို မှာ တပါတ်လောက် ကြာမဲ့ပုံပဲ၊ မတတ် နိူင်ဘူးလေ၊ ကိုယ့် ဘော့စ် ခိုင်းနေမှ တော့၊ ကိုယ့်ဘော့စ် ကလည်း တကယ်တော့ မျက်နှာက တော်တော် ချောတာ၊ ဟို တရုပ်သိုင်းကား အခန်းဆက် တွေ ထဲ က မင်းသမီး မျက်နှာမျိုး လေး၊ ဘော်ဒီက သွယ်သွယ်ပေမဲ့ ရင်နှစ်မွှာက ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး နဲ့ တင်က လည်း လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေး၊ သားသမီး မွေးခဲ့ ဘူးတယ် လို့တောင် ယုံလောက် စရာ မရှိတဲ့ ဘော်ဒီမျိုး၊ သူပြုံးလိုက်တိုင်း ဝိုင်းဝိုင်း လေး ခွက၀်င်သွားတဲ့ ဘယ်ဘက်ပါးပေါ်က ပါးချိုင့်လေး ကလည်း အရမ်းကို ချစ်စရာ ကောင်း ၊ ကျနော့် အတွေး ဆင်ရိုင်းနဲ့ ခနခန အနင်း ခံရ တဲ့ မိန်းမ တွေ ထဲ မှာ သူလည်း ဘယ်လွတ် လိမ့်မတုန်း၊ အဟီး၊ နာမည် အပြည့် အစုံက လီလီလင်း တဲ့ ၊ ဘာလို့ ယောက်ကျား နောက်ဆုံးနာမည် မယူထားတာလည်း တော့ မသိဘူး၊ အရေးမကြီးပါဘူး ကိုယ်နဲ့ မှ မဆိုင်တာ၊ အဟီး။ ကဲ ခုတော့ မြနှင်းဆီ နဲ့ ကယ်ဗင် ကိစ္စ လည်း မပြတ် မသား၊ ခရီး ထွက်ရတော့မယ် ဆိုတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ခလေး ထိန်း ခေါ်ဖို့ လုပ်တော့ ဇီဇ၀ါက သူ ကျောင်းက ခနပိတ် တဲ့ အချိန်မို့ အိမ်မှာ နေပေးမယ် တဲ့ ၊ ဖလော်ရီဒါ မပြန်တော့ ဘူး၊ လေယဉ်စားရိတ် အကုန် ခံမဲ့ အစား၊ ကျနော်တို့ ဆီက ပဲ ခလေးထိန်း၊ အိမ်စောင့်ခ ယူ ပြီး စာကျက်တော့မယ်တဲ့ ၊ ငလယ်မ လေး၊ အင်းလေ၊ ကိုယ့် အတွက်လည်း ကောင်းတာပေါ့၊ နောက်နေ့ ပဲ ကျနော်၊ လေယဉ်နဲ့ မနီယားပလိစ် ကို ရောက်လာခဲ့တော့တာပေါ့။ ..ဘာ ဖြစ်လို့ လည်း နင့် မှာ တခြား အရေးကြီး ကိစ္စ ရှိလို့လား...မဟုတ်ပါဘူး ဖြစ်ပါတယ်.အဆင်မပြေရင်ပြောလေ.........ဘယ်ကိုလည်း....ဟိုက် မင်နီဆိုတာ ကို. …...အဟီး..ဒီတခါကတော့ ငါ့ အလုပ် ပါ၊ ဒါပေမဲ့ ငါ့ မှာ၊ လူမှုရေး ကိစ္စ လေး တခု နဲ့ တိုက်ဆိုင် နေလို့ ငါ့ကိုယ်စား သွားပေးစမ်းပါလိ.ဦး နင့် ကို ငါ အားတော့ နာတယ်၊ အရေး အကြောင်း ဆိုရင် နင့် ကိုပဲ ငါ ယုံတော့ ပိုခိုင်းမိနေလား မသိပါဘူး.ငါ တခုခု စဉ်းစားရတာပေါ့.ု့ ... …. . .မင်နီယားပလစ်..မရောက်တာလည်း ကြာနေပြီ ဆိုတော့ ငါလည်း သွားချင်ပါတယ်. . .လို့ ထုံးစံ အတိုင်း သူ့ ရဲ့ ပါးချိုင့်လေး တဖက် ပေါ်တတ် တဲ့ အပြုံးလေး နဲ့ လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်၊ ကျနော့် ဘော့စ် က ဘရန့်ချိဖ် လို့ ခေါ်မလား ကျနော်တို့ ဌာနမှုး ပေါ့၊ သူက တနိူင်ငံလုံး က ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီ ခွဲ တွေ ရဲ့ ထောက်အကူ ပေး တဲ့ ဌာန တွေ အားလုံး ရဲ့ အချူပ်ပေါ့၊ တရုပ်မ လို့ ရင့်ရင့်သီးသီး မသုံးရက် လောက်အောင် ချောမောလှသူလည်း ဖြစ်တယ်၊ ငယ်ငယ်တုန်းက မယ်ပြိုင်ပွဲ ၀င်ဘူးတယ် ဆို လား ကောလဟာလ တွေ လည်း ကြားဖူးတယ်၊ ခုတော့ အသက် ၄၀ ကျော်ကျော်လေး မို့ လှတုန်း ပတုန်း အရွယ် ပေါ့၊ .
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ကျနော် က အလုပ်က စီစဉ်ပေးထားတဲ့ မနီယားပလိစ် တက္ကသိုလ် ဟော်တယ်မှာ တည်း တယ်၊ တက္ကသိုလ၀်န်းထဲ မှာ နေတဲ့ ကျနော့် မိန်းမ ရဲ့ အမ ခရေ ဆီကို မိန်းမ က ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဗမာအစား အစာ တွေ ပေးဖို့ လှမ်းဖုန်းဆက် ပြီး လာယူ ဖို့ ချိန်းလိုက်တယ်၊ ခရေ နဲ့ တောင် ကျနော် နဲ့ မတွေ့တာ ကြာ လှပြီ၊ ခရေက မြနှင်းဆီ တို့ မောင်နှမ တွေ ထဲ မှာ အမ အကြီးဆုံး လေ၊ အိမ်ထောင် မကျ သေးတော့ အပျိုကြီး ပဲ ခေါ်ရမှာပေါ့၊ တကယ် အပျို စစ်လား မစစ်လားတော့ ခုခေတ်ကြီးထဲ မှာ ဘယ်လို ပြောမလဲ ဟီးဟီး၊ ပစ္စည်းလာယူတော့ မှ ပဲ မခရေ ကို သေခြာကြည့်ဖြစ်တယ်၊ သူက ကျနော့် မိန်းမ မြနှင်းဆီ လိုတော့ မချောဘူးဗျ၊ ညီအမ ဆိုတော့ ရုပ်က တော့ ဘယ်နေရာ သွားဆင်သလဲ မသိ၊ ခတ်ဆင်ဆင်ပဲ၊ သူက မျက်နှာ နည်းနည်း ရှည်တယ်၊ လူက ညှက်ညှက်လေးပဲ ဒါပေမဲ့ ခါးလေး က သိမ်နေပြီး တော့ ဖင်ကြီး တွေ နိူ့ကြီး တွေ က ကြီးထွား အောင်မြင်လိုက်တာ၊ ဟီး၊ ကျနော့် ခေါင်း ကို ခါထုတ် ပြစ် လိုက်ရတယ်၊ ငါ့ မလည်း အဲ လို အတွေးတွေ ကြီးပဲ၊ မကောင်းပါဘူး၊ သူတို့ ငါ့မျက်လုံး ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရိပ်မိသွားနိုင်တယ် လို့ တွေးမိသေးတယ်။ သူက ကျနော့် ဘာအစီအစဉ် ရှိသေးလည်း ဆိုတော့ ဒီည တော့ မရှိသေးဘူး ဆိုလိုက်လို့ သူညစာ တခုခု ကျွေးမယ် ညနေ လာခေါ် မယ် လို့ ပြောပါတယ်၊ ကျနော်ကလည်း အိုကေ ပေါ့၊ မြို့ စိမ်း မှာ တယောက်ထဲ ပျင်းနေမဲ့ အတူတူ ၊ မနက်ဖြန် မနက်တော့ ၊ အဲ ဒီကျောင်းဝန်းထဲ က စမ်းသပ်ခန်း တခု မှာ တတ် ထားတဲ့ ကျနော်တို့ စနစ် တခု ပြဿနာ တက် လို့ တိုင်ထားတာ သွားစစ်ပေးရမှာ၊ နောက် ပြီး ဒီထက် ပိုကောင်းတဲ့ စနစ် ကို ၀ယ်ဖို့ လည်း ဆွယ်ပြီး ရောင်းဖို့ ပြင်ဆင် ရအုန်းမှာလေ၊ အဟီး၊ ညနေကျတော့ ဆဲ ဖုန်းကို ဆက်တယ် ဆင်းလာတော့ တဲ့၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ကမန်းကတမ်း အောက်ဆင်းလာခဲ့တယ်၊ ဘယ်သွားစားကြမလည်း မေးတော့ ဘာအစားအစာကြိုက်လည်း တဲ့၊ နောက် တော့ မစားခင် တခုခု သောက်ကြ မလားတဲ့၊ ဘား ဖြစ်ဖြစ် ကလပ်တခုခု သွားမလားတဲ့၊ ကျနော်တောင် အံသြ သွားတယ်၊ ဟား ဒီအပျို ကြီး တယ်ဟုတ်ပါလား ပေါ့၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့ လို အရွယ်လောက် တွေ သောက်တဲ့ ဘားတခု ရောက်သွားတယ်၊ အဲဒီ ကနေမှ ဘားဖလိုင်း ရောက်သွားတယ်၊ ဆူညံပြီးဘာတွေ တီးနေမှန်း မသိတဲ့ တီးဝိုင်းနဲ့ အခန်းလည် မှာ ကခုန်နေကြတဲ့ လူတွေ နဲ့ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ လည်း သွေးဆူ ပြီး ပိုးကူး လာတော့ သူတို့ လိုပဲ ၀င် ရောက် ခုန်ပေါက် ကနေမိကြတယ်၊ ပထမတော့ မခရေ နဲ့ ကျနော် နဲ့ က တယောက်နဲ့ တယောက် မထိပါဘူး လက်တကမ်း အကွာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကနေကြတာ၊ သူလည်း ကျနော့် လို တကီးလား ရှော့ တွေ ချထားတော့ မျက်နှာလေး လည်း ရဲ နေတယ်၊ အဲ ဒီမှာ ဘဲ တဗွေက သူ့ ကို လာနူတ်ဆက် ပြီး သူနဲ့ တွဲက ဖို့ ခေါ်တယ်၊ မခရေက ခေါင်းယမ်း ပြပြီး ကျနော့် ကို လက်ညိုး ထိုးပြတယ်၊ အဲ ဒီဘဲက ကျနော့်ကို လှည့်ကြည့်ပြီး လက်ဆွဲ နူတ်ဆက် ဖို့ လက်ကမ်းပေးတော့ ကျနော်လည်း ဘာမှန်း မသိ လက်ပြန်ဆွဲ နူတ်ဆက်လိုက်ရတာပေါ့၊ မခရေက ချက်ချင်း ဆိုသလိုပဲ ကျနော့် နား ဖြတ်ကနဲ ရောက်လာပြီး ကျနော့် လက်မောင်းကို သမီးရီးစား လိုဖက်တွယ်လိုက်ပြီး ဗမာလို မြန်မြန်လေး ပြောလိုက်တယ်၊ .. ပြီးမှ၊ အဲ ဒီဘဲ ကြီးနဲ့ ကျနော့်ကို မိတ်ဆက်ပေးတယ်၊ သူတို့ ကျောင်းက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် ပရော်ဖက်ဆာ တယောက်ပဲ တဲ့၊ ဘဲ ကြီးက ထိပ်ပြောင် နေပြီ ၊ နှာခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ တော်တော်တော့ ဘူးမဲ့ကောင်ပဲ လို့ တွေးမိတယ်၊ တချိန်ထဲ မှာပဲ ကျနော့် လက်မောင်းမှာ လာအိနေတဲ့ မခရေ ရဲ့ နိူ့ ကြီး တွေကို လည်း သတိထားမိတယ်၊ ဘရာဇီယာက ပဲ ပျော့လွန်း ပါးလွန်းလို့လား ၊ မခရေရဲ့ နိူ့သီး ခေါင်းတွေက ကျနော့် အသားကို ခဲတံ နဲ့ ထောက်ထားသလိုပဲ ၊ ဟီး ကျနော့် ကောင်ကြီး က မာလာတယ်၊ ကျနော့် ဘယ်ဘက်လက် နဲ့ မခရေ နဲ့ ခါးလေးကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ပဲ ဖက်ထားလိုက်တယ်၊ ငတ ကြီးလည်း သိပ်ကြာကြာ စကားမပြောနိင်ူပါဘူး သီချင်းသံ တွေက ဆူညံလွန်းနေလို့ နူတ်ဆက်ပြီး ဘေးနားက ကောင်တာ ဘေးက ခွေးခြေကုလားထိုင် အမြင့်ပေါ် မှာ သွားထိုင်နေတယ်၊ သူ့ နေရာက ဆိုရင် ကျနော် တို့ ကို မြင်နေရတာ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် အခုတော့ ရင်ချင်းအပ်ကပ်နေ လိုက်တယ်၊ ကျနော့် လက်ဖ၀ါး တွေ က အမှတ်တမဲ့ လိုနဲ့ မခရေရဲ့ ခါးလေးကနေ အောက်လျှောကျ သွားပြီး မခရေရဲ့ တင်သား လုံး အိအိ ကြီးကို သွား ပွတ်မိလို့ တချက် ဆုပ်ညှစ်လိုက်တော့၊ ကျနော့် လက်မောင်းကို သူ့ လက်နဲ့ ဆွဲ ဆိတ်တာ ခံလိုက်ရတယ်၊ မခရေ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မျက်စောင်း တချက် လှမ်းထိုးလိုက် တာတွေ့ ရပေမဲ့ စိတ်ဆိုးတဲ့ ပုံ မပြ၊ လို့ ကျနော်က ဘယ်ဘက်က မခရေ ခါးကလေးကိုင် ညာဘက်က ..ု့ .ဟေ့ ရင်မှုး နင့် ကို ငါ့ ရီးစား လို့ ပြောထားတယ် သိလား၊ ဒီကောင်ကြီး ငါ့ကို အတင်းကပ်နေလိ.
..ဖြစ်ပါတယ်၊.ဒါပေမဲ့ ကျနော်က မမ ကို လုပ်ချင်နေတာ ကြာလှပြီ ဆိုတော့ ခုလို အခွင့်ရတော့ မမ အဖုတ်လေး ကို လုပ်ချင်လ.မမ ဖြစ်ရဲ့လား . ကျနော် ဘာပြောရမှန်းမသိ ကြောင်နေတုန်း မခရေက ကျနော့်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး ကျနော့် ဘောင်းဘီ ခါးပတ်ကို ဖြုတ်၊ ဇစ်ကို လည်း ဆွဲ ဖြုတ် ပြီး ပေါင်လည် ထိ ဆွဲချလိုက်တယ်၊ နောက် တော့ ကျနော့် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို လည်း ဘောင်းဘီ ဆွဲချထားတဲ့ နေရာထိ တွန်းချ လိုက်တယ်၊ ကျနော့် ကောင်ကြီးက ဖြောင်းကနဲ ထွက်လာတာပေါ့၊ မခရေ က သူ့ လက်ကလေး နဲ့ အသာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး သူ နူစ်ခမ်းလေး နူစ်ခုကို ဟ လို့ ကျနော့် ဒစ်ထိပ်ဖူး ကို ငုံစုပ်လိုက်တယ်၊ .. . ….ကျနော့် အခန်းပြန်ကြရအောင်နော်. မခရေ ကတော့ နွားကလေး သူ့ အမေ့ နိူ့ကို စို့ သလို အားရ ပါးရ တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေးနေတော့တယ်၊ ကျနော့် ရဲ့ ကောင်ကြီးက မတရားတောင် လာတာမို့ မခရေ ရဲ့ အာဂေါင်လေး ကို သွားထိုးမိ တော့ မခရေ ခမျာ အော့ ချင်သလို ဖြစ်သွားတယ်၊ .ို့ .ကိုယ်ထင်တာ ယောက်ကျားလေး တွေက ပါးစပ်ထဲ ပြီးတာ ကြိုက်တတ် သလားလိ.....မောင်ရင်မှုး ခနလေး .မ ခရေ..အား.ကောင်းလိုကတ်ာ မခရေ ရယ်၊....ကဲ သူ က ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲ........အ...ဟွန့် ဒါဆိုရင် လည်း သဘောပဲ.အင်း ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်လေ မမ .ထိပ်လေး တင် စုပ်လေ မ...အင်. ကျနော့် အခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ ကျနော် တို့ နူစ်ယောက်ရဲ့ အနမ်းတွေ က ကြမ်းလာကြတယ်၊ မခရေနဲ့ ကျနော် နဲ့ တယောက်ကို တယောက် တအားဖက်ပြီး နူစ်ခမ်းချင်း ဖိကပ် လို့ ၊ ရမက်လှိုင်းထန် တဲ့ အနမ်းတွေ နဲ့ အငမ်း မရ နမ်းမိကြတယ်၊ နောက် ကိုက မခရေ အင်းကျီ ကို ချွတ်မလို့ လုပ်တော့ မခရေ က ခန တားပြီး၊ . .ု့ ..သူ့ တင်ပါးလုံးကြီး တွေကို ပွတ်ပေးရင်း ဆက်က နေ လိုက်တယ်၊ ကျနော့် ကောင်ကြီးက လည်း ဘောင်ဘီအောက်က ခုန်းထ လာနေပြီူး မခရေ ရဲ့ ပေါင် အရှေ့ ဘက်ကို ပွတ် မိနေတယ်၊ မခရေက သူ့ လက်တွေနဲ့ ကျနော့် လည်ဂုတ် ကို တွဲခိုထားပြီး ကျနော့် ရင်ဘတ်မှာ သူ့ မျက်နှာ တခြမ်း အပ်ထားတယ်၊ မခရေ ရဲ့ အသက် ရူသံ တွေလည်း မြန်နေတယ်၊ အဲ လို ပွတ်နေရာက ကျနော် သူ့ မျက်နှာလေး ကို မေးဖျားက ကိုင်မော့ ပြီး မခရေ ရဲ့ နီထွေးထွေး နှတ်ခမ်း အစုံကို ငုံစုပ်လိုက်မိတယ်၊ .... ကျနော်လည်း မခရေ ကနေ မမ ဖြစ်သွားပြီ အဟီး၊ ဒီလောက် ကိုယ့်လီး ကို ကုံးစုပ်ပေးနေ မှတော့ မခရေဆိုတာ ကြီး က သိပ်တစိမ်းဆန်နေ မလားလို့ပါ။ မခရေ က သူ့ ပါးစပ် ထဲက ကျနော့် လီးကြီး ကို ခန အပြင် ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး .
......ကဲ ကနော်က ပထမ ဆုံး အချီ ကို အချိန် မဆွဲချင်တော့ ဘူး၊ မမ ဟိုဘက်လှည့် ကုတင်ပေါ် မှာ မှောက်လိုက်၊ တတောင် ထောက်ထားလိုက်၊ … မခရေ က ကျနော် ပြောသလို လုပ်နေတုန်း ကျနော် က မခရေ စကဒ်လေး ကို လှန်ပြီး အောက်က အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး ကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်တယ်၊ မခရေ ရဲ့ ညာဘက်ခြေထောက်က ဒီအတိုင်း ဆန့်ဆန့် ရပ်နေတဲ့ အတိုင်း ထားလိုက်ပြီး မခရေ ရဲ့ ဘယ်ဘက် ခြေထောက်ကို ဒူးကွေး ပြီး ကုတင်မွေ့ယာပေါ် တင်လိုက်တယ်၊ မခရေ ပေါင်ကြားက ဟ သွားတဲ့ နောက် မှာ ကျနော် ရပ်လိုက်တယ် ၊မခရေ ပေါင်ခွဆုံ က အဖုတ်လေး ကို ကျနော့် လက်ဖ၀ါးနဲ့ ကိုင် လိုက်တော့ အရည်တွေ က ရွဲနစ်နေ တာပဲ၊ ကျနော် မခရေ ကို ဘာမှ နူးစရာ မလိုတော့ ဘူး ဆိုတာ သိရတော့ ကျနော့် ကောင်ကြီး ကို မခရေ အဖုတ၀်မှာတေ့ လိုက်တယ်၊ နောက်တော့ ဖြေးဖြေး ချင်း ဖိသွင်းလိုက်တယ်၊ အိုး မခရေ ရဲ့ စောက်ခေါင်း အသားလေး တွေက နွေးထွေးပြီး နူးညံ့ နေတာပဲ၊ အရသာ ရှိလွန်းလို့ ကို ဖြေးဖြေးချင်းပဲ အ၀င်အထွက် စလုပ်ပေးနေမိတော့တယ်၊ မခရေ ရဲ့ လက်တွေက မွေ့ယာခင်းကို ဆုပ်ကိုင် ပြီး ဖင်ကြီး ကို ကော့ကော့ ပေးလာတာတွေ့တော့ မခရေ ဆန္ဒ ကို သိတဲ့ အနေနဲ့ ကျနော် က အသွင်းအထုတ် ကို မြန်မြန်လုပ်ပေးတော့တာပေါ့၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် သွက်သွက်ကလေး လိုးနေမိတာပေါ့၊ မခရေ ရဲ့ ဖင်သားလုံး နူစ်လုံးနဲ့ ကိုယ့်ပေါင်ခြံ တို့ တဖတ်ဖတ် ရိုက်မိတဲ့ အသံက ဟော်တယ်ခန်းက အဲယားကွန်း အသံကို ဖုံးလွှမ်းနေတယ်လေ၊ ခနနေတော့ ကျနော့် လီးကြီး က တအားယားလာပြီး ကျနော် ပြီးချင်လာပြီလေ၊ …... ကျနော့် လီးထိပ် က သုတ်ရည်တွေ မခရေ ရဲ့ စောက်ခေါင်း ထဲ မှာ ဖြစ်ကနဲ ဖြစ်ကနဲ ထွက်သွားရပြီ၊ ကျနော် က မခရေ ကျောပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး မခရေ ရဲ့ လည်တိုင် နဲ့ မေး လေး ကို နမ်းလိုက် မိတယ်၊ .အား..မမရော ကောင်းရဲ့လားဟင်.ကောင်းလိုက်တာ မမ ရယ်....ု့ . အရမ်းကောင်းတယ်မောင် ရင်မှုး ….မမ ကျနော် . ဆိုတော့ မခရေ က ခေါင်းပဲ ငြိမ့်ပြတယ်၊ ကျနော် လည်း နောက်ဆုံးဆောင့်ချက်တွေကို အားပါပါ မခရေ ရဲ့ ခါးကျင်ကျင် လေး ကိုကိုင် ပြီး ဆောင့်ချလိုက်မိတယ်၊ .. .. တချီပြီးသွား တော့ ကျနော် က ရေချိုးခန်းထဲ မှာ သွားပြီး ကျနော့် လီးကြီး ကို ဆပ်ပြာမွေးတွေ နဲ့ သေခြာ သွား ဆေးလိုကတ်ယ်၊ နောက်က မခရေ လည်း လိုက၀်င်လာတယ်၊ ကျနော် က ကျနော့် လီးကြီးကို ရေချိုးခန်းက သဘက်လေး နဲ့ သုတ်နေတုန်း မခရေ က ရေချိုးခန်းမှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ရှာဝါ ဟို့စ်နဲ့ သူ့ စောက်ဖုတ်လေးကို ဆေးနေတယ်၊ ကျနော့် လီးကြီး က ပြန်မာတောင်လာလို့ မခရေ နားကို လျှောက်သွားလိုကမ်ိတယ်၊ ကျနော် အနားလာရပ်တာတွေ့ လို့ မခရေ က မော့ ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ မျက်နှာရှေ့မှာ တည့်တည့် ကြီး ချိန်ထားတဲ့ ကျနော့် လီးတန်ကြီး ကို တွေ့လိုက်ရတယ်၊ မခရေ က အလိုက်တသိပဲ သူ့ ပါးစပ်တည့်တည့်ကို တိုးထ၀်လာတဲ့ ကျနော့် လီးကြီး အတွက် သူ့နူတ်ခမ်းတွေ ကို ဟ ပေးလိုက်တယ်၊ ကျနော့် ဒစ်ကြီးက မခရေ နူတ်ခမ်းလှလှ လေးတွေကြားထဲကနေ မခရေ ပါးစပ်ထဲ ကို ထိုးဝင် သွားတယ်လေ၊ မခရေ က နူတ်ခမ်းကို ပြန်စေ့လိုက်တော့ ကျနော့် လိင်ချောင်းပေါ်မှာ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လေး ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ ကျနော်က မခရေ ခေါင်းလေးကို ကိုင်ထိန်းရင်း မခရေ ပါးစပ်ကို စောက်ဖုတ်လေး ကို လိုးသလို လိုးနေမိတော့တယ်၊ .....အိ.ပြီးချင်လာပြီ ပြီးလိုက်ရမလား.
ိ .ရပါတယ်.ခန မောင်ရင်မှုး မမ ရှုး ပေါက်ချင်သေးတယ်..မခရေ ကတော့ သဘောကောင်း လိုက်တာ၊ ကျနော့် ကို ဘာမှကို မပြောဘူး၊ ကျနော် လုပ်သမျှကို ခံနေတော့တာပဲ၊ မခရေ နူတ်ခမ်းနူစ်ခု တင်းတင်း စေ့ထားတာရယ်၊ မခရေ ရဲ့ ပါးစပ်က စုပ်အားတွေ ရယ်က ကျနော့် ကို အကြာကြီး မထိန်းထား နိူင်စေပါဘူး၊ ကျနော့် လီးတန်ကြီး ယားပြီး ပြီးချင်လာခဲ့တယ်၊ မမ ကျနော် ပြီးချင်လာပြီ နော် လို့ ကျနော် ကပြောရင်း မခရေ ပါးစပ်ထဲက ကျနော့် လီးကြီး ကို ဆွဲထုတ် မလို့လုပ်တော့ မခရေက ကျနော့် လီးကြီး အရင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ပါးစပ်ထဲ က ပေးမထုတ်ဘူး၊ ခေါင်းလေးကို ပဲ ရမ်းလို့ရသလောက် ရမ်းပြတယ်၊ မထုတ် လိုက်နဲ့တော့ပေါ့၊ ကျနော့် ရင်ထဲ ပျော်သွားတယ်၊ ကျနော် မခရေ ပါးစပ်ထဲ မှာ ပြီးချင်တယ် လေ၊ ဒါပေမဲ့ အားနာလို့ မခရေ ကို မတောင်းဆိုရက် လို့လေ၊ အခုတော့ မခရေ က ကျနော့် ကို အခွင့်အရေး ပေးနေပါလား၊ နွေးထွေး နူးညံ့လှတဲ့ မခရေ ရဲ့ အာခံတွင်း လေးရဲ့ အထိအတွေ့ ကျနော့် လီးထိပ် မှာ ခံစားရင်း ကျနော့် ရဲ့ အချစ်ရည်တွေကို တထုတ်ထုတ် နဲ့ ပန်းထုတ် လိုက်မိတော့တယ်၊ မခရေ ရဲ့ ဆံပင်တွေကြားထဲ ကျနော့် လက်ချောင်းတွေ ထိုးထည့်ရင်း မခရေ ခေါင်းလေးကို တင်းတင်းလေး ကိုင်ထိန်းထားမိလို့ မခရေ လည်း လှုပ်လို့ မရတော့လို့လား မသိ အသက်ရူရ ပဲ ခက်လို့လားမသိ ကျနော့် အချစ်ရည်တွေကို မခရေ တဂွပ်ဂွပ်နဲ့ မျိုချပစ်လိုက်တာ ကို သတိထား မိလိုက်မှ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားတယ်၊ အိုး ငါ သိပ်တရားလွန်သွားပြီလား၊ မခရေ ရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ကနေ ပျော့နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော့် လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး မခရေ ကို ဂျိုင်း နူစ်ဘက်က မ ပြီး ထူလိုက်မိတယ်။ မခရေ မျက်နှာ ကို စိုးရိမ်တကြီး ကိုကြည့်မိတော့ မခရေ မျက်နှာလေး က ပြုံးနေတယ်၊ အိုး သိပ်ချစ်စရာကောင်းပါလား မခရေ ရယ်၊ ကျနော် မခရေ ရဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ကို အတင်းသိမ်းကျုံး ဖက်ထားမိတော့တယ်။ ဟော်တယ် ခန်းထဲက အဲယားကွန်းအေးအေး လေးကြောင့် ဘက်ရှိ အောက်မှာ တယောက်ကို တယောက်ဖက်ပြီး ၀င်ကွေးနေကြ ရင်းက ကျနော် တရေးနိူးလာတယ်၊ ကျနော့် လက်မောင်းတဘက်ပေါ်မှာ ပါးအပ်ရင်း အသက်မှန်မှန်လေး ရူအိပ်နေတဲ့ မခရေ ကို ပါးကလေး ငုံ့နမ်းလိုက်မိတယ်၊ မခရေ မျက်လုံးလေး ပွင့်လာတယ်၊ ကြောင်မလေး တကောင်လို လက်နူစ်ဘက် ကို ဆန့်သန်းရင်း အကြောဆန့် လိုက်တဲ့ မခရေ ကို အသာထွေးဖက်ရင်း နူတ်ခမ်းလေး ကို ငုံစုပ်လိုက်တယ်၊ အောက်ပိုင်း မှာ ဘာမှ မ၀တ်ထားကြလို့ မခရေ ပေါင်ချောမွတ်မွတ် လေးတွေနဲ့ ကျနော့် ပေါင် တွေ ပွတ်မိနေတယ်၊ အိပ်ရေး နည်းနည်း ၀ သွားလို့ ထလာတဲ့ ကျနော့် ကောင်လေးက မခရေ ပေါင်နူစ်လုံးကြားကို နွေးနွေးကြီးနဲ့ ပွတ်သတ် တိုးဝင် သွားတယ်၊ ကျနော် က မခရေ ရဲ့ ပေါင်တဘက်ကို ကျနော့် ခါးပေါ် မတင်လိုက်ပြီး မခရေ ဖင်သားကြီးတွေ ကို ဖျစ်ညှစ်ပြီး ကျနော့် ကိုယ်ဘက်ကို ဆွဲ ယူလိုက်တော့၊ ကျနော့် လီးထိပ် က မခရေ အဖုတ၀်လေး ကို သွားထောက် မိတယ်၊ ..ခိခ.ဆောရီးနော်...အင်း. ......အွန့် … မခရေ ဆီက အသံလေး ထွက်လာတယ်၊ ကျနော်က ကျနော့် လီး ကြီးကို အသာလေး ဖိ သွင်း မလိုလုပ်တော့၊ မခရေ က ကျနော့် ရင်ဘတ် ကို အသာတွန်းထားရင်း . ကျနော် က မလွှတ်ချင် လွှတ်ချင်နဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်ရတယ်၊ မခရေ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားတော့ နည်းနည်း အိုက်သလိုရှိလာတာနဲ့ မွေ့ယာပေါ်က ကွန်ဖေါ့တာ တွေကို ကန်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ ကျနော့် ကောင်ကြီးကတော့ အလံတိုင်ကြီးပေါ့၊ ကျနော် က ကိုယ့်လက်နဲ့ပဲ အသာလေး ပွတ်ပေးထားလိုက်တယ်၊ ခနစောင့် မင်း မမ ..
. …. မွေ့ယာပေါ် ဒူးထောက်တက်လာတဲ့ မခရေ ကို ကျားသစ်က ကျွဲ ဖမ်းသလို အပေါ်က ခုန်အုပ်လိုက်တယ် ၊တကယ်တော့ စတာပါ၊ ဒါပေမဲ့ လေးဘက်ထောက်လေး ဖြစ်နေတဲ့ မခရေရဲ့ ကျော်ပေါ်က အုပ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတော့ ကျနော့် ကောင်ကြီးက မခရေ ပေါင်ရင်း ကိုထောက်မိ ပြီး မခရေ ပေါင်ခွဆုံ ထဲ ကို ၀င်သွားတယ်၊ ရေဆေးထားလို့ စိုစိုစွတ်စွတ် ဖြစ်နေတဲ့ မခရေ ရဲ့ စောက်ပတ် ၀လေးကို ၊ကျနော့် လီးကြီးက တန်းတန်းမတ်မတ် ကို သွားထောက်မိတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော် လည်း ဖင်ကို အသာလေး ကော့ပေးပြီး လမ်းကြောင်းတည့်ပေးလိုက်တယ်၊ ကျနော့် လီးထိပ်ဖူးက မခရေ စောက်ပတ် အ၀ လေးကို တိုးဝင်သွားတာနဲ့ ကျနော် က ဖိပြီး တွန်းထိုးသွင်းလိုက်တယ်၊ စိကနဲ မခရေ စောက်ခေါင်းထဲကို ကျနော့် လီးတန်ကြီးက စီးစီး ပိုင်ပိုင် နဲ့ ၀င်သွားတယ်၊ ကျနော့် လီးကြီး မခရေ ရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲ ၀င် နေပြီးတာနဲ့ ကျနော် က မခရေ ကျောပေါ် မှောက်လိုက်ပြီး မခရေ ရဲ့ နိူ့ကြီး တွေကို တဘက်တချက်ကနေ ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိတယ်၊ ပြီးတော့မှ အဲဒီနိူ့ကြီးတွေကို ဆွဲဆွဲ အားပြု ရင်း မခရေ စောက်ဖုတ်လေး ထဲ ကို ကျနော့် လီးကြီးနဲ့ ဆောင့်ဆောင့် လိုးနေမိတော့တာပေါ့၊ ဖတ်ကနဲ ဖတ်ကနဲ မြည်တာရယ် စွတ်ကနဲစွတ်ကနဲ အရည်သံရယ်က အခန်းထဲက အဲယားကွန်း အသံနဲ့ သူမသာ ကိုယ်မသာ ဖြစ်နေကြတယ်၊ ...မင်း ဟာလေ ခနလေးတောင် မစောင့်နိူင်ဘူးလားတဲ.စွတ် ဖတ် စွတ် ဖတ်၊ စွတ် ဖတ် စွတ် ဖတ်၊စွတ် ဖတ် စွတ် ဖတ်၊စွတ် ဖတ် စွတ် ဖတ်၊စွတ် ဖတ် စွတ် ဖတ်၊ စွတ် ဆိုတာက မခရေ အဖုတ်ထဲ မှာ အရည်ရွဲနေတာ ကျနော့် လီးကြီး ၀င်သွားတော့ မြည်သံ၊ ဖတ်က ကျနော့် ပေါင်ခြံနဲ့ မခရေ .့ ..ကြာတယ် လာခဲ့ အပျိုကြီး မမ..မမ က ဖင်လေးကို ကော့ပေးထားလေ အဲဒါမှ ကျနော် က ဖိပြီး ဆောင့်လို့ရမှာ၊ အဲ လိုဖင်ထောင်ကုန်းထားလိုက်ရင် မမ ရဲ့ ဖင်ကြီးက အယ်ကား နေတာပဲ ခိခ၊ိ ….ပြန်လာလိမ့်မယ် လို့ ချွေးသိပ်ပေးတဲ့သဘော၊ မခရေ ရေချိုးခန်းထဲ က ပြန်ထွက်လာတော့ ကျနော် တယောက် ကိုယ်လုံတီးနဲ့ မွေ့ယာပေါ်မှာ ပက်လက်ကြီး အလံတိုင် ကြီး ကို ပွတ်နေတာတွေ့ လိုက်ရတော့ ခစ်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်၊ ..... ....် .........အား မမ ကောင်းလားဟင်၊ အခု ကျနော် လုပ်ပေးနေတာ... .....ဟင့် မမ က ဘာသံမှ မထွက်ပဲ နဲ့ ကြိတ်ခံနေမှာလား... …. …......ခိခိ ကောင်းလို့ကြိတ်ခံတယ်မှတ်ပါ ဟင့........ …...
.ကျနော် ပြီးတော့မယ်.... ဒါမဲ့ မမ ကတော့ ကြမ်းလေ ကြိုက်လေဘဲ သိလား ခစ်ခစ်။ မခရေ ကလည်း ဖင်ကြီး ကို ရမ်းရမ်းပေးရင်း ပြန်ပြန်ကော့ပေးနေတော့ ကျနော့် လီးကြီးက မခရေ စောက်ခေါင်းထဲ အဆုံးထိ သပ်ရိုက်သွင်းသလို ၀င်ဝင်သွားသလို အထဲ နံရံတွေကိုလည်း မွေနှောက်နေသလို ဖြစ်နေ၇တာပေါ့၊ . …....ကျနော် မမ ခရေ အဖုတ် ထဲ မှာ ပဲ ပြီးလိုက်တော့မယ်နော် မမ. … အ အ အ အ အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ကျနော် က ကျနော့် ပေါင်ခြံကို မခရေ ဖင်လုံးကြီးတွေ နဲ့ ဖိကပ်ထားလိုက်တယ်၊ မခရေ စောက်ခေါင်းထဲ က ကျနော့် လီးကြီးကို ညှစ်ညှစ်ပြီးတော့ သုတ်ရည်ပူ ပူနွေးနွေး တွေကို မခရေ စောက်ပတ်အတွင်းကျဆုံး နေရာတွေ ကို ပန်းပစ်နေမိတယ်၊ ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးး မနက်ကျ တော့ မခရေ က သူ့ကျောင်း စာသင်ချိန် ရှိလို့ ဆိုပြီး အစောကြီး ထ တယ်၊ ကျနော် က အိပ်နေတုန်းမို့ ကျနော့် မျက်နှာပေါ် လာနမ်း လို့ သူ့ခါးလေး လှမ်းကိုင် လိုက်တော့၊ ဟေး အချိ်န်မရှိ ဘူး ညကျမှ ပြန်တွေ့ မယ် အိုကေ ဆိုပြီး လစ်သွားတော့တယ်။ သူထွက်သွားပြီး မှ ကျနော်လည်း ထ ရေမိုးချိုး ပြီး အ၀တ်အစားလဲ ၊ ဟော်တယ် အောက်ထပ် မျက်နှာစာ မှာ ရှိတဲ့ စတားဘတ် က ဒတ်ရိုစ်၊ ဗန်တီး တခွက် ၀ယ်ပြီး အလုပ်ကိစ္စ ချိန်းထားတဲ့ နေရာ ကို ထွက်လာခဲ့တယ်၊ ကျနော် အလုပ်ကိစ္စ ပြောရမဲ့ နေရာက လည်းဒီတက္ကသိုလ၀်င်းထဲ မှာ မို့ ကျနော်က လမ်းဘဲ လျှောက်လာခဲ့ လိုက်တယ်။ တနေ့ လုံး အလုပ်လုပ် နေရ ပေမဲ့ စိတ်က လွတ်တာနဲ့ မနေ့ညက မခရေ နဲ့ အချစ်ကြမ်းခဲ့တာတွေ ပြန်စဉ်းစား မိ ပြီး ကိုယ့် ကောင်ကြီး က ပြန်မာမာ လာတယ်၊ အင်း အပျို ကြီး အပျိုကြီးနဲ့ ဖင်မှာလည်း လဥရာ တွေ နဲ့ ပါလား ဆိုတာ ၊ ဒီအပျို ကြီး မျိုး ဖြစ်မယ် လို့တွေးလိုက်မိပါတယ်၊ ဟီးဟီး ၊ အပေးကလည်း ကောင်း၊ အမှုတ်ကလည်း ကောင်း၊ ဟင့်၊ သူ့ညီမ တောင် ခလေး တယောက်ရ နေပြီ သူ့လောက် မကျွမ်း သေးဘူး၊ အင်း သူ့ ညီမ ဆိုမှ မြနှင်းဆီ နဲ့ ကယ်ဗင် ကိစ္စ က ခေါင်းထဲ ပြန်ဝင် ပြန်လာတော့ မအီ မလည် ဖြစ်သွား ရပြန်တယ်၊ ဖုန်းဆက် မယ် ဆိုပြီး ကြည့်လိုက်မှ ကျနော့် အိုင်ဖုန်းက ဘက်ထရီ မရှိတော့ဘူး၊ စောက်ခွပဲ၊ အိုင်ဖုန်းက တက်တားရင်း ဂျေးဘရိတ် လုပ်ထားတာ ဆိုတော့ အားပြန်သွင်းလည်း ကွန်ပြုတာ နဲ့ ဘု မလုပ်လို့ က ပြန်မရ နိူင်တော့ဘူး၊ ခါတိုင်း ဆိုရင် ညတိုင်း အိပ်ခါနီး အိပ်ယာဘေး မှာ အားသွင်းနေကြ၊ မနေ့ညက မရီး အပျိုကြီး မမ နဲ့ ကာမ မုန်တိုင်း ထန်လိုက်တာ နဲ့ အားသွင်းဖို့ မေ့သွားတာ ၊ ...မမ .. …...ပီးလိုက် မောင်ရင်မှုး.ပြီးကာနီးပလား..... ..မမလဲပီးတော့မယ် …..ဖင်လုံးကြီး ရိုက်မိတဲ့ အသံ ၊ အဲ လို မှန်မှန်ဆောင့်နေတော့ အဲ ဒီ အသံ မှန်မှန် မြည်နေတာ ပေါ့၊ ကျနော် ဘယ်လောက်တောင် အားကုန် ထည့်ဆောင့်မိလည်း မသိဘူး မခရေ ကိုယ်လုံး တခုလုံးရှေ့ကို ရွေ့ရွေ့ သွားလိုက်တာ မခရေ ခေါင်းနဲ့ ကုတင် ဟက်ဘုတ် နဲ့ ထိနေပြီ၊ ခိခိ၊ မင်း လေး ကအရမ်းကြမ်းတာဘဲ ….
....ဘက်ထရီ အားကုန်နေတယ်.အိုး...လာ မမ ဘိုက်ဆာ ပလား.အေး မင်း ကို ဖုန်းဆက်နေတာ ငါ့ အခန်းမှာ မုန့်ဟင်းခါးချက်မယ်လို့ လာစား မလားလို့ မေးမလိ. .် . ပြောရင်း ဆိုရင်း မခရေနားကို ကျနော်ကပ်သွားပြီး သူ့ နူတ်ခမ်းကို ငုံ စုပ်လိုက် ပါတယ်။ ကျနော် တို့ နှစ်ယောက် အားရ ပါးရ ပြင်သစ် အနမ်း နဲ့ နူတ်ဆက်ကြ နေတုန်း ကျနော့် ဗိုက်က တဂွီဂွီ မြည်လာပါတယ်၊ .ဆောရီး.တကယ့်ဟာတော့ ဘယ်ချက်တတ်မလဲ... ဟော်တယ် အောက်ထပ် ရှေ့မျက်နှာစာ မှာပဲ တဘက်က စတားဘတ် နဲ့ တဘက်က အက်ပယ်ဘီး ( ပန်းသီးပျား ခေါ်မလား ဟီးဟီး ) စားသောက်ဆိုင်လေး ရှိနေတာနဲ့ ၀င် ခဲ့ကြပါတယ်၊ စားသောက်ဆိုင် မှာ ထိုင်ကြရင်း မခရေ ကို ကြည့်မိတယ်၊ ရာသီက နည်းနည်း အေးတော့ အပေါ်က ဆွယ်တာ ပွပွကြီး ၀တ်ထားတော့ သူ့ အချိုး အဆစ်ကျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို မတွေ့ ရနိူင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်၊ ကျနော်သာ သူ့ ကို ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ မမြင်ဘူးရင်၊ သူကိုယ်လုံးဟာ ခါးသေးသေး နဲ့ ဆူဖြိုး ထွားကျိုင်းလှတဲ့ ရွှေရင် အစုံ ပိုင်ရှင် လို့ ပြောဖို့ ခက်လှပါတယ်၊ အဲ ဒါကြောင့်လည်း အပျိုကြီး ဖြစ်နေသလား မသိဘူး၊ ကိုယ့် ကိုယ်လုံးအလှ လူမြင်အောင် မပြချင်တာလား ၊ မပြတတ်တာလား မသိ၊ ကျနော်က တော့ ရွှေအိုး ခလုပ်တိုက်မိတာပဲ လို့ တွေးနေမိပါတယ်၊ ခယ်မလေး ကို စိတ်က ပြစ်မှားနေတုန်း မရီး ကို ဆော်ခွင့်ရလိုက်တာ၊ အင်း အခု တောင် ဘိုက်နည်းနည်း ၀ လာတော့ အခန်းထဲ အမြန်ပြန်သွားပြီး ဆွဲချင်လာပြီ၊ အဟီး၊ ကျနော် တို့ နှစ်ယောက်စလုံးပဲ ဟော်တယ် အခန်းကို အပြေး သွားနေမိပါတော့တယ်၊ ဓါတ်လှေခါးထဲ မှာ နှစ်ယောက်ထဲ မို့ ရမက် ပြင်းပြင်း အနမ်းတွေက တပြွတ်ပြွတ် ညံ နေတာပဲ ပေါ့၊ အခန်းတံခါးလော့ က ဂျောက် ကနဲ မကျ ခင်မှာပဲ ကျနော်တို့ က အ၀တ်အစားတွေ စချွတ် နေကြပြီလေ၊ မတ်တတ်ရပ်လျှက်မှာပဲ မခရေ ရဲ့ ထွားထွားမိုမို့ နိူ့ကြီး နှစ်လုံး ကို အငမ်းမရ တပြွတ်ပြွတ် စို့ပေးနေမိတယ်၊ မခရေ က ကျနော့် ခေါင်း က ဆံပင်တွေကို သူ့ လက် နဲ့ ထိုးဖွပေးနေချိန် ကျနော့် လက်က သူ့ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီး ပေါ်မှာ ပွတ်သပ်နေပြီ အဖုတ်နူတ်ခမ်း သားတွေ က ဖေါင်းတင်းနေပြီး အတွင်းသားတွေက အရည်တွေ ရွဲစိုနေပြီလေ၊ မခရေကို ကုတင်စောင်းနဲ့ သူ့ ဖင်ကြီးတွေ ထိအောင်တွန်းရင်း ကျနော့် လီးကြီးကို သူ့ အဖုတ၀်လေးထဲ ဖိပြီး အသာ ထိုးထည့်လိုက်တယ်၊ မခရေ ရဲ့ . ….ဟေး မောင်ရင်မူး မင်း ဖုန်း ကို ခေါ်တာ လဲ မကိုင် ပါလား ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ.......အခု မှ သတိရတယ်၊.တခါထဲ ထွက်လာခဲ့တယ်၊.အဟီး ဘယ်တတ် နိူင်မလဲ လေ၊ အင်း ဒီနေ့ နေ့တာက လည်း ရှည် လိုက်တာ။ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ညနေ ကျနော် ဟော်တယ်ခန်း ပြန်ရောက် လို့ ရေမိုးချိုး ပြီး ဂျင်း နဲ့ တီရှပ် ကို ကောက်စွပ်နေတုန်း အခန်းတံခါးခေါက်သံ ကြားတယ်၊ အဲ ဒါ သွားဖွင့် လိုက်တော့ မခရေ ဖြစ်နေတယ်၊ ....အခြောက်ထုတ် ကို ဖေါက် ရေနွေး ဖြော တာပါကွာ ၊ ခစ်ခစ်..ု့ .. ….ခေါ်လို့ မရတာနဲ့ မချက် တော့ဘူး.နောက်နေ့ စားမယ်လေ မမ၊ ကျနော်က နောက် ၃-၄ ရက် ကြာအုန်းမှာ၊ မမကမုန့်ဟင်းခါးတွေ ဘာတွေ ချက်တတ် တာပဲ ဘယ်ဆိုးလို့တုန်း. .ရှစ.....အဟီး ဘိုက်က တော်တော် ဆာနေပြီ မမ ၊ ကဲ ဒီအနီးအနား မှာပဲ တခုခု ရှာစားလိုက်ရအောင်..
ကျနော့်မှာ မလွဲ မရှောင်သာလို့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်၊ မြနှင်းဆီကို လီလီက သိနေတာမို့ လိမ်လ့လို ည်း မရ တော့ဘူးလေ၊ .လီလ.. ကျနော့် ဖုန်း ခုထိ ဘု မလုပ်ရသေးတာ သတိရ သွားမိပြီး ကိုယ့်ကို ကိုယ်ကျိန်ဆဲ မိတယ်၊ အက်ပယ်ကိုလည်း ကျိန်ဆဲ မိတယ် ၊ အိုင်ဖုန်းတော့ တော်ပါပြီ နောက်တခါ အန်ဒရိုက်ပဲ ယူတော့မယ် လို့ တေးထားလိုက်တယ်။ .ဆောရီး ငါ့ ဖုန်းက ဘက်ထရီ အောက် ဖြစ်နေလို့ ညက လည်း အလုပ်များပြီး အားသွင်းဖို့ မေ့သွားလိ.် . .် ....ဂွတ်မောနင်း........ဒီနေ့ မိတင် ငါလည်း လိုက်မယ်လေ တူတူ သွားကြတာပေါ့၊ ဒါနဲ့ သူက........အင့်ကနဲ အသံလေး ထွက်လာတယ်၊ နောက် သူ ကုတင်ပေါ် ကို နောက်ပြန်လေး ကျသွားပြီး ကျနော့် ကိုယ်ကို ပါ ဆွဲ ခေါ်သွားတယ်၊ ကျနော်က မခရေရဲ့ ပေါင်တဖက်ကို မ ဖြဲ ပြီး ကျနော့် ကောင်ကြီးကို အတွင်းထဲ ထပ်ထိုးထည့်လိုက်တယ်၊ မခရေ ရဲ့ အပျိုကြီး အဖုတ်က အရမ်းကို စေးကျပ်နေတယ်၊ ကျနော့် လီးကြီး လေးပုံ သုံးပုံလောက်ဝင်တော့ မခရေက ကျနော့် ရင်ဘတ်ကို တွန်းထားတယ်၊ ..မောင် ရင်မူး မမ မခံနိူင်ဘူး၊ အထဲက အောင့်တယ်၊ မင်း ဟာက အရမ်းရှည်တယ်ကွယ..ဂွတ်မောနင်း.....ဘယ်တုန်းက ရောက်နေတာလဲ.ု့ .အော်ဒီဟာက ခရေ ငါ့ စစ်စတာအင်လော လေ၊ မခရေ ဒါ ကျနော့် ဘော့စ် လီလီလင်း တဲ့.ဟေ့ ဦး.နင့် ဆီ ငါ မက်ဆေ့ တွေလည်း ပို့တယ်၊ အီးမေးလည်း ပို့ထားတယ်လေ၊. ကျနော် လည်း မလုပ်ရက်တော့ သူခံနိူင်သလောက် ထိ ပဲ အသွင်း အထုတ် လုပ်ပေးနေရတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ အရှိန်ရလာတော့ အားမရတော့ဘူး၊ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို တစောင်းကွေး တဘက်လှည့်ခိုင်းပြီး ပုဇွန်ထုတ်ကွေး ပုံမျိုးနဲ့ အနောက်က ပြန်သွင်းရတယ်၊ အဲ ဒီပုံစံနဲ့ ဆို အောက်က ကော့ မဆောင့်လို့ကတော့ အဆုံးထိ မ၀င်ဘူးလေ ၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့် ပေါင်ခြံနဲ့ သူ့ ဖင်လုံးကြီးတွေ သွားဖိမိတော့ အဆုံးထိ ၀င်သလို ခံစားရတော့ ကိုယ်လည်း ထိန်းနေ စရာ မလိုဘူး အားရ ပါးရ ဆောင့်လို့ ရတယ် ၊ အဲ လို နဲ့ တဖုန်းဖုန်း ဆောင့်ပစ်လကိုတာ နှစ်ယောက်စလုံး ကာမ အရသာ အထွတ်အထိပ် ရောက်သွားတဲ့ အထိပေါ့၊ အဲ ဒီည ကတော့ အပီပြင် ကို ကာမ မုန်တိုင်း ထန်ခဲ့ရတဲ့ ညပေါ့၊ မရီး အပျိုကြီး မခရေ တယောက်၊ မျှော့သွား ရလောက်အောင် တညလုံး ကြိုးစားပန်းစား လိုးပစ်လိုက်တယ်၊ မခရေ ရဲ့ ခရေ ပွင့်လေး ကိုလည်း စမ်းကြည့်သေးတယ်၊ သူက နည်းနည်း နာတာနဲ့ လက်မခံ ဘူး အတင်း ငြင်းတယ်၊ ကျနော်လည်း အတင်း မကြိုးစား တော့ပါဘူး၊ သူ့ အဖုတ် တောင် လိုးလို့ မှ မ၀သေးတာ လေ၊ မနက် လေးနာရီလောက်မှ အိပ်ပျော်သွား ကြတယ်။ မနက် ဟော်တယ် ပြတင်းပေါက်က နေရောင်ဝင်လာမှ နိူးတော့ ဒီနေ့ အလုပ်ကိစ္စ မိတင်း ရှိတာ သတိရ ပြီး ကမာန်းကတန်း ထ အ၀တ်အစားလဲ ရ တာပေါ့ မခရေလည်း အတူတူ ပဲလေ၊ ကျနော် တို့ နှစ်ယောက် ဟော်တယ် အောက်ထပ်က မနက်စာ သွားစား မယ် ဆိုပြီး အခန်းပြင် ထွက်လာခဲ့ကြတော့၊ .... .. .ဟိုက.မနေ့ညနေကပဲလေ..ရပါတယ်. .ီ ..
.ငါတော့ ရောက်တုန်း လေး အဖေါ်ရှိရင်တော့ ညဘက် ဒီမြို့ ကို လည်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား လို့ စဉ်းစားနေတယ်..မမ ကိုလည်း ခေါ်ဖို့ ပြောနေတယ်ဗျ.အား...နင့် ဘော့စ် ဘာလိုချင်လည်း ငါသိသားပဲ ... ..... .မမ ဒီညလာအုန်းမလား.ကျနော့် ဘော့စ်က မြို့ထဲ ရှောက်လည်ချင်တယ်တဲ့ ..် ... လီလီ ရဲ့ ပုံစံက မခရေ ကို ခေါ်ချင်ပုံ အရမ်းပြနေတာနဲ့ ကျနော်လည်း မေးကြည့်အုန်းမယ် ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ ...ငါ့ ကို အထင်မလွဲ ပါနဲ.သူက ကိုယ်လုံးတော်တော် လှတာပဲ နော်. နင့် မရီး ရော လာအုန်းမှာလား.. ငါ တော့ ဘာမှ မရှိပါဘူး နင်ရော.. ..ကျနော်ကလည်း တွေ့ချင်သေးတယ်လေ .လူများတော့ ပို ပျော်စရာ ကောင်းတာပေါ့....အင်း မပြောတတ်ဘူး. .....အော် သူလာရင် ပိုကောင်းတာပေါ့.မ၀ သေးဘူး ဟီးဟီး.သူတို့ နှစ်ယောက် တယောက်နဲ့ တယောက် လက်ဆွဲ နူတ်ဆက်ကြပြီး ကျနော်တို့ သုံးယောက် ဟော်တယ် အောက်ထပ်က နံနက်စာ စားတဲ့ အခန်းဆီကို ဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဟိုတယ် က မနက်စာ ကို ယူစားကြပြီးတော့ မခရေက သူ စာသင်ချိန် ရှိတာမို့ သွားအုန်းမယ် ဆိုပြီး နူတ်ဆက် ထွက်သွားပါတယ်၊ အခု န သုံးယောက် အတူတူ စားသောက်နေကြတုန်းက တော့ ဘာမှ သတိထားမိ ဟန်မပြပဲ ပုံမှန် မျက်နှာထားနဲ့ လီလီ က မခရေ ထွက်သွား ပြီးတာနဲ့ စပ်ဖြည်းဖြည်း အပြုံး ဖြစ်လာပါတယ်၊ မခရေ ထွက်သွားတော့ မခရေကိုယ်လုံး အနောက်ပိုင်းကို လိုက်ကြည့်ပြီး၊ .အဲ ဒါကြောင့...အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး ငါလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ မြို့ထ...ငါတို့ ချင်းက မျက်လုံးချင်း စကားပြောပြီးပြီ မနက်ကပဲ. ကျနော့် ရဲ့ အမူအယာပျက်နေတဲ့ မျက်နှာကို ခပ်ပြုံးပြုံး ကြည့်ရင်း လီလီက သူနူတ်ခမ်း နှစ်လွှာ ရှေ့ မှာ လက်ညိုး သွယ်သွယ်ရှည်ရှည် လေးကို ဒေါင်ထိုက်ထောင်ကပ်ရင်း ရှုး ရှုး အသံလေး လုပ်ပြလိုက်ပါတယ်၊ သူနုတ်လုံ ပါမယ်ပေါ့၊ ကျနော် က နည်းနည်း တော့ စိတ်အေးသွားပါတယ်၊ကျနော်က ပထမတော့ မင်းထင် နေသလို မဟုတ်ပါဘူး ဘာညာ ပေါ့ အာ မလို့ ၊ နောက်တော့ မထူး ပါဘူး လို့တွေးမိပြီး ငြိမ်နေလိုက်တော့တယ်၊ ဟော်တယ် ခန်းထဲ မှာ ယောက်ကျားနဲ့ မိန်းမ နှစ်ယောက် ညအိပ်ပြီး ထွက်လာ တာကို ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ပြောနေရင် လည်း ပေါ်တင်ကြီး လိမ်ရာ ကျနေ မှာ ဆိုတော့ မီးစင်ကြည့်က တာပေါ့ လို့ပဲ တွေးနေမိတော့တယ်၊ တနေ့ လုံး လီလီ နဲ့ အလုပ်ကိစ္စ ဆွေးနွေး ပွဲ တွေ လိုက်တက်နေရပြီး ညနေစောင်းလောက် ကျတော့ မှ ဟော်တယ် ပြန်လာကြတယ်၊ ဒီည ဘာ အစီအစဉ် ရှိသေးလည်း ဆိုတော့ ကျနော်က …..ဘာလို့လဲ မသိဘူး....... …..့ ........ဲ . တဲ့ ကျနော့် ကို မျက်စ လေး ပင့်ပြီး မချို မချင်နဲ့ ပြောလိုက်တော့၊ ကျနော် လည်း မနေနိုင် တော့၊ .
. Nov 10 .ပိတောက်: မနေ့က ပျင်းနေတာလေ ပျားအွန်လိုင်းတက်မလာလို့ 6:09pm. Nov 10 .ိ . Nov 10 .ခိခ.မောင်ပျား: ပြောင်နေတဲ့ ပိပိလေးကိုလည်း ရက်မယ် 6:18pm. Nov 10 . . Nov 10 .ဟုတ်ပါ့မလားသူ့ မှာ ယောက်ကျားနဲ့ ခလေး တွေန. Nov 10 .ပိတောက်: ဘာလုပ် 6:04pm.နင်သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး.. Nov 10 ...ငါ့ ပထမ ဆုံးသင်ဆရာ မမကြီးကလည်း ဘဲ ရှိတာပဲ ဟ. Nov 10 .. Nov 10 .ပိတောက်: အင်း 6:08pm.အောင်မယ် နင်က ဘာလို့ မဖြစ်နိူင်ရမှာလည်း ဒါမျိုးတွေက ငါ့လိုပဲ လေ၊ ခစ်ခစ် နှစ်ဘက်ရတယ်လေ ခစ်ခစ်၊ နင်စိတ၀်င်စားရင် ငါဒီည ဖန်တီးပေးမယ်လေ.ပိတောက်: inn 6:19pm.ခိခ..ပိတောက်: အလုပ်ကိစ္စတွေ ပြီးပီလား 6:05pm. Nov 10 . .မောင်ပျား: ဘော့စ် ရောက်လာလို့လေ 6:07pm.ပိတောက်: ဟိ 6:16pm.. Nov 10 . .မောင်ပျား: အိမ်ပြန်ရောက်ပလား ပိတောက် 6:04pm.ပိတောက်: ခုဘဲရေချိုးပီးလာတာ 6:04pm..ငါတို့ ကိုတော့ နည်းနည်း အချိန်နဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပေး.ကျနော် သူ့ကို ဆော်ရမယ် ဆိုရင်တော့ ဘာပဲ လုပ်ပေးရပေးရ.ပိတောက်: ကိုကော 6:04pm.မောင်ပျား: ပိတောက် ကတော့ရေချိုးကြီးစ ဆိုတော့ FRESH ဖြစ်နေမှာပဲ ဟိဟိ 6:10pm.ဟာဗျာ ခင်ဗျား တို့ ဘာညာဘာညာ ကလည်း ကျနော် လီးတောင် တောင်လာပြီ ဟီး...ဲ့ .ကျနော် က အဲ ဒီကျနော့် ဘော့စ် မ ကို ဖြုတ်ချင်နေတာဗျ၊ ခုတော့ လက်စ် ကြီးပါလား.ပိတောက်: ဟုတ် 6:04pm. မခရေနဲ့ ပြောပြီးတော့ ကျနော့် ခရီးဆောင် ကွန်ပြူတာလေးကို ဖွင့်လိုက်တယ်၊ ပိတောက်ဝါနဲ့ တောင် မချပ်ရတာ ကြာပြီလေ၊ အပြင်မသွားခင်လေး ခန ချပ်လိုက်အုန်းမှ၊ ဟော မီးစိမ်းနေတယ် အတော်ပဲ၊ 6:03pm..် . Nov 10 ... Nov 10 ...ဟီး.ဟင်.မောင်ပျား: မနေ့ က မရီးနဲ့ တော်တော် ပွဲကြမ်းလိုက်သေးတယ်လေ 6:08pm.. Nov 10 ..ကျနော်တောင် မသိလိုက်ပါလား.. Nov 10 . Nov 10 ...ရတယ်ဗျာ. Nov 10 ...ပိတောက်: ခိခိ 6:11pm.. Nov 10 . Nov 10 .မောင်ပျား: ဆပ်ပြာနံ့မွှေးမွှေး လေးနဲ့ပေါ့ 6:13pm.ိ .မောင်ပျား: အခုခန နေရင် အပြင် သွားမလို့ ဘော့စ်မ ရယ်၊ မရီးရယ်၊ ဒီည နှစ်ယောက်စလုံး ဆော်ဖို့ ချန့်စ် ရရင် ကောင်းမယ်၊ လောလောဆယ် ပိတောက်နဲ့ ချပ်မယ်၊ 6:10pm. Nov 10 .မောင်ပျား: ဆစ်စတီနိူင်း လုပ်ကြမယ် .မောင်ပျား: ထောင်နေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို စို့ချင်တယ် 6:18pm.ငါလာခဲ့မယ် လို့သာပြောလိုက. Nov 10 ...ပိတောက်: ဟုတ်တယ် 6:13pm.မောင်ပျား: YES 6:06pm.ခစ်ခစ်.
မောင်ပျား: သွင်းမယ် 6:34pm. Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 .မောင်ပျား: ကို့ကောင်ကြီးမာလာပြီ မရဲ့ 6:28pm.ပိတောက်: ကြိုက်တယ် 6:32pm. Nov 10 . Nov 10 .ပိတောက်: ပီးအောင်စုပ်ရမလား 6:29pm.မောင်ပျား: မပေါင်နူစ်လုံးကိုမ 6:31pm. Nov 10 .ပိတောက်: inn 6:26pm. Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 .ပိတောက်: အင်း 6:30pm.မောင်ပျား: ကို့ ထိပ်ဖျားကို မနူတ်ခန်းလေးနဲ့ငုံပေးပေါ့ (နည်းနည်း အရှိန်ရလာပြီး တင်းလာရင် ပိတောက် ကနေ မ ဖြစ်သွားရောလေ အဟီး ) 6:21pm. Nov 10 .ပိတောက်: ကို့ကိုစုပ်ပေးမယ် 6:20pm. Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 .မောင်ပျား: မကိုပက်လက်လှန်ပြီးပဲအပေါ်က 6:30pm.မောင်ပျား: မ ဒူးခေါက်ကွေး နူစ်ခု ကို ပုခုန်းတဖက်တချက်မှာတင် 6:31pm. Nov 10 .မောင်ပျား: ထွက် 6:26pm. Nov 10 .မောင်ပျား: ဘာလုပ်ရမလဲ 6:28pm. Nov 10 . Nov 10 .မောင်ပျား: ဖြေးဖြေးခြင်း 6:34pm.ပိတောက်: အရမ်းမစုပ်ဘူး 6:20pm. Nov 10 .ပိတောက်: နောက်တော့ အရမ်းနော် 6:34pm.ပိတောက်: လျှာနဲ့ကစားမယ် 6:20pm. Nov 10 . Nov 10 .မောင်ပျား: မ နူတ်ခမ်းတွေကိုလည်း ကို့ရှာဖျားနဲ့ တို့ကစားမယ် 6:22pm.ပိတောက်: inn 6:27pm. Nov 10 .မောင်ပျား: မစောက်ခေါင်း နုနုလေးအတွင်းထဲ ဝင်နိူင်သလောက် ကို့လျာကို ထိုးထည့်ကြည့် မယ် 6:26pm.ပိတောက်: အင်း 6:32pm. Nov 10 . Nov 10 .ပိတောက်: inn 6:25pm.ပိတောက်: အင်း 6:33pm.6:19pm.မောင်ပျား: ခိခိ 6:28pm. Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 .ပိတောက်: အင်း 6:33pm.ပိတောက်: ဟိ 6:29pm. Nov 10 .မောင်ပျား: ကို့ရှာထိပ်နဲ့ မအစေ့ လေးကို ထိုးကြည့်မယ် 6:22pm.ပိတောက်: အင်း 6:19pm. Nov 10 . Nov 10 .မောင်ပျား: မ က ပါးစပ်ထဲမှာမပြီးချင်ဘူးဆို 6:30pm. Nov 10 . Nov 10 .မောင်ပျား: လျာကိုဝင်လိုက်ထွင်လိုက်လုပ်ကြည့်မယ် 6:26pm.ပိတောက်: ဟိ . Nov 10 .ပိတောက်: ဖွဖွလေးဘဲ 6:20pm.မောင်ပျား: မ ခံနိူင်သလောက်ပဲ 6:33pm.မောင်ပျား: မ ပိပိ လေးအဝမှာကို့ကောင်ကြီးခေါင်းကိုတတ် 6:32pm.
မောင်ပျား: ကိုက စိမ်ထားပြီးမ နို့တွေကိုလည်းစို့ချင်တာ 6:39pm.ပိတောက်: စကားမစပ်ပြောအူးမယ် 6:40pm. Nov 10 . Nov 10 .မောင်ပျား: မရဲ့ အတွင်းသား နုနုနွေးနွေးလေးကို့ အချောင်းကြီးမှာပွတ်နေတာ အရသာခံနေတယ်လေ 6:38pm. Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 .youtube. Nov 10 .မောင်ပျား: Watch "Hal Sparks .ပိတောက်: စိမ်နေမလို့လား 6:37pm. Nov 10 .မောင်ပျား: ခိ ပြီး သွားရင် မာတာက သိပ်မခံတော့ဘူးမ 6:43pm. Nov 10 .မောင်ပျား: ပိတောက် youtube မှာ တခုကြည့်ကြည့် ခနလေး ကိုရှယ်လိုက်မယ် 6:47pm.ပိတောက်: ဟိ 6:38pm.ပိတောက်: ပျားကလည်း၊ မနေ့ က မရီး ကို တညလုံးလုပ်ထားတာတောင် စိတ်က ကြွတုန်းနော် ခိခိ 6:44pm.Pussy is Tougher" on YouTube http://www.မောင်ပျား: ခိခိ 6:44pm. Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 .မောင်ပျား: ပြည့် အရသာရှိမှာ 6:43pm. Nov 10 .ပိတောက်: အင်း 6:36pm. Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 .ပိတောက်: ထွက်ကျရောလား 6:43pm.ပိတောက်: inn 6:47pm. Nov 10 .ပိတောက်: ခိခိ စိမ်ရင်ပလွတ်ဆိုပီး 6:43pm.မောင်ပျား: မနိူ့က ကြီးတယ် ဆိုလို့၊ မ နို့ဆိုက်နဲ့ဆိုရင် နို့ နူစ်လုံးကြားမှာ ကို့ကောင်ကြီးညှပ်လုပ်ချင်တာ 6:40pm.မောင်ပျား: ကိုသွားရတော့မယ် ဘော့စ်စောင့်နေတော့မယ်၊ ကွန်ပြူတာ ကိုပိတ်လိုက် ပြီးတော့ ကျနော် တော်တော်တင်းနေပြီ၊ ဘော့စ် ကို မဆော်ရလည်း မခရေ ကတော့ ရမှာပဲလေ၊ ဆိုပြီး ကို့ကောင်ကြီးကို ပွတ်ချော့လိုက်ရတယ်၊ ကွန်ပြူတာ ပိတ်ပြီးတာနဲ့ ကျနော်လည်း ရေ မိုးချိုး လိုက်ပြီး သဘက်ခါးပတ်ရက်နဲ့ ခေါင်းဖီး ဂျိုင်းကြား အမွေးနံသာ ပွတ် လုပ်နေတုန်း တံခါးခေါက်သံကြားရ တယ်၊ ဒါနဲ့ ချောင်းကြည့်ပေါက်က ကြည့်လိုက်တော့ မခရေ၊ အပေါ်က ဆွယ်တာ ပွပွကြီးနဲ့၊ တံခါး ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်၊ မခရေ က အခန်းထဲ ၀င်လာတာနဲ့ အပေါ်ပိုင်း အင်းကျီ ဗလာနဲ့ အောက်မှာ သဘက် ပါတ်ထားတာ တွေ့လိုက်လို့ ပြုံးစိစိ နဲ့ ကြည့်ရင်း၊ . Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 . Nov 10 .ပိတောက်: တော်တော်များများလဲကြိုက်မယ်ထင်တယ် 6:42pm.မောင်ပျား: ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှုံ့သွားေ ရာ ခိ 6:45pm.6:36pm. Nov 10 .မောင်ပျား: မပြီးခငိစိမ်ထားမှပဲ မဒင်ပြည့်ကျပ် 6:43pm.မောင်ပျား: အခုတော့ 6:37pm.ပိတောက်: ပီးသွားရင်တွင်းစိမ်တာအရမ်းကြိုက်တယ် 6:41pm.ပိတောက်: အင်း 6:39pm. Nov 10 . Nov 10 .ပိတောက်: အင်း 6:40pm. Nov 10 . Nov 10 .မောင်ပျား: ချက်ခြင်းကြီတော့မဟုတ်ပါဘူး 6:45pm.မောင်ပျား: ကိုဆောင့်မှာပေါ့ 6:36pm.com/watch?v=DcM0DPH2bNo&feature=youtube_gdata_player 6:50pm.မောင်ပျား: ခိခိ ပြော ဘာလဲ 6:41pm. Nov 10 .မောင်ပျား: မ ခံနိူင်ပြီဆိုရင်ပြောလေ 6:36pm.
..ခစ်.ကဲ တွေ့လား .အင်းကျီလဲ မလို့ ပြင်နေတုန်း မခရေ ရောက်လာတာလေ..အပိုတွေ ပြောမနေနဲ့၊ အစုပ်ခံချင် အစုပ်ခံချင်တယ်ပြော..ိ .အင်း ဒါပေမဲ့ မခရေ စခဲ့တဲ့ ပြဿနာ ကို မခရေ ပဲ ဖြေရှင်းပေးမှ ရတော့မယ်၊ ဒီမှာကြည့.အပြင် မထွက် ဘူး ဆိုလည်း တို့ ကတော့ စိတ်မဆိုးပါဘူး.ကဲ ကိုဖိုးပိ.........် .ပြွတ်စ.. ….အင်း..အား............အခု ကျနော် ဘောင်းဘီထဲ ဒီကောင်ကြီးကို ဘယ်လို ပြန်သွင်းရတော့ မလဲ...ဒီည အပြင် မသွားတော့ဘူးလား... မခရေ ပါးစပ်နဲ့ ချော့ပေးမှ သူက ပျော့ပြောင်းသွားမှာ၊ အဟီး.ဘယ်လိုလဲ ဟ. …. ကျနော်က သဘက်ကို ဖြေပြီး ကြမ်းပေါ် ပုံချလိုက်ပါတယ်၊ ကျနော့် ရဲ့ လီးကြီး က တင်း မာ ထောင်မတ် နေလိုက်တာ၊ ပက်ထရီရော့ ရော့ကက် လို ဖြစ် နေပြီလေ၊ . ဆိုပြီး ကျနော့် မျက်နှာနားသူမျက်နှာလေး ထိုးပေးတာနဲ့ သူ့ နူတ်ခမ်းလေး ကို ငုံပြီး စုပ်နမ်းလိုက်တယ်၊ ... မခရေက ကျနော့် ကို ပြောရင်းနဲ့ ကျနော့် ရင်ဘတ်က နို့သီးခေါင်း သေးသေး လေးကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ မနာအောင် လာကိုက် လိုက်တယ်၊ ..ဟဟ.မဟုတ်ပါဘူး မခရေရဲ့။ အခု မှ ရေချိုးပြီးတာပါ.ခိခ.မခရေ အဲ လို မလုပ်နဲ့လေ. မခရေက အဲ လိုဒါပြောတာပါ၊ ကျနော့် ရှေ့ အမွေးပွကောဇောခင်းထားတဲ့ ဟော်တယ် အခန်းရဲ့ ကြမ်းပေါ်မှာ ဒူးထောက် ထိုင် ချလိုကရ်င်း ကျနော့် ကောင်ကြီး ကို သူ့ လက်ကလေးနဲ့ လှမ်းဆုပ် ကိုင်ကာ သူ့ ပါးစပ် ထဲ ငုံသွင်းလိုက်ပါတယ်၊ မကြာခင်မှာပဲ ၊ ကျနော့် ကောင်ကြီးလည်း ကြည်ကြည်သာသာ နဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ ထဲ ပြန်ထည့် လို့ ရ သွား ပြီး မခရေလည်း စောစောစီးစီး ဒင်နာ မတိုင်မှီ အက်ပယ်တိုက်ဇာ ပရိုတင်းရှိတ်လေး သုံးဆောင်ခွင့် ရ သွားပါတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ဟော်တယ် အောက်ထပ် ဆင်းလာတော့ ဟော်တည် ဧည်ကြို ခန်းမ ထဲ က ဆိုဖါ တခု မှာ ထိုင်စောင့်နေတဲ့ လီလီ ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ..... ကျနော့် ရင်ဘတ် မှာ စစ်ကနဲ ဖြစ်ပြီး ၊ ကျနော့်သွေးတွေက နွေးကနဲ၊ ကျနော့်ကောင်ကြီး က ဖြောင်းကနဲ ခါးမှာ ပတ်ထားတဲံ သဘက်အောက်က နေ ထောင်ထလာတယ်၊ … ခစ်.ငါ့ အ၀တ် အစားတွေ ချွတ်ပြီး ပြန်ဝတ် ဖို့ အချိန် မရ ပါဘူး၊ နင့် ဘော့စ်မ စောင့်နေတော့မယ်၊ ...် .အလကား ပြောတာပါကွာ . .ု .
ဆောရီး လီလီ စောင့်နေတာ ကြာပြီးလား. ..ဟင့်အင်း ငါ အခုလေးတင် ဆင်းလာတာပါ.....ကလင်းးးးးးးးးးးးးး.... အဲ လိုနဲ့ ကျနော် တို့ သုံးယောက် မခရေ နဲ့ ကျနော် တို့ နှစ်ယောက် ပထမဆုံး ညက ကခဲ့ကြတဲ့ ကလပ် ကို ထွက်လာခဲ့ကြတယ်၊ မခရေ က ဆွယ်တာ ပွပွ ကြီး ကို ချွတ်လိုက်တော့ အတွင်း က အပေါ်မှာ တော်တော်လေး ဟိုက်ထားပြီး အောက်ကလည်း ပေါင်လည်လောက်ရောက် ထိပဲ ရှည်တယ့် အနက်ရောင် ၀တ်စုံ ၀တ်ထားတယ်၊ ခြေထောက်တွေမှာတော့ အနက်ရောင် ဇာ ပါးပါး အသားကပ်ခြေအိပ် ၀တ်ထားတယ်၊ လီလီကတော့ ကော်လာက အမွှေးဖားဖား ၊ အရှည်က ဖင်ဖုံးရုံ၊ အဖြုရောင် သားရေလိုလို အသားပြော့ချောချော ဂျက်ကတ် နဲ့ အတွင်းက ဘလောက်အင်းကျီက ရွှေရောင်လေး နည်းနည်းသန်း တဲ့ အဖြူရောင် ၊ပေါင် လယ် လောက် ပဲ ရှည်တယ်၊ သူက တော့ အသားကပ် ခြေအိပ်ကို လည်း အင်းကျီနဲ့ လိုက်အောင် အ၀ါနည်းနည်း သန်းတဲ့ အဖြူ ၀တ်ထားတယ်၊ ကျနော် ကတော့ မထင်မှတ်ပဲ အဖြူနဲ့ အမဲ ၀တ်စုံ ကို တွေ့လိုက်ရတော့ စိတ်က ကြွနေပြီ၊ အဟီး၊ အောကားတွေ ထဲ မှာတော့ အဖြူမ နဲ့ အမဲ မ နှစ်ယောက်နဲ့ ဘဲ တဗွေ၊ ဒါမှ မဟုတ်၊ ဘရုနက် ခေါ်တဲ့ ဆံပင် နက်နက် မျက်လုံးညိုညို ကောင်မလေးနဲ့ ဘလွောန်း လို့ ခေါ်တဲ့ ဆံပင် ရွှေရောင် သို့ မဟုတ် အဖြူရောင် ၊ မျက်လုံးပြာပြာ နဲ့ ကောင်မလေး တို့ နှစ်ယောက်နဲ့ ဘဲ တဗွေနဲ့၊ အဲ ဒီ အခန်းတွေကို ကြည့်ရတာ စိတ်ကို အရမ်းကြွစေတယ် မဟုတ်လား၊ ဟီးဟီး၊ ခု တော့ ဆိင်ုလား မဆိုင်လားတော့ မသိ၊ ဗမာမ နဲ့ တရုပ်မ နှစ်ယောက်၊ တယောက်က ၀တ်စုံ အမဲ၊ တယောက်က ၀တ်စုံ အဖြူ ဟီးဟီး၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နုတ်ခမ်းနာနဲ့ တည့်ပါ့မလား ဖြစ်နေပြီ ထင်တယ်၊ ကျနော်က သူတို့ နှစ်ယောက် နဲ့ တယောက်တလှည့်စီ တွဲက ပေးတယ်၊ နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း ၊ မာကရီးတား တွေ ၊ ဘလပ်ဒီမေရီတွေ ၊ နဲ့ ဟိုရော ဒီရော ဆိုတော့ အရှိန် ရလာကြပြီ၊ ကျနော်ကတော့ မက်ကောလန် ၁၅ နှစ်သား ကိုပဲ ရေခဲ နဲ့ သောက်နေတယ်၊ မခရေ နဲ့ က ရင်တော့ ကျနော်က ရဲရဲတင်းတင်း ပဲ သူ့ ခါးလေးကို ဆွဲဖက်ပြီး ကျတော့် ကောင်ကြီးနဲ့ ပွတ်ပွတ် ပေးမိတယ်ဗျ၊ လီလီ နဲ့ ကရင်တော့ အဲ လောက် မလုပ်ရဲ ဘူးဗျ၊ ဒါပေမဲ့ မတော်တဆတော့ ထိမိ ခိုက်မိတာပေါ့ဗျာ၊ နောက်တခု က အမျိုး သမီး နှစ်ယောက်က သုံးတဲ့ ရေ မွှေး ခြင်းလည်း မတူဘူးဗျ၊ အဲ ဒီတော့ တယောက်နဲ့ ကပြီး သွား လို့ နောက် တယောက် နဲ့ တွဲ က ရင် ခံစားမှု ကလည်း ပြောင်းပြောင်းသွားရတယ်ဗျ၊ အဟီး၊ အဲ လိုနဲ့ သောက်လိုက်စားလိုက်၊ ကလိုက်နဲ့ အရှိန်လည်း ရလာ ညလည်း နက်လာတော့ ပြန်ကြရအောင် ဆိုပြီး မခရေ ကားလေး နဲ့ ဟော်တယ်ကို ပြန်လာကြတယ်၊ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်က တယောက်နဲ့ တယောက် လက်ခြင်း ချိတ် လို့၊ ကျနော် တို့ အခန်း စင်္ကြန် ရောက်တော့ မခရေက သူ လီလီ ကို လိုက်ပို့လိုက်အုန်းမယ် နောက်မှ ကျနော့်ဆီလာခဲ့ မယ် ဆိုပြီး သူတို့ နှစ်ယောက် ကျနော့် ကို ကျနော့် အခန်းရှေ့ မှာ ချန်ထားပြီး ထွက် သွားကြတော့ တယ်ဗျ။ ကျနော် လည်း အီလည်လည် နဲ့ ဘာလုပ်ရ ဘာကိုင်ရမှန်းလည်း မသိ၊ လူကလည်း ၀ီစကီ အရှိန်နဲ့ ရီဝေေ၀ ဖြစ် နေတော့ ကုတင်ပေါ် တက်လှဲ ပြီး အခန်းထဲက တီဗီကို ပဲ ရီမုတ် နဲ့ ဟိုလိုင်းပြောင်း ဒီလိုင်းပြောင်း ကြည့်နေ လိုက်တာ ဘယ်လို မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားမှန်းတောင် မသိဘူး၊ …...... .
….ဒေါက်ဒေါက်....ဟေး ရင်မူး အိပ်နေပလား.. ကျနော့် ကို အခန်းတံခါး လာဖွင့်ပေးတာက မခရေ၊ တကိုယ်လုံးမှာ ဟော်တယ်က သဘက် အဖြူကို ပဲ ရင်လျှား ပြီး ပတ်ထားတယ်၊ ကုတင်ပေါ်မှာက ကျနော့်ဘော့စ် လီလီ၊ အိပ်ယာဖုံးစကို ရင် ညွှန့်ထိ ဆွဲတင်ထားတယ်၊ အောက်မှာတော့ ကိုယ်လုံးတီးပဲ ဖြစ်မှာပဲ မျက်နာက ပြုံးစေ့စေ့ နဲ့၊ အောင့်ထားရ တာ ကြာတဲ့ ကျနော် မနေနိူင်တော့ ကုတင် နားကို သွားပြီး လီလီ နူတ်ခမ်း အစုံကို ငုံစုပ်လိုက်တယ်၊ လက်က လည်း တဆက်ထည်း အိပ်ယာဖုံးစ ကို ဆွဲ ဖယ်လိုက်တယ်၊ အားလှလိုက်တဲ့ အသားအရည်၊ အသား အရည်က ဖြူဝင်း နေလိုက်တာ မခရေနဲ့ ဘေးခြင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင်၊ မခရေတောင် ကုလားမ လို့ ထင်သွားရလောက်တယ်၊ ကုလားမ အပျိုကြီးနဲ့ တရုပ်မ အိမ်ထောင်သည်ဘောစေ့ တို့ နှစ်ယောက်နဲ့ အိစက် ညက်ညှောလှတဲ့ မွေ့ယာကြီးပေါ်မှာ အပီ ဆွဲရတော့မှာ ပါလား အတွေးက ကျနော့် လိင်တန်ကြီး ကြီ မာကြော လာယုံမက တဆတ်ဆတ်တောင် တုန်ခါမိတယ်၊ စိတ်ထိန်းမောင်ရင်မူး မင်း ခနလေးနဲ့ ပီးလို့ မရ ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးနေ မိတယ်၊ ကျနော့် တကိုယ်လုံးရှိသမျှ အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ချလိုက်ပြီးတာနဲ့ ၊ ကုတင်ပေါ်က ပက်လက်ကလေး နေတဲ့ လီလီပေါ် လွှားကနဲ ရောက်သွားတော့တာပေါ့၊ မခရေက မနေ့ တနေ့ကပဲ အစွမ်းကုန်လုပ်ထားပြီးပြီ ဆိုတော့ အဖုတ်သစ် ဘော့စ်မ လီလီ ကို တအားကုန် ဆွဲ ဖို့ သန်နေတာလေ၊ ဟဲဟဲ၊ ပန်းနုရောင်သန်းနေတဲ့ အသားအရေ ရှိပေမဲ့ ခလေး အမေမို့လားမသိ နိူ့သီးခေါင်း နှစ်လုံးက လက်မ လောက် တုတ်တုတ် ကြီးနဲ့ ညိုညိုကြီးတွေဗျ၊ ကျနော့် ပါးစပ်က နိူ့သီးခေါင်း ညိုညိုတွေကို အားရ ပါးရ စုပ်ပေးနေတဲ့ အချိန် လီလီက မျက်လုံး အစုံမှေးလို့ ကျနော့် ခေါင်းက ဆံပင် တွေကို ထိုးဖွပေးနေတယ်၊ မခရေလည်း ကုတင်ပေါ်ရောက်နေ ပြီလေ၊ သူက ကျနော့် အနောက်ဘက် လီလီရဲ့ ခြေရင်း ဘက်ကနေ လေးဘက်ထောက်လာရင်း ကျနော့် လဥကြီး တွေကို လှမ်းကိုင် လိုက်တယ်၊ နောက်တော့ ကျနော့် လီးထိပ်ကို နွေးနွေးစိုစိုစိစိ ခံစားရတော့ မခရေ ကျနော့်လီးကြီးကို စုပ်ပေးနေပြီ ဆိုတာ သိလိုက်တယ်၊ ကျနော်က လည်း လီလီ ရဲ့ ပေါင် နှစ်လုံးကြားကို မျက်နှာအပ်ပြီး လီလီ့ စောက်ဖုတ်ကို ကုန်းရက်တော့၊ လီလီက တစောင်းလှည့်ပေးလိုက်တယ်၊ ကျနော် တို့ သုံးယောက်က အရင်တုန်းက အတွေ့ အကြုံရှိဘူးတာကြနေတာပဲ၊ ကြိဂံပုံ ဖြစ်သွားတယ် ကျနော်က လီလီ့ အဖုတ်ကို ရက်နေတုန်း မခရေက ကျနော့် လီးကြီးကို စုပ်ပေးလို့ မခရေရဲ့ အဖုတ်ကို လီလီက ပြန်ရက်ပေးနေတယ်၊ အင်း ဒီနေ့ ကတော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ .. ကျနော် ဖုန်း ပြန်မချခင် မှာပဲ ဟို တဘက်က အမျိုးသမီး နှစ်ယောက် တခစ်ခစ် ရီသံ ကြားလိုက်ရတယ်၊ ကျနော် လည်း ကမန်းကတန်းထ ပြီး တင်းမာနေတဲ့ ဆီးအိပ် ကို လျှော့ဖို့ အိမ်သာ ကို အမြန်ပြေးရတယ်၊ ကို့ကောင်ကြီး က မာန်ဟုန်ပြင်းနေတာေ့ကြာင့် အိမ်သာ အိုးထဲ သေး ၀င်အောင် ပေါက်ဖို့ရာ အခက်ကြုံ ရတယ်၊ လူကို ၀မ်းလျှားထိုးနည်းပါးလောက် ကုံး ပြီး ပေါက်မှ ပဲ အတည့် ၀င်သွားတော့တယ်၊ နောက်တော့ စက္ကန့် ပိုင်း အတွင်းမှာပဲ ကျနော် က မခရေ တို့ အခန်းရှေ့ မှာ ရောက်နေပြီလေ၊ ..လာ ခဲ့ မလား ငါတို့ အခန်းကို …ခစ်ခစ်.. ..... .အင်း မ ခရေ မှေး ကနဲ အိပ်ပျော် သွားတယ်....အင်း လာခဲ့ မယ်လေ.......ကုတင်ဘေး စားပွဲ ပေါ်က ဟော်တယ် ဖုန်းက စူးစူးဝါးဝါး မြည်သံကြောင့် နိူးသွားရတယ်၊ ကယောင်တတမ်း နဲ့ လက်က အကျင့်ပါနေတော့ ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်မိတယ်၊ …..
..... လီလီက လည်း တခစ်ခစ် ရီကာ... . .မခရေ.ဆာပြီလား......ရင်မှုးရေ လို့ ကိယု့်ကိုယ် ကို တွေးမိရင်း တတ်သမျှ မှတ်သမျှ ပညာတွေကို အစွမ်းကုန် ထုတ်သုံးနေရ ပါတော့တယ်၊ ခနနေတော့ မခရေ အားရ ပါးရ စုပ်နေမှုကြောင့် ကျနော့် မှာ ပြီးသွားမှာ စိုးလာလို့ မခရေကို ခန လက်တို့လိုက်ပြီး ၊ .ငါလည်း ယောက်ကျားတွေရဲ့ ဖန်တက်ဆီ ကိုသိပါတယ်၊ လိုးပေလေ့စေ ငါလည်း အလိုးခံချင်နေတာပဲ၊ ခန ခွင့်ပြုနော် ...ဟေ့ လီလီ ဒီကောင်က သူ့ ဘော့စ်ကို တအားလိုးချင်နေပြီတဲ့ ငါ့ကို ဖယ်ခိုင်းနေတယ်..ဒီတရုပ်မ ကို ကျနော် လိုးချင်သေးတယ် အခု ခနနော်... ခနနေတော့ မခရေ အခန်းထဲ ပြန်ရောက်လာတယ် သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင်တွေကို သဘက်တခုနဲ့ ပတ်ထားပြီး အောက်ပိုင်းမှာလည်း . မခရေက ပြုံးစစ နဲ့ ကျနော့်ကို မျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီး ဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ နောက်တော့ ပေါ်တင်ကြီး အင်္ဂလိပ်လိုပဲ လီလီ မျက်နှာနားကို ကပ်ပြောလိုက်ပါတယ်၊ ...အေးပါ. လို့ မခရေကို ပြန်ပြောရင်း ကျနော့် လက်တွေကို ဆွဲပြီး သူ့အပေါ်လက်လုပ်ဖို့ လက်ဟန်ခြေဟန်ပြပါတော့တယ်၊ ကျနော်လည်း ချက်ချင်းပဲ သူ့ ရဲ့ အရည်ရွဲနေ တဲ့ အဖုတ်ဝ ကို ကျနော့် လီးကြီးတေ့ကာ ဖိဆောင့်ချလိုက်ပါတော့တယ်၊ ကျနော်နဲ့ လီလီနဲ့ လှေကြီးထိုးရိုးရိုး ကို ပဲ အစွမ်းကုန် ကြမ်းနေကြတာကို မခရေက ဘေးက ငြိမ်ငြိမ် နေမယ်ထင်ရင် မှားသွားလိမ့်မဗျ၊ သူက ကျနော့် လှုပ်ရမ်းနေတဲ့ ဘောတွေကို လိုက်စုပ်ရက်လုပ်ရင်းက လက်ချောင်တဘက်က လီလီ့ စောက်စေ့လေးကို ပွတ်ပေးနေသလို နောက်လက်တချောင်းက လီလီ့ ဖင်ဝ လေးကို ပွတ်ပေးနေတယ် ဗျ၊ ကျနော့် ဘောကို ရက်နေ စုပ်နေတာကိုတော့ ကျနော်က သိနေပေမဲ့ လီလီ့ ဖင်ဝ ကို ဆွပေးနေတာကိုတော့ နောက် မှ မခရေ ပြန်ပြောပြ လို့ သိတာဗျ၊ မခရေ အဲ လိုဆွပေးလို့ ထင်တယ်၊ လီလီ ကလည်း တအားကုန် အောက်က ကော့ကော့ပေး၊ ကျနော်ကလည်း လုပ်ချင်တာ အရမ်းကြာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော့် ဘော့စ် တရုပ်မ လှလှ ကြီးကို အပီတွယ်နေရတော့ သိပ် အကြာကြီး မထိန်းထားနိူင်ပါဘူး၊ သုတ်ရည်တွေ တဖေါက်ဖေါက်နဲ့ လီလီ့သားအိမ်ဝ ဆီ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိပါတော့တယ်ဗျာ၊ လီလီ ရုံးချူပ်ကို ပြန်သွားပြီး နောက်တနေ့ မခရေလည်း ကျောင်းပိတ်တဲ့နေ့ ကျနော် အားနေ ပြီး လုပ်စရာ မရှိတော့ မခရေ နေတဲ့ အခန်းကို လိုက်သွားတယ်၊ သူက တခြား အဖြူမ တွေနဲ့ ရုမ်းမိတ်လိုမျိုးနေတာလေ၊ သူက ဒံပေါက် ချက်တတ်တယ်၊ ကျနော့်ကို ချက်ကျွေးမယ် ဆိုလို့ လိုက်သွားတာ၊ သူချက်ပြုတ် နေတုန်း သူ့ကွန်ပြူတာ ကျနော် ရှောက်ကလိ မိတယ်၊ အဟီး သူလည်း ခေသူ မဟုတ်ဘူးပဲ၊ ဟိုဟာ ဒီဟာ ဆိုက် တွေ ရှောက်သွားထားတာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်လည်း အားနာတာနဲ့၊ ( လူကို ကိုယ်တိုင် လုပ်နေရပြီ ပဲ သူ့ အတွင်းစိတ်ကို တော့ သွားမလုပ်တော့ပါ ဘူးလို့ ) အဆင့်တန်း ရှိရှိနဲ့ ပဲ ကိုယ့်ဘာသာ၊ ပိတောက်ဝါနဲ့ ချပ်နေလိုက်တယ်၊ နောက်တော့ မခရေ အခန်းထဲ ဝင်လာတယ်၊ ...ကဲ စားလို့တော့ ရပြီ ရင်မူးရေ ငါရေ နည်းနည်း ချိုးလိုက်အုန်းမယ်.ရတယ် မခရေ ကျနော် စောင့်နိူင်ပါတယ်၊ ဒီမှာစာလေး နည်းနည်းဖတ်လိုက်အုန်းမယ်.
. …........ဒီမှာ မီး...လာစားပါအုန်းလား....ကိုကြီး လား.. ဒံပေါက်ချက်ထားတယ်လေ.....သဘက်ကြီးတခု နဲ့ ရင်လျှားထားတယ်၊ ကျနော် က ဂျီတော့ မှာ ပိတောက်ဝါနဲ့ ချပ်နေ တာ ခနလှမ်းကြည့်ပြီး သူ့ခေါင်းက သဘက်ကို ဖြေလို့ စိုနေတဲ့ ဆံပင်တွေကို သဘက် နဲ့ ညှပ်ပွတ်ပြီး ရေခြောက်အောင်သုပ်နေတယ်၊ …... လက်တဘက်က တော့ ကျနော့်ခေါင်းကို လှမ်းခေါက်လိုက်တယ်၊ မျက်စောင်းလည်း တချက် ပစ်ထိုးလိုက်သေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူ့ နိူ့သီးခေါင်းတွေက ထိုးထောင်ထ နေပြီ၊ အပျိုကြီးသာ ဆိုတယ် အလုံးတုတ်တုတ် နဲ့ နိူ့သီးခေါင်းတွေက လက်တဆစ်လောက် ရှည်တယ်၊ .. သူ့စားပွဲက ဆဲဖုန်းက အသံမြည်လာတယ်၊ သူက ကောက်ယူလိုက်ပြီး၊ ကော်လာ နာမည်ကို ကြည့်လိုက်ပြီး မျက်နှာက ဝင်းကနဲ ဖြစ်သွားတယ်၊ ချက်ခြင်းပဲ ထူးလိုက်တယ်၊ ….ဟွန့် ကိုကြီးက မလာနိူင်ပဲန.တင်းးးးး....အင်း ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ကိုကြီးရဲ့ မီး လမ်းလျှောက်ရင်း ခလုပ်တိုက်မသွိားလို့ပါ. ကျနော်က မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကွန်ပြူတာထဲ မှာ အာရုံစိုက်နေသလိလုပ်ထားလိုက်တယ်၊ စိတ်ထဲကတော့ အန်မယ် ဒီအပျိုကြီးမှာ ဗမာ အသိတွေ ဘာတွေ ရှိလို့ပါလား၊လို့၊ သူတို့ ညီအမ တွေက ငယ်ငယ်လေး ထဲက ဒီရောက်နေကြပြီး ဗမာလိုတောင် ပီပီသသ ပြောတတ်ကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ၊ ဗမာပြည်တောင် ဒီအရွယ်ရှိပြီ ဘယ်နှစ်ခေါက်ရောက်ဖူးသလဲ ၊လက်ချိုးရေလို့လက်တဘက် မပြည့်တာ၊ ...ဘယ်မှာလဲ အခုက.... …..ဟဲလို.... အမလေး အသံက ညုတုတု နဲ့ ၊ကျနော့်စိတ်ထဲ မနာလိုဖြစ်သွားတယ်၊ သူ့ အရွယ်နဲ့ အကိုကြီးခေါ်ရအောင် ဟိုဘက်ကလည်း အသက်ဘယ်လောက်တောင်ကြီးနေပလဲ မသိဘူး၊ မခရေ ပြောနေတဲ့ အသံက ကျနော့်ကို ပြောတဲ့ အသံနဲ့တောင် မတူဘူး ၊ဟိုဖုံးထဲက ဘဲကြီးကို ချွဲနေလိုက်တာ ၊ကျနော်တောင် မနာလို ဖြစ်သွားတယ်၊ ကျနော် မနေနိူင်တော့တာနဲ့ ဂျီတော့ကနေ လော့အောက်လုပ်ပြီး ထွက်လိုက်တယ်၊ ကုတင် စောင်း မှာ ထိုင်ပြီး ဖုံး ပြောနေတဲ့ မခရေဘေးနားကို သွားထိုင်လိုက်တော့ သူ့ နူတ်ခမ်းရှေ့ ကို လက်တချောင်း ထောင်ပြီး အသံမထွက်ဖို့ အချက်ပေးလိုက်လို့ ကျနော် ကခေါင်းငြိမ့် ပြပြီး သူ့ ရေမခြောက်တခြောက် ဆံပင် ကို အသာဖယ် ပြီး လည်တိုင်လေးကို ငုံနမ်းလိုက်တယ်၊ သူက တဘက်ကို ခေါင်းစောင်းပြီး ဖုန်းပြောနေတာ ဆိုတော့ နမ်းရ အဆင်ပြေတယ်လေ၊ ခေါင်းလျှော်ရှည်နဲ့ ဆပ်ပြာရည် အနံ့ လေးက သင်းပျံ့ပျံ့ လေး၊ ကျနော့် ညီမောင် နည်းနည်း မာလာပြီ၊ သူ့ရင်သား အပေါ်မှာ ပတ်ချည်ထားတဲ့ သဘက်ကို ဖြေ ချလိုက်တယ်၊ ဘာမှ တော့ မပြောဘူးကျနော့်ကို မျက်စောင်းလှလှ လေး တခုပဲ ပစ်ပေးလိုက် ဖုံးထဲ မှာ အကိုကြီး နဲ့ မီး နဲ့ ပဲ ပတ်ချွဲနပ်ချွဲ လုပ်နေတယ်၊ စောက်မြင်ကပ်ကပ်နဲ့ ရေချိုးပြီးစ လတ်လတ် ဆပ်ဆပ် နိူ့ကြီး တွေကို အားရ ပါးရ ဆုပ်နယ်ပြီး နို့သီးခေါင်းတွေကို ငုံခဲ လို့ တပြွတ်ပြွတ် စို့လိုက်မိတယ်၊ .....ဲ့ ......တင်းးး.....ု့ ..အိ....အား.
...... ….. ….....အကိုကြီးက လည်း မီးဘာမှ လုပ်မနေပါဘူး၊ အခု ကျောင်းက တရုပ်ကလေး တယောက်ရှိတယ် အခန်းထဲမှာ.......... ကျနော် ကုတင်ပေါ်တက် ပက်လက်လှန်လိုက်တာနဲ့ သူက ကျနော့် ပေါ်တက်ခွပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ချလိုက်ပါတယ်၊ ကျနော့် အလံတိုင် ကြီးကို သူက လက်နဲ့ ထိန်းကိုင်ရင်း သူ့ စောက်ဖုတ်ဝ မှာ တေ့ ပေး လိုက်ပါတယ်၊ နောက် တော့ ကျနော့် ကို မြင်းစီးသလို အပေါ်က ဆောင့်ပါတော့တယ်၊ အချက် ၂၀ အစိတ် လောက်မှာပဲ သူလည်း တွန့်တက် ကျနော်လည်း တောင့်တင်းပြီး ကာမ စည်းစိမ် အထွတ် အထိတ် ကို ရောက်သွားကြပါတော့တယ်။ .. …. မခရေဖုံး ချလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော် က တော်တော် အရှိန်ရနေပါပြီ၊ သူလည်း အရမ်း ဖီးတက် နေပြီ မို့ ဖင်ကြီးတရမ်းရမ်း နဲ့ ကော့ပေးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော် က မပြီးသေးပဲ ခါးအတော် ညှောင်းသွားလို့ ခါးဆန့် ရင်း ခနနားလိုက်တာ ကျနော့် လီးကြီးက သူ့ အဖုတ်ထဲက ပလွတ် ကနဲ ထွက်လာတယ်၊ သူ လည်း သိပုံရတယ် ၊ နောက်ပြန်လှည့်လိုက်ပြီး၊ .......ကျနော်က စို့ကောင်းကောင်းနဲ့ စို့နေပြီး လက်တွေက သူ့ဘိုက်သား ရှပ်ရှပ်တွေက အောက်ကို လျှောဆင်းသွားပြီး အမွေးအမြှင် မရှိ တဲ့ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို ကလိနေမိတယ်၊ သူ့ အဖုတ်ကလည်း အရည်ရွဲနေပြီ၊ ဒါတောင်မှ ဖုံးက မချသေးဘူး၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော်က သူနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီး သူ့ပေါင်၂ခုကြားမှာထိုင်ချလိုက်တယ်၊ မခရေရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို တဘက်တချက် ဖြဲရင်းက ဟတတ နဲ့ ဖေါင်းမို့မို့ စောက်ဖုတ်ကို ကျနော့် ပါးစပ်နဲ့ ဖိကပ်ပြီး လျှာကို တတ်နိူင်သမျှ ဆန့်ထုတ် ရက်ပေးလိုက်တယ်၊ နောက်တော့ ကျနော်လည်း အရှိန်ရလာတာနဲ့ မခရေ ရဲ့ စောက်စေ့၊ရော စောက်ဖုတ်နူတ်ခမ်းသားတွေ၊ စောက်ခေါင်း အတွင်းပါ မကျန် နှံ့နှံ့စပ်စပ် ရက်ပစ်လိုက်တယ်၊ .မောင်ရင်မူး ညှောင်းရင် ကုတင်ပေါ်တက်၊ ငါတလှည့်လုပ်ပေးမယ်.... ….ဘိုင်ဘိုင...ဘာလုပ်နေရမလဲ အကိုကြီးကလည်း မီး တို့ က စာဖတ်နေကြတာပါ၊........ ကျနော် တော့ လူကလည်း တင်းလာ မခရေ ဖုံးထဲ ချွဲနေတာလည်း စောက်မြင်ကပ်လာတာနဲ့ ထိုင်ရာက ထ ပြီး ပြဲအာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ သူ့ အဖုတ၀်ကို ကျနော့်လီးကြီး ထည့်သွင်းလိုက်တယ်၊ ဒီတခါတော့ သူခနကြိတ်ခံပြီး ဖုန်း မိုက်နေရာ ကို လက်တဘက်နဲ့ ပိတ် ပြီး အီးကနဲ ညီးလိုက်တယ်၊ နောက် ကျနော့် ရင်ဘတ်ကို တွန်းလွတ်ပြီး ကုတင်ဘက်ကို လှည့် ကျနော့်ကို ကျောပေးပြီး ကုန်းလိုက်တယ်၊ နောက် ကုတင်ပေါ်မှာ တတောင်ထောက်ရင်း နဲ့ ဖုံးဆက်ပြောနေတယ်၊ ကျနော်က သူ့ဖင်ကြီး နူစ်လုံးကို ဆွဲဖြဲပြီး ဖင်အကွဲကြောင်းအောက်က အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်း ကြီး ထဲ ကျနော့် လိင်ချောင်းကြီးကို တေ့ပြီး အသားကုန် ဆောင့်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်၊ နောက်တော့ ထုံးစံ အတိုင်း စေးစေးပိုင်ပိုင် နဲ့ ကောင်းလှတဲ့ အပျိုကြီး အဖုတ်ထဲကို တဖုန်းဖုန်း ဆောင့်နေမိ ပါတော့တယ်၊ မခရေလည်း မနေနိူင်တော့ ဘူးထင်ပါတယ်၊ သူလည်း ဖင်ကြီး ကို ကော့ကော့ပေးလာရာက၊ ...ို့ .......အော် မီးက လည်း ချစ်ပါတယ် ကိုကြီးရဲ့ လပ်ဗ်ယ.......အကိုကြီး မီးသွားရအုန်းမယ် မီးဖိုပေါ်မှာ ဟင်းအိုးတန်းလန်း နဲ့မ..ူ ....် .
ကျနော် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်မှာ ဇီဇဝါနဲ့ သားလေး ပဲ ရှိနေပါတယ်၊ ကျနော့် မိန်းမ မြနှင်းဆီ က သူ့ အဖေ ဦးကြီးမောင် ဟတ်အတက် ဖြစ် ပြီး ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ် ဆိုလို့ ဖရော်ရီဒါကို လိုက်သွားလေရဲ၊့ အဲလို ဖြစ်တဲ့ အချိန်က ကျနော် မခရေ အခန်းထဲ မှာ ရှိနေတယ်လေ၊ တကယ်တော့ ညနေစာ သူချက်တဲ့ ဒံပေါက် စားပြီး ၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ထမင်းစားပြီး တစ် ဆိုတာလို၊ တချီဆွဲ လိုက်ကြသေးတယ်၊ ပြီးတော့ ကျနော် လည်း ဟော်တယ် ပြန်ရမှာ ပျင်းတာနဲ့ မခရေ အိပ်ယာကျဉ်းကျဉ်းလေး ပေါ်မှာပဲ သူ့ အနောက်က ပုဇွန်ထုတ် ကွေးကွေး ပြီး ဖက်ရက် အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်၊ ည ၁၀ နာရီလောက် မှာ တရေးနိူးတော့ ကျနော့် တကိုယ်လုံး အကြောတွေက တင်းတောင့် နေတာ၊ အဆိုးဆုံးက ကျနော့် ညီတော်မောင်ပေါ့၊ သူက တချောင်းလုံး အကြော တွေချည်း စုနေတာ မဟုတ်လား၊ ကွန်စတွပ်ရှင်း ဆိုက်ထဲက ရီဘား ကတောင် သူနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ပျော့တယ် လို့ထင်ရအုန်းမယ်၊ အဟီး၊ မခရေရဲ့ ဖင်လုံးကြီး နှစ်ခုကြားထဲ အတင်း တိုးဝင် တောင်မတ်နေလိုက်တာ၊ ကျနော့် ကျောပေးအိပ်နေတဲ့ မခရေကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း သိမ်သွားတဲ့ ခါးလေး အောက်က စွံ့ကားထွက် လာတဲ့ တင်ပါး အိုးကြီးတွေက မြင်ရတဲ့ ပုရိဿ တွေ သွားရည် ရွှတ်ကနဲ မနည်းထိန်းရမဲ့ ပုံ ဆိုတော့ ၊ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ၊ ကျနော့် ကိုယ်ကို အသာလေး လျှောချပြီး အောက်ကနေ ဖင်ကို ကော့ပေးလိုက် တော့၊ ညီတော်မောင်က ဝင်နေကြတွင်း ကို လက် အကူညီ မလိုပဲ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး တိုးဝင်သွားတော့ တာပေါ့၊ အီးကနဲ အသံလေး နဲ့ နိူးလာတဲ့ မခရေကလည်း ချက်ချင်းပဲ တုန့်ပြန်လာတယ်၊ အဲ လို ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ပုဇွန်ထုတ်ကွေးကလေး နဲ့ ဇိမ်ခံပြီး လိုးနေကြတုန်း၊ မခရေ ဖုန်းက ထမြည်လာပြန်တယ်၊ ပထမ တော့ မကိုင်ပဲ နေပေမဲ့ အပျိုကြီးပီပီ ဖုန်းကို ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူ့ မေမေ ဒေါ်ကန့်ကော် ဖြစ်နေတယ်၊ မခေါ်စဘူး ဒီအချိန် ကြီး ဆိုပြီး သူဖုန်းကိုင်ပြီး ကျနော့်ကို အသံမထွက်ဖို့ အချက်ပေးလိုက် လို့ ကျနော် လည်း အသာငြိမ်လိုက်ရတယ်၊ ခါးကတော့ ရပ်လို့ မရဘူးလေ၊ ညီတော်မောင် ဖြေးဖြေးချင်း ၀င်လို့ ထွက်လို့ရအောင်လှုပ်ပေးနေရတုန်းပဲ၊ နောက်တော့ သူ ကျနော့် ကို တွန်းလိုကြ် ပီး ထထိုင်လိုက်တော့ မှ စီးရီးယပ် ဖုံးကော မှန်း သိလိုက်တယ်၊ သူ ပြောနေတာ နားထောင်ပြီး ကျနော့် ယောက္ခထီးကြီး တခုခု ဖြစ် မှန်းတော့ သိတယ်၊ နောက် ဖုံးချသွားမှ သူပြောတာက သူ့ အဖေ ဟတ်အတက်ဖြစ်လို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရ ကြောင်း၊ အခု တော့ စိတ်ချရပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၊ မြနှင်းဆီ ကို ခေါ်ထားကြောင်း၊ သူ့ကို တော့ ကျောင်း က ခွင့် မရရင် လာ ဖို့ မလိုကြောင်း စိတ်မပူနဲ့ ဟု ပြောကြောင်း သိရပါတယ်၊ မြနှင်းဆီက တကယ်တော့ သူ့ အဖေ ရဲ့ အချစ်ဆုံးသမီး၊ ဗျ၊ သူတို့ မိသားစု မှာလည်း သူက အထက်ဆုံး အသွက်ဆုံး၊ နောက် ဖာမစ်စစ် ( ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ ) ဆိုတော့ ဆေးဝါး အကြောင်းလည်း ကောင်းကောင်းသိတယ်လေ၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်က အိမ်မှာ မှ မရှိတာ သားကို သူဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ၊ ကျနော်တွေးနေတုန်း ကျနော့်ဆဲဖုံး မြည်လာတယ်၊ ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ကျနော့်မိန်းမ မြနှင်းဆီ၊ သူ့ အဖေ ဟတ်အတက် ဖြစ်လို့ ၊ သူဖရော်ရီ ဒါကို သွားမယ် ဆိုတာရယ်၊ အိမ်မှာ ဇီဇဝါ ကျနော့် ခလေး ကြည့်ဖို့ ကျန်ခဲ့မယ် ပေါ့၊ ဇီဇဝါက နောက် တပါတ် ဆို ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့ မှာ ဆိုတော့ အိမ်ကို ကျနော် ပြန်ရောက်ပြီး သုံးလေး ရက် ဆိုရင် အဆောင် ပြန်သွားနေမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်၊ ကျနော်က မခရေ ဆီက သတင်း အကုန်သိ ပြီး ဖြစ်သော်လည်း မသိဟန် ဆောင်ပြီး အံသြ သလိုနှင့် မေးမြန်း အားပေးပြီး စိတ်မပူပဲ သွားဖို့၊ ကျနော်လည်း မနက်ဖြန်ဆို ပြန်လာတော့ မည့် အကြောင်း ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ အိမ်မှာ မိန်းမ မရှိပဲ ခယ်မ ချောလေး နဲ့ အတူနေရတော့၊ အဟီး ၊ သူကတော့ ဘယ်လို နေမလဲ မသိဘူး ကျနော်က တော့ တချိန်လုံး စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပဲ ၊ ဟီးဟီး၊ ပိုဆိုးတာက မနေ့ တနေ့ ကပဲ မရီးကို အားရ ပါးရ ကောင်းကောင်းကြီး လိုးလာခဲ့တာ ဆိုတော့ ခယ်မလေး သာ လုပ်ခွင့်ရလိုက်ရင် ၊ ညီအမ သုံးယောက် မှာ ဘယ်သူက အကောင်းဆုံးလည်း သိခွင့်ရမှာပဲ လို့ တွေးလိုက်မိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မခရေနဲ့ မြနှင်းဆီ ယှဉ်ပြီး တွေးကြည့်လိုက်တော့ တမျိုးစီကောင်းနေတာပဲ ၊ ဘယ်သူက ပိုသာသလဲ ပြောရတော့ အခက်သား၊ မခရေက အားကစားကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဟာတွေ ကစားတယ်၊ ဘတ်စကက်ဘော တို့၊ တောင်တက် တဲ့ ဟိုက်ခင်း တို့ ဘာတို့ စိတ်ဝင်စား တယ်၊ လုပ်လည်း လုပ်တယ်၊ နောက် ခလေး မမွေးဘူးတဲ့ အပျိုလည်း ဖြစ်တော့ သူ့ကိုယ်ခနွာက အဆီ ဆိုလို့ တစက်မှ မရှိဘူး ကျစ်လစ်နေတယ်၊ ဖင်လုံးသာ ကြီးတာ မာတယ် ပေါင်တန် တွေ ဘာတွေလည်း ကျစ်လစ် နေတယ်၊ မြနှင်းဆီကျတော့ တမျိုး ၊ ခလေး .
မွှေးထားဘူးတဲ့ အိမ်ထောင်သည်မို့ ဘော်ဒီကတော့ တင်းတင်း မာမာ ကြီး မဟုတ်တော့ ပေမဲ့ သူ့နေရာနဲ့ သူ အမို့ အမေါက်၊ အဖုအထစ် ကလေး တွေနဲ့ ကြည့်ကောင်းသေးတယ်၊ မျက်နှာကတော့ ကျက်သရည် ရှိရှိ နဲ့ အင်မတန် ချောတယ်၊ နှာတန်လေးကို စင်းကော့နေပြီး မျက်လုံးလေး တွေ လည်း အရမ်းလှတယ်၊ ဇီဇဝါတောင် ငယ်ဂုဏ်လေး ရှိလို့ သွက်နေပြီး ဘော်ဒီကျစ်ကျစ် လစ်လစ် နဲ့ အပျိုစင်လေး ( လို့ထင်ရတာပဲ၊ ဘဲ မယ်မယ်ရရ မရှိသေးလို့ ) မို့ တပ်မက် ချင်စရာ ကောင်းပေမဲ့ မျက်နှာ အလှက မြနှင်းဆီကို မမှီဘူး၊ မြနှင်းဆီက သူ့ အမေ ဒေါ်ကန့်ကော်နဲ့ ချွတ်စွတ်နည်းပါးလောက်တူတယ်၊ ကျန်တဲ့ ညီ အမ တွေက ဦးကြီးမောင်ဘက် ကို နွယ်သွားကြလို့ထင်တယ်၊ အဲ လို ကျက်သရည်ရှိရှိ မချောကြဘူး၊ အဟီး၊ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျနော့် မှာတော့ ရတောင့်ရခဲ အခွင့်အရေးကြုံ တုန်း ခယ်မ လေး ဇီဇဝါကို ဘယ်လို ကြံ ရမလည်း အကြံထုတ်နေမိတော့တယ်။ အဲ ဒီကောင်မ လေး ကလည်း အနေမတတ်ဘူး ( ဗမာ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ အမြင်နဲ့ ပြောတာပါ၊ အဟီး ) အိမ်မှာ ဆိုရင် ဘောင်းဘီတို နဲ့ တိုတာကမှ ပေါင်ခွကြားက အောက်ကို တလက်မ လောက်ပဲ ရှိမလားမသိဘူး၊ ပြီးတော့ ဆိုဖါတို့ ဘာတို့ ပေါ် ထိုင်ရင်လည်း ဖြဲကားထိုင်တယ်၊ ကျနော့် စိတ်ကို ဆွဆွ ပေးနေသလိုပဲ၊ မနေ့ကလည်း အိမ်ရှေ့ ပက်တီယို အောက်က ခုံတန်းရှည်မှာ ထိုင်ပြီး ခြေသည်းဆိုးနေတာ၊ ဒူးတဘက်ထောင်လို့၊ ကျနော်တောင်မှ ဘောင်းဘီခွကြားက အဖုတ်များ မြင်ရ မလား လို့ မသိမသာ မျက်စေ့ကစား လိုက်သေးတယ်၊ ဘောင်းဘီခွကြားကတော့ ဟနေတယ် ဒါပေမဲ့ အထဲ မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီ အစိမ်းရောင်ကြီး ဝတ်ထားတယ်၊ ခွိး ကြံကြံဖန်ဖန် အတွင်းခံဘောင်းဘီ တောင်မှ အစိမ်းရောင် နဲ့ ဘယ်လို ဟာမ လေးလည်း မသိပါဘူးလို့ တွေးမိတယ်။ အင်း ကျနော့် အလုပ်က အခြေအနေလည်း နည်းနည်း ပြောရအုန်းမယ်၊ မင်နီဆိုတာ မှာ ကျနော့်ဘော့စ် လီလီ ကို မခရေနဲ့ အတူ တူဘိုင်ဝမ်း ကျနော် ပွဲကြမ်းခဲ့တယ် မဟုတ်လား၊ အခု ကျနော်တို့ ရုံးချူပ်ပြန်ရောက်ပြီး ရုံးပြန်တက်တော့ ဘော့စ်က ပေါ်တင်ပဲ ခေါ်ပြောတယ်၊ ငါ တို့ ဆက်ဆံရေးက လယ်ပယ်တဆင့်တက် သွားပေမဲ့လည်း၊ နင်လည်း အိမ်ထောင်နဲ့ ၊ ငါလည်း အိမ်ထောင်နဲ့၊ ငါတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တွေ ( ဒီမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လို့သုံးတာက ပညာရပ်တခုမှာ ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့် လယ်ပယ်တခု နဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတာကို ဆိုလိုပါတယ် ) ငါတို့ အလုပ်ကို လည်း အထိခိုက် မခံနိူင် ဘူး၊ ဆိုတော့ တတ် နိူင်သလောက် အနေအထိငု ဆင်ခြင်ပေးပါ၊ လို့ ပြောပါတယ်၊ သူ့ အပြောအရ တော့ နောက် တခါ အခြေနေပေးရင်လည်း လုပ်ကြမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ၊ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ လာမပါတ်သက် နဲ့လို့ ပြောတာပေါ့၊ နောက် ကျနော့်ကို လည်း ကောင်းကောင်းရကွန်မန်ဒင်းရှင်း ( ထောက်ခံချက် ) ကောင်းကောင်း ပေးလို့ ရာထူးလည်း တိုးမယ့် အလားအလာရှိနေပါတယ်၊ ရင်မူးတို့ ကံကောင်းချက်ကတော့၊ဟင်းဟင်း။ အဲလိုနဲ့ စနေတရက်မှာ ကျနော့်သား ဒေးကဲယား ကျောင်းက ပိုက်ဆံရှိတဲ့ မိဘ တွေရဲ့ ခလေး တယောက် မွေးနေ့ပွဲကို ခလေး တွေ ဆော့စရာ စီးစရာတွေ ရှိတဲ့ ပန်းခြံတခု မှာလုပ်တယ်၊ မိဘ တွေကိုလည်း ဖိတ်တယ်၊ အဲဒီပန်းခြံက ဝင်ကြေး က တော်တော် ဈေးကြီး ပါတယ်၊ ဇီဇဝါက သူက သားနဲ့ ကပ်လိုက်ချင်တယ်၊ ကလေး တွေ အတွက် ဆိုပေမဲ့ လူကြီးတွေ အတွက်လည်း အများကြီး ရှိပါတယ်၊ ဒဒ်စ်စနေလန်း ဆန်ဆန်ပေါ့ အဲလောက် တော့ မကြီးပါဘူး၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော် တို့ လိုက်သွားကြတယ်၊ ဟိုရောက်တော့ ခလေး တွေကို အုပ်စုနဲ့ပဲ သူတို့ ကစားစရာတွေ ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲ တွေ လုပ်ပေးပြီး စောင့်ကြည့်မယ့်သူတွေ လည်း ရှိတော့ ကျနော် နဲ့ ဇီဇဝါတို့ လစ်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်၊ အဲ ဒီမှာ ဇာတ်လမ်းစတာပဲ၊ အဲဒီက စီးစရာတွေ က အစုံရှိတယ် ရိုလာကိုစတာ လိုမျိုးတွေ ရော၊ ရေစီးကြောင်းထဲ၊ အမှောင်ထဲ မျိုးစုံပေါ့၊ ဇီဇဝါက စီးရင်း ရုတ်တရက် အောက်ကို ပြုတ်ကျသွား တဲ့ ၊ ရင်ကို ဖိုသွားစေတဲ့ အခါမျိုးကျရင် အော်ဟစ်ပြီး ကျနော့် လက်မောင်ကို တွယ်ဖက်လာပါတယ်၊ ကျနော်လည်း ပထမတော့ သိပ်မရဲသေးဘူး၊ အမှောင်ထဲ ရှောက်ပြေးတဲ့ ရိုလာကိုစတာ မှာ သူက အအော် ကျနော့်လက်မောင်း အဖက် ကျနော်ကလည်း သူ့ခါးလေး ကို ဖက်ထားလိုက်ရာက၊ ပြန်မလွှတ်ဖြစ်တော့ဘူး၊ အဟီး၊ ခပ်တည်တည် ပဲ ၊အဲဒါက ပုံမှန် လိုလို ဘာလိုလို နဲ့ လမ်းလျှောက်ရင်တောင် ခါးကို ကိုင်ထားလိုက် တယ်၊ သူက လည်း ကျနာ့် ရင်ကို မှီတွယ်လို့ပေါ့၊ နောက် ပိရမစ်လို မံမီ တွေ ကြားထဲ မှောင်မှောင်မည်းမည်း ရထားလေး နဲ့ ရှောက်သွား တော့၊ ကျနော့်ဘက်ယိမ်းလာတဲ့ သူ့မျက်နှာကို .
ငုံ့ပြီး နူတ်ခမ်းလေး ကို ငုံစုပ်ပစ်လိုက်တယ်၊ သူက လည်း ပြန်တုန့်ပြန်လာတယ်ဗျ၊ အဲလို ပေါ်တင်ကြီးလည်း ပွင့်လင်း သွားရော၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အနမ်းတွေက အဆက်မပြတ်တော့ဘူးလေ၊ အပျိုမလေး ရဲ့ နူတ်ခမ်းက လည်း ချိုလိုက်တာ၊နုဖတ် ပျော့ပြောင်းပြီး စိုစွတ်နေတယ်၊ ကျနော့် လက်တွေကလည်း သူ့ခါးလေး ကိုသိုင်းဖက်ထားရာက မှောင်တဲ့ နေရာရောက်ရင် သူရဲ့ ရွှေရင် အစုံပေါ်ကို ရောက်ရောက်သွားပြီး သူ့တီရှပ် ပေါ်ကပဲ အားမလို အားမရ ဖျစ်ညှစ်မိတယ်၊ နောက်တော့ နည်းနည်း မှောင်ပြီး နှစ်ယောက်တတွဲ စီးရတဲ့ ဟာမျိုး တွေ လိုက်ရှာပြီး စီးတော့တယ်၊ ကျနော့် ညီတော်မောင်ကတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ထဲ မှာ တအားကို တင်းကျပ်လို့ နေနေပါပြီ၊ ခယ်မ အပျိုမလေး ကို တွယ်ရတော့မယ် ဆိုတဲ့ အသိက ကျနော့် ရဲ့ အစားစားချင်တဲ့ စိတ်ကို တောင်ပျောက်နေပါပြီ၊ သားလေး ရဲ့ မွေးနေ့ ပါတီပွဲ အပြီး မှာ အဲဒီပန်းခြံကနေ အိမ်ကို ပြန်မောင်းလာ တော့ ကျနော့် အိပ်သရီး ဟမ်မာ ဟာ ဂျက်လေယဉ်လို တဝီးဝီးနဲ့ ပေါ့၊ အိမ်ရောက်တော့ သားလေး က ကားထဲက ကလေးထိုင်တဲ့ ခုံ ပေါ်မှာ ခေါင်းလေး စောင်းပြီး အိပ်ပျော်နေပြီ၊ သူ့ ကို အသာလေး ချီပြီး သူ့ အခန်း က ကုတင်လေး ပေါ် မှာ အသာ သွားတင်ပြီး စောင်လေး ခြုံပေးခဲ့လိုက်တယ်၊ နောက် ဇီဇဝါ အိပ်တဲ့ အခန်းဘက်သွားကြည့်လိုက်တော့ သူ့ ကို မတွေ့ရဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ရေချိုးခန်း တံခါး ပိတ်ထားပြီး ရေသံတွေ ကြားနေရတော့ ရေချိုးနေပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်၊ အင်းလေ အချိန်တွေ ရှိပါသေးတယ်၊ လဘက်ကောင်းစားချင်ရင် ပလောင် တောင်တက် နှေးပေါ့ လို့ တွေးရင်း ကျနော် လည်း ကျနော်တို့ အခန်းထဲ ဝင်၊ အခန်းထဲက ရေချိုးခန်းမှာ ရေပူပူ ဖွင့်ပြီး ရေပန်းအောက် ရေဝင်ချိုးလိုက်ပါတယ်။ အား အခု မှ ပဲ အကြော အခြင်တွေ နည်းနည်း လျှော့သွားတယ်၊ တနေ့လုံးပန်းခြံထဲ မှာ ခယ်မချောလေးနဲ့ တင်းနေခဲ့ရတဲ့ အကြောတွေ၊ ဟိုက် အခု မှ တွေးမိတယ်၊ ဟိုကောင်မလေး မျှော်ရှာလျှော့မယ် မြန်မြန်သွားမှ၊ အဟီး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွေးလို့ သဘောကျမိသလို၊ ညီတောင်မောင်က လည်း သဘောတူကြောင်း ခေါင်းတဆတ်ဆတ် ငြိမ့်ပြတယ်ဗျ၊ အိမ်မှာက အခု ကျနော်တို့ သုံးယောက် ထဲ မဟုတ်လား သားက လည်း အိပ်မောကျနေ ပြီ ဆိုတော့၊ ကဲ စဉ်းစားတာကြာတယ် ကျနော် ရေချိုးပြီးစ ခါးမှာ သဘက်ပတ်ရက်နဲ့ပဲ ဇီဇဝါ အိပ်တဲ့ အခန်းဆီကို လျှောက်လာခဲ့မိတယ်။ အခန်းတံခါးတွန်းဖွင့် လိုက်တော့ ဘာသံမှ မကြားဘူး၊ ဟင်း ဘယ်များသွားနေသလဲ ၊ သေခြာကြည့်လိုက်မှ အိပ်ယာပေါ်မှာ စောင်ခြုံ ထားတဲ့ အပုံလေး လိုဖြစ်နေတယ်၊ အဟီး ခေါင်းမြီးခြုံ အိပ်နေတာကိုး၊ အခု နလေး တင်ရေချိုးထားတာ၊ စောင်ခေါင်းမြီးခြုံထားပုံထောက်ရင် ကောင်မလေး ရှက်နေပြီထင်တယ်၊ ကျနော်က တော်ကြာ သားနိူးလာပြီး မတော်တဆ သူ့အန်တီလေး လာရှာနေရင် ပက်ပင်းကြီး တိုးနေမှာ စိုးလို့ တံခါးကို ပြန်ပိတ် ဂလန့်ချလိုက်တယ်၊ နောက်တော့ ခါးမှာ ပါတ်ချည်ထားတဲ့ သဘက်ကို ကြမ်းပေါ် ဖြေချလိုက်ပြီး၊ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ပဲ ကုတင်ပေါ် တက်လိုက်တယ်၊ ဇီဇဝါရဲ့ ဖုံးထားတဲ့ စောင်လေးကို ခေါင်းပေါ်က အသာလှန်ချလိုက်တော့ ခေါင်းအုံးပေါ် မှောက်ရက်အိပ်နေတယ်ဗျ၊ စောင်ကို ပုခုံးကျော်ရုံလှန်လိုက်တော့ အောက်မှာ ကျနော့် မိန်းမ ရဲ့ ပန်းနုရောင် ဘေဘီဒေါ ပဂျားမားလေး ယူဝတ်ထားတာတွေ့ လိုက်ရတယ်၊ ကျနော်က သူ့ ပုခုံးလောက်ပဲ ရှိတဲ့ ဆံပင်လေး ကို အသာဖယ်ရင်း လည်ဂုတ်လေး တွေ ပုခုံးသားလေး တွေကို နမ်းလိုက်တယ်၊ အား လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရေချိုးပြီး စမို့ ခေါင်းရှော်ရှည်၊ ဆပ်ပြာမွေးနံ့တွေ နဲ့ သင်းပျံ့နေတယ်၊ ဇီဇဝါက လုံးဝ မလှုပ်ရှားဘူးဗျ၊ ကျနော်က စောင်ကို အောက်ဘက်က နေ အပေါ်ကို အသာလှန်တင်လိုက်တယ်၊ ဘေဘီဒေါ ပဂျားမားက ပေါင်ရင်းလောက်ပဲ ရောက်တဲ့ ကောင်မို့လို့ခြေသလုံးပေါင်တန် တွေက ဖွေးကနဲ ပေါ်လာတယ်၊ စောင်ကို သူ့ခါးလည်ပေါ်လောက် တင်ပေးလိုက်တယ်၊ စောင်က သူ့ခါးပေါ်လှန်တင်ခံရပြီး သူ့အောက်ပိုင်းကို ကျနော် ကြည့်နေမှန်း သိဟန်တူရဲ့၊ ဇီဇဝါ က စောင်အပေါ်ပိုင်း ကို လက်နောက်ပြန်နဲ့ ဆွဲ ပြီး၊ သူ့ခေါင်းပေါ် ပြန်ခြုံ ထားလိုက်တယ်၊ အဟီး နေပေ့စေ၊ နောက်မှ အထက်ပိုင်းကို လာခဲ့မယ်၊ အင်္ဂလိပ် တွေ ဗမာပြည်ကို သိမ်းသလိုပေါ့၊ အောက်ပိုင်းက စရမယ် ဟဲဟဲ၊ ခြေသလုံးမွတ်မွတ် ကလေးကို ပွတ်လာပြီး ပဂျားမား အနားကိုပါ သူ့ဖင်လုံးလုံးလေး တခြမ်းပေါ်တဲ့ အထိ လှန်တင်လိုက်တယ်၊ အသားလေး က ချောမွတ်နေလိုက်တာ၊ ကျနော့် လက်ဖဝါး ပေါ်မှာ အထိအတွေ့က အရသာရှိလိုက်တာ၊ ကောင်မလေးရဲ့ ဒူး နောက်ဘက် .
ပေါင်ရင်း လေးလောက်က စပြီး နမ်းလိုက်တယ်၊ ဆပ်ပြာမွေး အနံ့ အပြင် အပျိုမလေး ရဲ့ အနံ့ လည်း ရနေပြီဗျ၊ သူ့ပေါင် အတွင်းသားလေး တွေကို လျှာနဲ့ ရက်လိုက်တော့ သူတုန် သွားတာ သိလိုက်တယ်၊ ကြက်သည်းဖုလေး တွေ လည်း ထလာတယ်၊ အပါး အရသာရှိလိုက်တာ၊ သူ က မှောက်ရက် သူ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်း ကို တစောင်းလေး အိပ်နေတာမို့ သူ့ ညာဘက် ပေါင်လေးကို .ဒူးကွေး ပြီး အပေါ်ကို နည်းနည်း တွန်းတင်လေးလိုက်တော့၊ အမွေးပြောင်နေ အောင်ရိပ်ထားတဲ့ သူ့ စောက်ဖုတ် ကလေးက ပေါင်ရင်း မှာ နူတ်ခမ်းထူထူ ကြီး လို ပြူးထွက်လာတယ်၊ အရည်လေး တွေ စို့လို့ပေါ့၊ အဖုတ်က အနံလေး ရနေတယ်၊ ဇီဇဝါ စိတ်လာလို့ စိမ့်ကျလာတဲ့ အရည်က နေမှာပေါ့၊ ကျနော့်မျက်နှာကို ရသလောက်ကပ်ပြီး သူ့ အဖုတ်လေး ကို ရက်လိုက်တယ်၊ စောင်အောက်က အိကနဲ အသံထွက်လာပြီး သူ့လက်တဘက်နဲ့ ကျနော့်ခေါင်းကို လှမ်းကိုင်လိုက်တယ်၊ ကျနော်က သူ့ပေါင် နှစ်လုံးကို တတ်နိူင်သလောက် ဖြဲပြီး လျှာကို သူ့ အဖုတ်လေး ထဲ ဝင်နိူင်သလောက် ထိုးပေးတယ်၊ ဇီဇဝါ ဖင်လေး ကော့ကော့လာတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့် အနေအထားက လုပ်ရတာ အားမရဘူး၊ ခေါင်းကို ခနကြွလိုက် ပြီး ဒူးထောက်ရက် ကနေ ကျနော့် လက်ချောင်း လေးတွေနဲ့ အပျိုမလေး အဖုတ်ကို ဆော့ကစားရင်း စောက်ခေါင်းထဲ ကျနော့် လက်ခလယ်ကို အသာလေး ထိုးသွင်း ဆော့လိုက်တယ်၊ ကျနော့် လက်ခလယ် ကို အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးတော့ သူ့ ဖင်ကလေး လည်း ကြွကြွပေးတာ ပိုမြန်လာတယ်၊ နောက်တော့ ဘာလို့လဲ မသိဘူး ကျနော့် လက်ကောက်ဝတ်ကို သူ့လက်ကလေး နဲ့ အတင်း ဆွဲညှစ်ထားတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ခနငြိမ် နေရင်းမှ သူ့ ဘယ်ဘက်ပေါင်လေးကို မရင်း သူ့ကို ပက်လက် အနေအထားဖြစ်အောင် ရွှေ့ပေးလိုက်တယ်၊ သူက အလိုက်သင့်လေး ပဲ ပက်လက် လှန်ပေးပါတယ်၊ စောင်က တော့ မျက်နှာပေါ်မှာ အုပ်နေတုန်းပေါ့ ခါးပေါ်က စပြီးတော့လေ၊ ကျနော်က သူ့ ခြေထောက်တွေကို ဒူးထောင်ပေါင်ကားလို မျိုးလုပ်ပေးပြီး ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ ကျနော့် မျက်နာ ကို အပ်လိုက်ပါတယ်၊ အပျိုမလေး ရဲ့ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီး ကို ကျနော် အားရ ပါးရ ရက်ပေးနေမိပါတယ်၊ အား၊ အရသာရှိလိုက်တာ၊ အောက်က ကျနော့် ညီတော်မောင်ကတော့ စားရတော့မယ် ကွ ဆိုပြီး တထိုးထိုးတထောင်ထောင်နဲ့ အိပ်ယာကို ထိုးထောက် နေပါတယ်၊ ကျနော့်လက်တွေက စောင်အောက် နဲ့ ပဂျားမား အောက်က နေတိုးဝင် သွားတော့ ဘရာ ဇီယာ မဝတ်ထားတဲ့ ဇီဇဝါရဲ့ နိူ့လေး နှစ်လုံးကို သွားအုပ်ကိုင်မိတယ်၊ နိူ့လုံးလေး တွေက ကျနော့်မိန်းမ မြနှင်းဆီ တို့ ကျနော့် မရီး မခရေ တို့လောက် မကြီး ပေမဲ့ အနေတော်လေး လိမ္မော်သီး ထွားထွားလောက်တော့ ရှိတယ်၊ ဗျ၊ အိတင်းနေတာပဲ၊ နို့သီးခေါင်းလေး တွေက ထောင်နေတာ ကျနော့် လက်ဖဝါးပေါ်မှာ လာထောက်နေတော့ လက်ဖဝါးတောင် ယားတားတား ဖြစ်မိသေးတယ်၊ အားမလိုအားမရ ဖြစ်မိပေမဲ့ အရမ်းမကြမ်းသေး ပဲ ဖွဖွလေး ဖျစ်ညှစ် ပေးနေတာ အပျိုမလေး ခါးကလေး ကော့တက်လာပါတယ်၊ ကျနော်က သူ့နို့သီးခေါင်း ကလေး တွေကို လက်မနဲ့ လက်ညိူးထိပ်ကလေး တွေနဲ့ ညှပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်လိုက်တော့ အပျိုမလေး ဇာတ်ကနဲ ကျနော့် ခေါင်းကို သူ့ ပေါင်နှစ်လုံးနဲ့ အတင်း ဖိညှပ် ပြီး ကိုယ်လုံးလေး တောင့်တင်း သွားပါတယ်၊ ကောင်မလေး တော့ တချီပြီးသွားပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ပါတယ်၊ ကျနော့် အလှည့်ပဲ ကျန်တော့တာပေါ့၊ ကျနော့်ခေါင်းကို ညှပ်ထားတဲံ ပေါင်နှစ်လုံး မာတင်းနေရာ ကနေ ပျော့ကျ သွားတော့ မှ သူ့ပေါင် နှစ်လုံးကြားမှာ ဒူးထောက်ထိုင်နေတဲ့ ကျနော်၊ သူ့ ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းတခုလုံးကို ခြုံထားတဲ့ စောင် ကို ဘေးဖယ်ချလိုက်ပါတယ်၊ ကျနော်က လက်တွေက တွန်းတင်ထားလို့ သူဝတ်ထားတဲ့ ညဝတ်အင်းကျီကတော့ နို့တွေရဲ့ အပေါ်မှာ ရောက်နေပြီမို့ ဝင်းဝါ စိုပြေလှတဲ့ မို့မို့ ရွှေရင် အစုံက တောင်ကုန်းလေး နှစခ်ု လို တင်းတင်း လေး မြင်နေရပါတယ်၊ မျက်လုံးအစုံကိုတော့ တင်းတင်း လေး ပိတ်ထားဆဲ ရှိတဲ့ အပျိုမလေး ရဲ့ ပြုံးယောင်ယောင် နူတ်ခမ်း အစုံကို ငုံ့ပြီး စုပ်နမ်းလိုက်ပါတယ်၊ ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ကို အိကနဲ ဖိဝင်လာတဲ့ နိူ့ နူစ်လုံး နဲ့ နိူ့သီး ချွန်ချွန် လေး တွေက ကျနော့် လီးကြီးကို အစွမ်းကုန် မာတင်းလာစေခဲ့ပါတယ်၊ ဇီဇဝါကလည်း သူ့ အနမ်းတွေနဲ့ ပြန်လည်း တုန့်ပြန်လာ လို့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် နူတ်ခမ်းခြင်း လျှာခြင်း ပွတ်သပ်စုပ်နမ်းနေကြမိပါတော့တယ်၊ အနမ်းတွေ ကြမ်းလာတာနဲ့ အမျှ အပျိုမလေး ရဲ့ ကိုယ်လုံး လေးကလည်း တွန့်တွန့် လူးလာလို့ အချိန်တန်ပြီ လို့ ကျနော် တွေးမိလိုက်ပါတယ်၊ ကျနော် က သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကြားကနေ သူ့ အပေါ်မှောက်ရက်သား ဆိုတော့ တကူးတက နေရာပြောင်းစရာ မလိုတော့ပါ၊ ဖင်ကို အသာလေး ကြွလို့ ကျနော့်ကောင်ကြီး ကို လက်နဲ့ ထိန်းရင်း သူ့ အဖုတ်ဝမှာ အသာတေ့ပေးလိုက်ပါတယ်၊ အပျိုမလေး ရဲ့ အဖုတ်ဝမှာ ဖျစ်ကနဲ့ ခေါင်းဝင်သွားတော့ ကျပ်လှလာမို့ ကျနော် ဖိမသွင်းရဲပါ၊ အပျိုမလေး ကလည်း ကျနော့် ပါးစပ်ထဲက လျှာကို အတင်း စုပ်နေပါတယ်၊ လက်တွေကလည်း လက်သည်းချွန်တွေနဲ့ ကျနော့် ကျောပြင်ကို ကုတ်ခြစ်လာတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တခါပြီးထားတဲ့ အရည်တွေလည်း ရှိတော့ ၊ချော့သွင်းရင်း သွင်းရင်းနဲ့ ကျနော့် လီးကြီး တဝက်လောက်ထိ ကတော့ အဝင်အထွက်လုပ် ပေးလို့ရနေပါပြီ အဲလောက်နဲ့တောင် သူရော .
..ဇီ.စိ. ဇီဇဝါက လက်အစိုကို သဘက်လေးနဲ့ သုတ်ရင်း ကျနော့်နား လျှောက်လာတယ် ပြီးတော့ ကျနော့် ပေါင်ပေါ် တက်ထိုင်လိုက်တယ်၊ သူ့ကိုယ်လုံးလေး က သွယ်သွယ်လေး မို့ ကျနော့် အတွက်က တော့ ဘယ်လိုမှ မနေပါဘူး၊ ကျနော့် ကောင်ကြီးကသာ အောက်က နေ .စိ..် .... ..ကျနော်ရော အရသာတွေ့ နေရတာမို့ ကျနော့်ခါးကို ထိန်းရင်းက ပဲ မသိမသာ နည်းနည်း နည်းနည်း ပိုပို သွင်းပေးရင်း ချော့လိုးလာခဲ့လိုက်ပါတယ်၊ သူ့ စောက်ခေါင်းသား နွေးအိအိ လေး တွေရဲ့ ဖိညှစမ်ှုကြောင့် ကျနော့်ကောင်ကြီးကလည်း ပိုပို ထွားလာသလိုပဲ လို့ထင်မိရပါတယ်၊ . .ရပါတယ်၊. ကောင်မလေး ဆတ်ကနဲ ဖြစ်သွားပေမဲ့ သိပ် အလူးအလဲ တော့ ခံလိုက်ရပုံ မရဘူးဗျ၊ အရမ်းလည်း ထန်နေချိန်မို့ထင်တယ်၊ ကျနော်က သူ့စောက်ခေါင်းထည်းမှာ ကျနော့် လီးတချောင်းလုံး မြုတ် စိမ်ထားပြီး ခနနေလို့ သူနည်းနည်း ပြန်လှုပ်ရှားလာမှ ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ဆွဲထုတ်ရင်း နည်းနည်း ချင်း ပြန်ပြန် ဆောင့်သွင်း ပေးကာ၊ လုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်၊ အဲဒီက မှ တဖြေးဖြေး အရှိန်ရလာတော့ ကျနော့် လီးကြီးကို သူ့ အဖုတ်လေး ထဲက ပြုတ်လုကာနီး အထိ ဆွဲထုတ် ပြီးမှ ဖတ်ကနဲ ဖတ်ကနဲ ပြန်ဆောင့်ဆောင့်ချတော့ တာပေါ့၊ သူလည်း အောက်မှ ပြန်ပြန်ကော့ကာ တွန့်တက်လာတော့ ကျနော်လည်း အရှိန်ကို မြှင့်တင် ပေးပြီး မကြာခင် အချိန်တွင်းမှာပဲ ကာမ အရသာ အထွတ်အထိပ်ကို နှစ်ယောက်စလုံးပြိုင်တူ ရောက် သွားကြလေတော့တာပေါ့၊ အား.ဖတ်...် ...ကောင်းလိုက်တာ ဇီဇဝါလေးရယ်.ဗျိ.ွ ......အဲဒါတွေ ထားလိုက်ပါအုန်း နောက်မှ လုပ်လို့ရပါတယ်၊ ကော်ဖီသောက်အုန်းလေ.အား....် ...အိ.ဘယ်လို နေသေးလည်းဟင် နာလား.် .....ဇီဇဝါ.အင်း .. ….နည်းနည်း တော့ နာတယ်....ွ .အွတ.... ကျနော်နဲ့ ဇီဇဝါတို့ တယောက်နဲ့ တယောက် ထွေးဖက်ပြီး ခန နားနေကြပြီး တော့ ဗိုက်ဆာ လာကြတာနဲ့ ထပြီး ရေချိုးခန်းသွား၊ ကိုယ့် ပစ္စည်း ကိုယ်ဆေး ပြီး မီးဖိုချောင် မှာ စားစရာ ရှာကြတော့တယ်၊ နည်းနည်း ဗိုက်ထဲ အဆာဝင်သွားတော့ ခယ်မ အပျိုလေး ကို ကြည့်ရင်း ပြန်ထန်လာပြန်တယ်၊ မီးဖိုထဲက မနက်စာ စားတဲ့ စားပွဲလေး က ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ရင်း ကော်ဖီ သောက်နေရင်းက ဘေစင်မှာ ခွက်တွေ ဆေးနေတဲ့ ဇီဇဝါကို လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်၊ ....ဟေ..... သူက လည်း တော်တော် အရည်ရွှမ်းတယ် ဗျ၊ အရည်တွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်လာတော့ ကျနော်လည်း လုပ်ရတာ ပိုချောမွေ့လာတာပေါ့၊ တကယ်တော့ ကျနော် ထိန်းလုပ်နေရတာ ခါးလည်း ညှောင်းလာပြီ၊ စိတ်ကလည်း အရမ်းထ နေပြီ၊ မဟုတ်လား၊ အဲတော့ ကောင်မလေး နူတ်ခမ်းကို ကျနော့် ပါးစပ်နဲ့ ပြန်ငုံခဲ ပြီး ကျနော့်လျှာကို သူ့ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ်၊ အဲဒီလျှာကို ကောင်မလေး က စိတထ်ပြီး ကိုက်လိုက်ရော ကျနော်လည်း အောက်က ကောင်ကို အဆုံးထိ ဆောင့်သွင်းချလိုက်မိပါတော့တယ်၊ ၊ .ရွတ....ဖွတ..ရွတ.
ကုန်းရုန်း ထနေတယ်၊ ကျနော်က အိမ်နေရင်း ဘတ်စကတ်ဘော ဘောင်းဘီ ပွပွ ပျော့ပျော့ တထည် သာ ဝတ်ထားလို့ ကျနော့် ကောင်ကြီး မာတင်းနေတာကို သူလည်း သတိထားမိမှာပေါ့၊ သူက ကျနော် သောက်နေတဲ့ ကော်ဖီ ခွက် ကိုပဲ ယူပြီး သောက်လိုက်တယ်၊ ကျနော်က သူ့ဆံပင်လေးကို နားနောက် ဖယ်ပြီး လည်တိုင်လေးကို နမ်းလိုက်တယ်၊ ကျနော့်လက်တွေကလည်း သူ့ခါးလေးကတဆင့် သူ့ ညဝတ်အင်းကျီလေး အောက်က လျှောတက် သွားပြီး နိူ့လုံးလုံးလေး တွေကို အုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ သူက ကော်ဖီခွက် ကို ပြန်ချလိုက်ပြီး ကျနော့် မျက်နှာကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ကာ နူတ်ခမ်းချင်း လာစုပ်နမ်းလိုက်တယ်၊ တဖြေးဖြေးချင်း ကျနော် တို့ အနမ်းတွေ ကြမ်းလာတယ်၊ သူ့ လျှာကလေး ကလည်း အငြိမ်မနေဘူး၊ ကျနော့် ပါးစပ်ထဲ အတင်း လာ ထိုးထည့်နေတယ်၊ ကျနော် ထိုင်ရာက ထ လိုက်တော့ သူလည်း အလိုက်သင့်ထ လာတယ်၊ သူ့ကို ကျနော် ပွေ့ချီပြီး အိမ်ရှေ့ခန်းကို ခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်၊ ဆိုဖါပေါ်မှာ သူ့ကို ပက်လက်တင်လိုက်ပြီး ကျနော့် ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်၊ ကျနော့် ကောင်ကြီးက မာတင်း ပြီး ဖြောင့်တန်းနေတာပေါ့၊ သူက ဆိုဖါပေါ်မှာ တတောင်လေး တဘက်ထောက်ပြီး စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေ တုန်းကျနော်က သူ့ အနားကပ်သွားတော့၊ ကျနော့်ကောင်ကြီးက သူ့မျက်နှာရှေ့မှာ တရမ်းရမ်း နဲ့ပေါ့၊ သူကလည်း ကျနော် ဘာလိုချင်မှန်း သိပါတယ်၊ သူက ဆိုဖါပေါ်မှာ ထထိုင်ရင်း သူ့မျက်နှာနား ကပ်လာတဲ့ ကျနော့်ကောင်ကြီးကို သူ့ရဲ့ လက်ချောင်းကလေး တွေနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ရင်း ဒစ်ကြီးကို သူ့ နုတ်ခမ်း လွှာလှလှလေး နူစ်ခု ဖွင့်ပြီး ငုံစုပ်လိုက်တယ်၊ ကျနော်က သူ့ ခေါင်းကလေးကို ထိန်းကိုင်ရင်း ကျနော့် လိင်ချောင်းကြီးနဲ့ သူ့ ပါးစပ်ထဲ ကို ဖြေးဖြေးချင်း အဝင်အထွက်လုပ်ပေးလိုက်တယ်၊ သူ့ ကြည့်ရတာ သိပ် အတွေ့ အကြုံ မရှိသလို ပဲ ကျနော် တောင် အံ့သြ နေတယ်၊ ဒီမှာမွေး ဒီမှာ ကြီး ပြီး တက္ကသိုလ်ရောက်နေတဲံ မိန်းခလေး တွေ ဒီလို အတွေ့ အကြုံ မရှိဘူး ဆိုတာ ရှားမှာပဲ လို့ ၊ ဒါပေမဲ့ တဘက်က တွေးလိုက်ရင် သူတို့ အမေ ဒေါ်ကန့်ကော်က တော်တော် စည်းကမ်းကြီးတာ၊ နောက် ဒီ စတန်းဖို့ဒ် လို တက္ကသိုလ် ကို ရောက်ဖို့ ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံ နဲ့ ဝင်ခွင့်ရဖို့ မလွယ်ဘူး၊ စာနဲ့ မျက်နှာနဲ့ မပြတ် တဲ့ အပြင်၊ တခြား အားကစားတို့၊ ဗေါ်လန်တီရာတို့ အသင်းအဖွဲ့တွေရော ဘက်ပေါင်းစုံ လုပ်ရတာ ဆိုတော့၊ သူ့ခမျာ ဒါတွေလုပ်ခဲ့ ဖို့ အချိန် မရ တာ ဖြစ်နိူင်တယ်၊ သူက ကြိုးစား ပန်းစား ကျနော့် ကောင်ကြီးကို စုပ်ပေးရှာ ပေမဲ့ ကျနော်က အားမရ တော့ဘူး ၊ သူ့ရဲ့ အပျို မလေး စောက်ဖုတ် ကိုပဲ လုပ်ရတာ မဝသေးတာကြောင့် ၊ သူ့ခေါင်းလေးကို ကိုင်ထားရင်း ကျနော့်ကောင်ကြီး ကို ဆွဲထုတ်လိုကတ်ယ်၊ နောက် သူ့ကို ဆိုဖာ လက်ရမ်းပေါ်မှာ ခေါင်းတင်လှဲ စေပြီး သူ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြား ထဲ ဝင်လိုက်တယ်၊ အရည်ရွှမ်းနေ တဲ့ သူ့ အဖုတ် ဝလေး မှာ ကျနော့် ဒစ်ကြီးကို တေ့ပြီး ဖြေးဖြေး ချင်း စသွင်းလိုက်တယ်၊ ကျနော့် လက်နှစ်ဘက်က လည်း သူ့ပေါင်လုံးတဘက်တချက်ကို ဆွဲမတွန်းလိုက်တော့ သူ့ အဖုတ်က ပိုဟလာပြီး ကျနော့် အတွက် ဆောင့်လိုးလို့ ပိုကောင်းလာတယ်၊ သူ့လက်တွေက ကျနော့် လည်ဂုတ် ကို တွဲခိုလာခဲ့တယ်၊ သူ့ ပါးစပ်ကလည်း ကောင်းလို့လား နာလို့လား မသိ အီးအီးအားအား သံလေး တွေနဲ့ ကျနော် ဆောင့်လိုးလို့ တဖတ်ဖတ် မြည်တဲ့ အသံနောက်က ပဲ့တင်သံလေး လို လိုက်လာတယ်။ နောက်တော့ သူ့ခါးလေး က အတင်းကော့ကော့တက်လာတယ်၊ ကျနော်က လုပ်နေရင်းက ပုံစံပြောင်းချင်လာတာနဲ့ ခန နားလိုက်တယ်၊ သူက သူအရှိန်တက်လာမှ ကျနော်ရပ်လိုက်လို့ ကျနော့် ကို မေးခွန်းထုတ်တဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်တယ်၊ ကျနော်က သူ့ခါးလေး ကနေ ဆွဲမ ပြီး မတ်တတ်ရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်၊ ကျနော့်ကောင်ကြီးကလည်း သူ့ အဖုတ်လေး ထဲက ဖလွတ်ကနဲ ပြုတ်ထွက်လာတယ်၊ ပြီးမှ သူ့ကို ဆိုဖာလက်ရမ်းပေါ်မှာ တတောင်ထောက် ပြီး ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ် ပထမတော့ ခါးကုန်းကုန်းကြီး ဖြစ်နေတယ်၊ ကျနော်က သူ့ခါးလေး ကို အသာဖိချလိုက်မှ ဖင်ကော့တက်လာတယ်၊ သူ့ ပေါင်လုံး နှစ်ခု ကြားက ပြူထွက်လာတဲ့ အဖုတ်ဝ မှာ ကျနော့် ဒစ်ကြီးကို ပြန်တေ့ပြီး အသာမြောထိုးလိုက်တယ်၊ ပြီး တော့မှ ဖြေးဖြေးချင်း အရှိန်ယူတဲ့ အနေနဲ့ အဝင်အထွက်လုပ်တယ်၊ အသားကျသွားမှ သူ့ခါးလေး ကို ကိုင်ပြီး တဖန်းဖန်း မြည်အောင် တအားကုန် ဆောင့်မိတော့တယ်၊ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး သူလည်း တအားအား တအီးအီးနဲ့ အော်မြည်ပြီး ကျနော်လည်း လီးထိတ် မှာ ပူကနဲ နဲ့ သုတ်ရည်တွေ သူ့စောက်ဖုတ် ဟိုး အတွင်းထဲ မှာ တဖျစ်ဖျစ် ပန်းထည့်နေမိပါတော့တယ်။ ဒီတချီ အပြီးမှာတော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး နည်းနည်း ကျေနပ်သွားကြလို့ ဆိုဖါပေါ်မှာ တယောက်နဲ့ တယောက် ပွေ့ဖက်ထားရင်းနဲ့ တီဗီကြည့်နေဖြစ်ကြပါတယ်၊ အဲဒီမှာ ကျနော် လည်း သိချင်တာမေး သူလည်း ပြောပြတော့ မှ သူ့ အကြောင်း ကျနော် တော်တော်လေး သိလာရပါတယ်၊ တကယ်တော့ သူ့ မှာ ရီးစား ရှိနေပါပြီ၊ သူ က နဂိုလ် အတွေ့ အကြုံ ရှိသလို ဟန်ဆောင်ထားတယ် လို့ ပြောပါတယ်၊ သူတို့ အယူ အဆက ဒီအရွယ်ရောက် နေလို့ ဒါတွေ မလုပ်ဖူးဘူး ဗာဂျင် ဆိုရင် ကိုယ့်ကို လူဇာ လို့ သူများ ထင်သွား .
အဆင်ပြေရဲ့လား..အော်ဟုတ်လား.မှာလည်း စိုးတယ်၊ ( ဗမာပြည်က မိန်းခလေး တွေနဲ့များ ကွာပါ့၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အတွေ့ အကြုံ မရှိဘူးပြောမှ လူ အထင်ကြီးမယ် ထင်နေကြတယ်၊ ) အဲဒါကြောင့် သူ့ ဘဲ နဲ့နှစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မတွေ့ ခင် အတွေ့ အကြုံ လိုချင်နေတာလေ၊ နောက်တခုကလည်း ကျနော့်ကို တိတ်တခ်ိုး ကြိုက်နေတာလည်း ပါတယ်၊ ချစ်တာ မဟုတ်ဘူးနော် ရောထွေး မသွားနဲ့၊ အဟီး၊ သူ့ အမ နဲ့ ကျနော် နဲ့ လုပ်နေကြတာ လည်း သူ အ ကြိမ်ကြိမ် ချောင်းဘူးတယ် ဆိုပဲ၊ အဲဒါကြောင့် ကျနော့် ဒုတ်ကို လည်း သူ မြင် ထားတာ ကြာလှပြီ တဲ့၊ သူ့ အမ နေရာ အစား သူ ဖြစ်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ခနခန စိတ်ကူးယဉ် ခဲ့ဘူးတယ်တဲ့၊ အခု တော့ တကယ်ကောင်းမှန်း သိသွားပြီတဲ့၊ အဟီး ၊ ယောက်ကျားလေး တယောက် ကို သူတို့ ကြိုက်အောင် ဘယ်လို ပြုစု ရမလည်း ဆိုတာလည်း သူ့ ကို သင်ပေးစေချင်တယ်တဲ့၊ ကျနော်က အဲဒါတော့ စိတ်ချလို့ နင် ကျောင်းပြန် မသွားခင် အတွင်း ဒီတေး အကုန်သင်ပေးမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်၊ ဟဲဟဲ၊ အဲတော့ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ဗျာ၊ ဒီရက် ပိုင်း အတွင်း ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ၊ ဟဲဟဲ။ နောက်တော့ ကျနော့်မိန်းမ မြနှင်းဆီလည်း ပြန်ရောက်၊ ဇီဇဝါလည်း ကျောင်းပြန်သွား၊ ကျနော်လည်း ရာထူးတိုး၊ ဆိုတော့ ကျနော့် ဘဝ က ကျေနပ်စရာ တွေပဲ ဖြစ်နေရတာပေါ့၊ တခါတလေ မခရေ နဲ့ ဂျီတော့က ချပ် တယ်၊ ကျနော် တို့ နှစ်ယောက် လုပ်ခဲ့ကြတာ တွေ စားမြုံ့ပြန်ကြတယ်၊ နောက် ပိတောက်ဝါနဲ့ ချပ်တယ်၊ ကျနော်တို့ ရဲ့ ဆက်ချပ် က ပိုပြီး ကြမ်း၊ ပိုပြီး ပွင့်လင်းလာကြတယ်၊ နောက် ဇီဇဝါကျတော့လည်း တလတခါလောက် စနေတနင်္ဂနွေ အိမ်လာအိပ်တဲ့ အချိန် လစ်ရင် လစ်သလို စားဖြစ်ကြတယ်။ တနေ့ ကျနော့်ရာထူး အသစ် ကြောင့် စီမံခန့်ခွဲ မှု သင်တန်းတခု တက်ဖို့လိုလို့ တပတ် လော့အိန်ဂျလိစ် မြို့က ရုံးခွဲ မှာ သွားဖို့ အကြောင်းပေါ်လာတယ်၊ အိမ်မှာ မြနှင်းဆီ မအားတဲ့ အချိန် ခလေးကြို ၊ခလေးကြည့်ဖို့ ကိစ္စ တွေ စီစဉ်ပြီး တော့ ခရီးထွက်ခဲ့ရပါတယ်၊ ရုံးက စီစဉ်ပေးလိုက်တဲ့ ဟော်တယ် မှာပဲ တည်းပြီး၊ အဲဒီ မြို့က ဒေါင်းတောင်း ( မြို့လယ်ကောင် ) မှာရှိတဲ့ ရုံးမှာ သင်တန်း သွားတက်ရပါတယ်၊ ကျနော့် လို စူပါဗိုက်စာ ဖြစ်ကာစ လူတွေ ၁၀ ယောက် လောက်ပဲ ရှတိဲ့ သင်တန်းလေး ပါ၊ မနက် စောစောစီးစီး စ ပြီး နေ့လည်စာကို အဲဒီရုံး ထဲက ကဖတေးရီးယား မှာပဲ ဝယ်စားလိုက်ပြီး သင်တန်းဆက်ထိုင် ပါတယ်၊ ညနေ ၃နာရီခွဲ လေးနာရီလောက် ဆိုသင်တန်းပြီး တော့ ဟော်တယ် ပြန်ပါတယ်၊ ပထမနေ့ကတော့ ခရီးလည်း ပန်း လာတာနဲ့ ဟော်တယ်ရောက်တာနဲ့ ရေမိုးချိုး၊ ညနေစာ အခန်းထဲ မှာပဲ မှာစားလိုက်ပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အိပ်ယာပေါ်မှာ အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ၊ တရေးနိုးမှ တီဗီကို ထပိတ် လိုက်ရပါတယ်။ ဒုတိယနေ့ကျတော့၊ ညနေ ဟော်တယ် ပြန်ရောက် လို့ ရေမိုးချိုးပြီးတော့ လေးနာရီခွဲလောက် ဖြစ်နေပြီ၊ မြနှင်းဆီ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဖရိုးဆန်းပလာတာ တွေ၊ သူ့ညီမ စပယ့် ကို သွားပေးရအုန်းမယ် ဆိုတာ သတိရ လို့ စပယ့် ဆဲဖုန်းကို လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်၊ စပယ်က သူငါးနာရီခွဲလောက် မှ အိမ် ပြန်ရောက်မယ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ညနေစာ ကို မစားထားနဲ့ သူလိုက်ကျွေးမယ် လို့ပြောပါတယ်၊ ကျနော်လည်း မနေ့ကလို တယောက်ထဲ စား တီဗီကြည့် အိပ်ရမှာ ပျင်းနေတာနဲ့၊ အိုကေ လေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်၊ နောက် သူတက်စ်မက်ဆေ့ နဲ့ ပို့လိုက်တဲ့ သူတို့ အိမ်လိပ်စာကို ကျနော်ငှားထားတဲ့ ဖို့ခရုဇာ ကားလေး ထဲ က နဗီဂေတာ၊ ထဲ ထည့်ပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့အိမ် နားကို နီးလာတဲ့ အချိန်မှာ စတိုးဆိုင် တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေက တရုပ်လို၊ ကိုရီးယား လိုတွေ ဆိုင်းဘုတ် တွေ အများကြီး တွေ့လာရတော့ အာရှ တွေ နေတဲ့ အပိုင်းဖြစ်ရမယ် လို့တွေးမိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူ့အိမ်က တောင်ကုန်း အမြင့်ပိုင်းကို တော်တော်လေး တက်ရတယ်၊ လမ်းကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်လေး တွေနဲ့၊ သူတို့ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ သူတို့ ကားဂိုဒေါင်တံခါးရှေ့က ဒရိုက်ဝေး မှာပဲ ကားကို ရပ်လိုက်ပြီး ဘေး လူသွားလမ်းကလေးကပတ်ပြီးအိမ်ရှေ့က ခေါင်းလောင်း ခလုပ်ကို သွားနှိပ်လိုက်ရတယ်။ .ကို လာတာများ စောနေလား..ကိုအောင်ကြည်ရော.ပြန်ရောက်ပလား.စပယ်လည်း အခုနကပဲ ပြန်ရောက်တယ်..... .ဟော ကိုကြီး လာလာ..... ...
.ဟင် .အော် အဲဒါ ငါ မသိလိုက်ဘူး.ို့ စပယ်လည်း တခါမှ မစားဘူးသေးဘူး. . ..ကိုအောင်ကြည်၊ ဗမာပြည် ခနပြန်သွားတယ်လေ.ကဲ ဗိုက်ဆာ နေရင် သွားစားမယ်လေ၊ အခု ဗမာ ထမင်းဆိုင် တခု အသစ်ဖွင့်ထားတာ ရှိလ... တကယ်တော့ ပလာတာ ဆိုတာ ဂျုံ ကို နယ်ပြီး လိမ့်ထားပေးတာ၊ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားပြီး ကိုယ်စားချင် တဲ့ အချိန် ကြော်စားရတာ၊ တရုပ်ဆိုင်တွေ၊ ကုလားဆိုင်တွေ မှာ ဖရိုးဆန်း ( ရေခဲရိုက်ထားတာ ) ရနိူင်ပေမဲ့ လည်း ကျနော်တို့ မြို့နားမှာက လတ်လတ် ဆပ်ဆပ် လုပ်ထားတာ ရှိပြီး ပိုလည်း စားကောင်းတာ မို့ နာမည်ကြီးတယ်၊ သူတို့ က ကြုံရင် မှာလေ့ရှိတာကြောင့် မြနှင်းဆီက သူ့ညီမ ဆီကို ထည့်ပေးလိုက်တာ၊ . စပယ်က သူတို့ မောင်နှမ တွေထဲ မှာ နံပါတ်လေး လေ၊ မြနှင်းဆီနဲ့ ဇီဇဝါ နဲ့ ကြားက၊ သူတို့ မောင်နှမ တွေက အကြမ်းဖျဉ်း ၂ နှစ်ကြီး ၊၂ နှစ်ငယ် မို့ အခု ဆို ၂၃ လောက်ပဲ ရှိအုန်းမယ်၊ ကျောင်းမပြီးခင်ထဲက၊ သူ့ရီးစား အောင်ကြည် လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ အင်တန်းရှစ် နဲ့ လုပ်နေပြီး ကျောင်းပြီးတာနဲ့ တခါထဲ အလုပ်ရ ၊ ယောက်ကျားလည်း ရ ပေါ့၊ အခုတော့ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ မာစတာ ကို အချိန်ပိုင်းတက် ပြီး ဘွဲ့နောက်တခု ရအောင် ဆက်လုပ်နေတယ် ပြောတယ်၊ အိမ်ထောင်သည်ပေမဲ့ ကလေး မမွေးရသေးတော့ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည် က အပျို နဲ့ အတူတူ ပဲ ၊ အပျိုမလေး ဇီဇဝါထက်တော့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် က ပိုပြည့်တယ်၊ ကျနော့် မိန်းမ မြနှင်းဆီလောက်တော့ ကစ်ကစ်လေး မဟုတ်ပေမဲ့၊ ခါးသေးသေး အောက်က တင်လုံးကျစ်ကျစ် လေးနဲ့၊ သူတို့ ညီအမ တွေ ဘော်ဒီအချိုးအစားက အတူတူ ပဲ ဆိုတော့၊ ဖင်ကောင်းတယ် ပဲ ပြောကြပါစို့၊ အိမ်နေရင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တီရှပ် နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ပဲ ဝတ်ထားတာ ဆိုတော့ အပေါ်ပိုင်းက ရွှေရင် အစုံကလည်း အနေတော် ဆိုက်ကလေး မှန်း မြင်နေရတယ်၊ စပယ်က အရင် အပျိုဘဝ ကျောင်းတက်နေတုန်းက ဇီဇဝါ့ လိုပဲ ကျနော်တို့ အိမ်ကို လာနေလေ့ရှိတယ်၊ အဲဒီ အချိန်မှာထဲက သူက အောင်ကြည် နှင့် တွဲ နေပြီ၊ ကျနော် နှင့် မြနှင်းဆီ မှာ လည်း ခလေး မရသေး ချိန်၊ ကျနော်က အောင်ကြည် ကြီး ကို ကြည့်ရတာ အရမ်းတော ဆန် ပြီး ခတ်တုန်းတုန်း မို့ စပယ့်ကို အမြဲ စလေ့ရှိတယ်၊ ၊ စပယ်ကလည်း သူတို့ ညီအမ တွေထဲ မှာ ဗမာ အဆန်ဆုံးလို့ ပြောရမလား မသိ၊ ဆံပင် လည်း အရှည်ကြီး ခါးလောက်ရှိတဲ့ ဆံပင်နှင့် ဒီနိူင်ငံမှာ ရှားရှားပါးပါး ပင်၊ ဒါကြောင့်ပင် တောသား လိုပုံ အောင်ကြည် က အရမ်းကြိုက် ပြီး စပယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း လက်ခံခဲ့တာ ဖြစ်မှာ၊ လူက ပုံစံအားဖြင့်သာ ရိုးရိုး လေးပုံရှိ သော်လည်း စပယ်က အာသွက် လျှာသွက်ကလေး ဖြစ်သည်။ ကျနော် က နောက်သလို ပြောင်သလို ကြည်စယ် တာကို သူက ရှက်မနေ ပြန်လည် တုန့်ပြန်တတ်သူ လေး ဖြစ်သည်၊ အဲဒီတုန်းက တော့ ကျနော် ကလည်း မြနှင်းဆီ နှင့်ရကာ စ ဆိုတော့ သူ့ အပေါ် မှာ ကိုယ့်ညီမလေး လိုသာ မို့ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မထားသော် လည်း ပါးစပ်က တော့ ဟိုလို ဒီလို စလေ့ရှိသည်၊ သူ ကိုယ်တိုင် ကလည်း မခေ ၊ ပြန်ပက်တတ် သည်မို့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်မှာ ဖလပ်သည့် အဆင့် ကို လေးလေး နက်နက် မဟုတ်ပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောဆိုတတ်လေ့ရှိသည်၊ ဥပမာ ဆိုရသော်၊ နင့် ဒီကိုအောင်ကြည် ကြီး ကြိုက်မဲ့ အစားကွာ ငါ့လိုမျိုး လူ ရှာပါကွာ၊ ဟု ပြောလိုက်လျှင်၊ . ....ရပါတယ် ဟာ ကိစ္စ မရှိပါဘူး...အော် အတော် ပဲ အဲဒီက ပလာတာ မစားရတာတောင် အတော်ကြာသွားပြီ၊ အဟီး ကျေးဇူးပဲ တကူးတက ယူလာပေးတာ.....အိုကေလေ သွားကြတာပေါ့.ဒီမှာ စပယ်တို့ အတွက် တဲ့ မြထည့်ပေးလိုက်တာ ပလာတာတွေ... .....သူ့အမေ နေမကောင်းလို့ တဲ့..အော်..
ု့ ...ဟေ့ စပယ် နင့်မှာ အိတ်စ်စတာနယ် ဟိုက်ဒရိုက်ရှိလား၊ ငါမကလိခင် ဖိင်ုတွေ ဘက်ကပ်လုပ်ထားလိုက်မလိ.အကိုကြီး ကော်ဖီသောက် မလား၊ ဝိုင် သောက်မလား … . ..ု့ . .ကော်ဖီက နည်းနည်း စောသေးတယ်ဟာ ဝိုင်ယူလာပေး ဘာရှိလ..အဟီး..ို့ ... စပယ်ထွက်သွားတာနဲ့ ကျနော်လည်း ကွန်ပြူတာကို အွန်လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဆေ့မုတ် နဲ့ ဖွင့်လို့ရနေသေးတာနဲ့ ဝင်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူ့ မှာ ရီစတိုး ပြန်လုပ်လို့လဲ မရ ဘူး ထူးဆန်းနေတယ်၊ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖွင့်တော့လည်း ပွင့်ပြီးတာနဲ့ ကွန်ပြူတာက ကပ်နေတယ် မလှုပ်တော့ဘူး ပြန်ရီဘုလုပ်တော့ ဆေ့မုတ်ပဲ ပြန်ဝင်လို့ရတယ်၊ ဝိုင်ခွက်ကိုင်ပြီး ပြန်ရောက်လာတဲ့ စပယ်ကို တွေ့တော့ ..အင်း လေ ဒီက အပြန် ခန ဝင်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ် လား မှ မသိတာ.ဘာမှန်း မသိပါဘူး အကြို ကီးရာ၊ အခု ကိုအောင် နဲ့ စကိုက် လုပ်လို့ မရ ဘူး ဖြစ်နေလိ. အဲ လိုနဲ့ စပယ့်အိမ် ကို ကျနော်တို့ ပြန်ရောက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်၊ ရောက်တာနဲ့ သူ့ ကွန်ပြူတာ ထားတဲ့ အခန်းကို ပြတယ်၊ သူတို့ က ဒီအိမ်ကြီးမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲ နေကြတာ ဆိုတော့ အခန်းတခန်းကို ရုံးခန်းလိုမျိုး လုပ်ထားတာ၊ အဲ ဒီအခန်းက ရုံးတရုံးက အရာရှိ တယောက် အခန်းလိုပဲ စားပွဲ အကြီးနဲ့ သားရည်ဖုံး ကုလားထိုင် နဲ့၊အကျယ်ကြီး ပဲ။ .......အော်ရှိတယ် အဲ ဒီမှာ အပေါ်အံဆွဲ ထဲ မှာ အသစ်ပဲ ရှိသေးတယ်၊ ကြာမှာလား စပယ် ရေသွားချိုးချင်လ.ဲ . ...... ….မာလိုး ပဲ ယူလာပေးပါကွာ၊ ရက်ဝိုင်တွေက ဟတ် အတွက် ကောင်းတယ် ပြောတာပဲ. .အစုံရှိတယ်လေ၊ ကာဗာနေး၊ ရှာဒိုနေး၊ မာလိုး ဘာလိုလည်းပြော..ဟယ် အတော်ပဲ အကိုကြီး ရောက်တုန်း၊ စပယ့် အိမ်က ဒက်စတော့ ကွန်ပြုတာ ဟန်း ဖြစ် နေပြီး ဝင်းဒိုးက ဘု မလုပ်တော့ဘူး၊ အဲဒါလေး တချက်ကြည့်ပေးသွားပါအုန်း.. ..ကြိုက်ချင်တာပေါ့၊ ကိုကြီး လိုလူမျိုးတွေကလည်း မိန်းမ တွေနဲ့ ချည်းပဲ မို့လို့ပေါ့၊ အဲလိုမျိုး၊ တွေပေါ့၊ အခုတော့ လည်း သူလည်း အောင်ကြည်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျ၊ အလုပ်တွေ နဲ့ ဘီးဇီး၊ ကျနော်တို့ လည်း ခလေးတယောက်၊ အလုပ်တွေနဲ့ ဘီးဇီး ၊ တယောက်နဲ့ တယောက်လည်း မိုင် ၃၀၀ ကျော် လေးရာနီးပါး ဝေး တော့၊ သိပ်မတွေ့ ဖြစ်တော့၊ မိသားစု တွေ ပွဲတွေ ဘာတွေလုပ်မှ ဆုံဖြစ်ကြတော့ သည်။ အခု သူခေါ်သွားတဲ့ ဗမာဆိုင် အသစ်မှာပဲ ၊ ဘီယာတယောက်တလုံးစီ သောက်ရင်း ၊ မစားရတာကြာတဲ့ ဗမာစာတွေ စားရင်း၊ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် တွေ၊ အလုပ်ကိစ္စ တွေ တိုလီမှုတ်စ ပြော ဖြစ်ကြသည်၊ ထိုသို့ ပြောဆိုနေရင်းမှ စပယ်က တခုခု သတိရ သွားပုံနှင့်၊ . ..အေးကြာမယ် စပယ် အေးအေးဆေးဆေးသာလုပ်၊ ကြည့်ရတာ အခန့် မသင့်ရင် မိုးလင်း သွားမဲ့ သဘောမှာရှိတယ်.
....ရတယ်လေ ခစ်ခစ် အိပ်ချင်ရင် ဒီမှာ အခန်းပိုတွေ ရှိပါတယ်၊ အေးဆေးသာလုပ်၊ ကိုအောင်ကြည်မရှိပဲ လာအိပ်သွားတယ် ဆိုတာသာ မြနှင်းဆီ မသိစေနဲ့ တော်ကြာ စပယ့်ကို လာ ဂျယ်ဝင်နေအုန်းမယ်...ဒီထက်ပိုသေခြာကြည့်ချင်သေးလို့လား.အာ စပယ်က တော့ လုပ်ပြီ.အင်.....ဟောတော့. .. .... .. . ..... ..အင်း ခစ်ခစ် ကိုအောင်ကြည် ကတော့ ပြောလို့ မရဘူး သူက တကယ်သံသယ သိပ်များတာ ခစ်ခစ်.ကဲ လုပ်မှာသာလုပ်ပါ၊ ရေသွားချိုးလိုက်အုန်းမယ်....ယူနိူးဝပ် အိုင်မန့် ခစ်ခစ်... ..ဟာ...ဆောရီး စပယ် ကိုယ်က စပယ်အပေါ်ထပ်မှာ သုံးနေမှာပဲ ဆိုပြီး တံခါးပိတ်ဖို့မေ့သွားတာ.. .ဘာကို သေခြာ မကြည့်လကိုရတာလည်း.အမလေး မြက ဘယ်တော့ မှ မဝင်ပါဘူးကွာ၊ နင့် အောင်ကြည်ကသာ ကြားသွားလို့ ငါ့ကိုရှော့ဂန်း နဲ့ လာပစ်နေအုန်းမယ်၊ အဟီး၊ ..ရတယ် စပယ်တို့ အခန်းထဲ မှာ ခေါင်းလျှော်ရည်ကုန်နေလို့ ဒီမှာများကျန် မလား လာကြည့်တာ၊ တောင်းပန်ပါတယ်၊ သေခြာတောင် မကြည့်လိုက်ရဘူး၊ အဟိ. ..... စပယ်ထွက်သွားတော့ ကျနော်လည်း ဟိုက်ဒရိုက်တတ်ပြီး ဒေါ့ကုမန့်တွေ ဓါတ်ပုံဖိုင်တွေ အကုန်တွေ့သမျှ ဆွဲထည့်နေ ပါတော့တယ်၊ ဒီကြားထဲ စပ်စု ချင်တော့ ဘာတွေလည်း ရှောက်ကြည့်လိုက်တာ ဖွက်ထားတဲ့ နှာစာပေ တွေ ဓါတ်ပုံတွေ ၊ အော ဗီဒီယိုတွေ တွေ့ရရောဗျား ၊ အဟီး ၊ နောက် အင်တာနက် ဖေးဘရိတ် တွေလည်း ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော် သွားနေကြ ပွန်ဆိုက် တချို့နဲ့ တချို့ ဟာတွေ ကျနော်တောင် မသိဘူး စုံနေတာပဲ၊ အဲ ဒါနဲ့ ဖိုင်တွေဒေါင်းနေတုန်း စော်နဲ့ ဘဲ ဗြင်းနေကြတဲ့ ပုံတွေကို လျှောက်ကြည့်နေလိုက်တာ လီးတောင် လာတယ်၊ သေးလည်း ပေါက်ချင်လာတယ်၊ အဲဒါနဲ့ မီးဖိုဘက်ခန်းလျှောက်သွားပြီး တွေ့တဲ့ အိမ်သာရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပြီးသေးကို အားရပါးရ ပန်းလိုက်တယ်၊ သောက်ထားတဲ့ ဘီယာ တွေ တလုံးလုံး ပြန်ထွက်သွားသလားထင်ရတယ်၊ အဆုံးသတ်လေး တချက်နှစ်ချက်ညှစ်ပြီး ကျန်တဲ့ သေးစက်တွေ ခါနေတုန်း ဗြုန်း ဆို တံခါးပွင့်သွားပြီး စပယ် တယောက် မွှေးပွ သဘက်ပတ်ရက် ဝင်လာတယ်၊ ..ခစ်ခစ်. အရေးထဲ ကျမှ ကိုယ့်ကောင်ကြီးကလည်း မာတင်းနေလိုက်တာ ဘောင်းဘီထဲ မနည်း ပြန်ထည့်ရတယ်၊ ...ဆောရီးဆောရီး....အိုင်ဒုန့်နိူး.
.မသိသေးဘူး အခု မှ ဖိုင်တွေ ဘက်ကပ်လုပ်နေတုန်း ပြီးမှ စမ်းရမှာပဲ..... .....ပြင်လို့ ကောင်းသွားရင် လက်ခ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ ခစ်ခစ်.. ပြောပြော ဆိုဆိုနဲ့ ကျနော့် ဆီက ဝိုင်ခွက်ယူပြီး မီးဖိုခန်းဖက်ထွက်သွားတဲ့ စပယ့် ညဝတ်အင်းကျီ အောက်က တလုံးချင်း ခုန်ပြီး လှုပ်ခါ သွားတဲ့ တင်လုံး နှစ်လုံးကို ကြည့်ပြီး တံတွေးတောင် သည်းမလို ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီည တော့ ဒီခယ်မ ကို ရအောင် ကြံတော့မယ် လို့လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်၊နိူ့မို့ ဆိုရင်တော့ ဟော်တယ် မှာ ငါးဦးကော်မတီ နဲ့ တိုင်ပင်ရတဲ့ အခြေအနေ ရောက်တော့မှာပဲလေ။ ကျနော် ကွန်ပြူတာ အခန်းထဲ ပြန်သွားတော့ ဖိုင်တွေ ဒေါင်းလုပ်ပြီးတာ တွေ့ရတာနဲ့ ဝင်းဒိုး စီဒီကို ဒရိုက်ထဲ ထည့် ပြန်ဘုလုပ် ပြီး စီဒီရုမ်ကနေ ဘုလုပ်ခိုင်းပြီး ရီပဲယားလုပ်ကြည့်လိုက်တော့ အဆင်ပြေပြေပဲ ဖြစ် သွားပါ တယ်၊ ဝိုင်ခွက်ယူလာပြီး ကျနော် လုပ်တာ ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ စပယ် တယောက် ဝမ်းသာ သွားပါတယ်၊ နောက် တော့ သူ့ကို ဖြားယောင်းမယ် ဆိုတဲ့ အကြံနဲ့ စ ပြီး လုံးပါတယ်၊ သူ့ ဖေးဘရိတ် မှာ တွေ့ရတဲ့ ဆိုက်တွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ ဖရီးဆိုက်တွေ ရှိကြောင်း၊ တချို့ဆိုက်တွေ ရဲ့ ပတ်စ်ဝပ်ကို ခရက်လုပ်ပေးတဲ့ ဆိုက်တွေ ရှိကြောင်း က စပြီး အနီးကပ် ပို့ချပေးပါတော့တယ်၊ စပယ်က လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ကျနော့် ဘေးမှာ စားပွဲပေါ် တံထောင်ထောက်လို့ ကျနော်နဲ့ ပုခုံးခြင်း ထိလို့ ခေါင်းခြင်းရိုက် မတတ် ကပ်ပြီး မော်နီတာ ကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ပါတယ်၊ သူ့ ပုခုံးသား .အော် ဝိုင် ကုန်သွားပလား လာ စပယ်ထပ်ထည့်ပေးမယ်၊.အာ.စဉ်းစား အုန်းမယ်...... .ဒီဆားဗစ်က . .....ခစ်ခစ်.အိုင်ဒုန့်သင့်စိုး..ဲ ...စပယ့် မှာ ကိုယ်တုန်းလုံးချွတ်ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံမျိုးရှိလား၊ တပုံလောက်ဆိုရင်တော့ ရမယ်ထင်တာပဲ. .. .... ..မပြောတတ်သေးဘူး၊.မရှိသေးရင် လည်း ရပါတယ်၊ အကို့ တယ်လီဖုန်းက ကင်မရာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ရိုက်ယူလိုက်မယ်လေ.် ....ဟင့.အဟီး.ဈေးသိပ်ကြီးတယ်ထင်တာပဲ၊ ..ဒီကောင်မလေး နဲ့ကတော့ ခက်နေပါပြီ၊ ကျနော် ကွန်ပြူတာကို ပြန်သွားကြည့်တော့၊ ဖိုင်တွေ ဒေါင်းနေတာ မပြီးနိူင်သေး ဘူး အဲဒါနဲ့ သူ့ ကွန်ပြူတာကို ဆက်ဖွနေလိုက်တာ၊ ကံကောင်းပြီး စပယ် ရဲ့ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ပုံလေးတွေရော၊ အပေါ်ပိုင်းချွတ် ပြီး မှောက်ရက် နေပူဆာ လှုံနေတဲ့ပုံလေး တွေရော တွေ့ရလို့၊ ကျနော့် ဘောင်းဘီအိပ်ထဲ အမြဲ ပါတဲ့၊ ယူအက်စ်ဘီဒရိုက်လေး ထဲ အမြန် ဆွဲထည့်ထားလိုက်တယ်၊ စပယ်ရဲ့ ဝင်းဝါတဲ့ အသားဆိုင် လေး တွေနဲ့ အမို့ အမေါက် အဖုအထစ် တွေက အကျီမပါတော့ ပိုပြီး ထင်ရှားလှပ နေတော့ ကျနော့်ကောင်ကြီးလည်း ပြန်မာလာတာပေါ့။ ကျနော် က ဖိုင်တွေ ပြီးမှ သူ့ အံဆွဲ ထဲ မှာ တွေ့တဲ့ ဝင်းဒိုးဆဲဗန်း ဒစ်နဲ့ ပြန် ရီပဲယား လုပ်ကြည့်မယ် မရ ရင်၊ ဝင်းဒိုး အသစ် ပြန် အင်စတောလုပ်မယ် လို့ စိတ်ကူးထားတယ်၊ ဝိုင်ခွက်လည်း ကုန်သွားတော့ ထပ်ဖြည့်လိုက် အုန်းမယ်လေ ဆိုပြီး အခန်းထဲက ထွက်လာပြီး မီးဖိုဖက်လျှောက်သွားတော့ ညဝတ်အင်းကျီ ပိုးသားအဖြူ စွတ်စွတ်လေး ပေါင်လည်လောက် နဲ့ စပယ် လှေခါးက ဆင်းလာတာ တွေ့လိုက်ရတယ်၊ စိတ်ထဲ မှာ တော့ ဝိုးကနဲ ဖြစ်သွား ပေမဲ့ မျက်စေ့ကို ချက်ချင်း လွဲ လိုက်မိတယ်၊ .ကွန်ပြူတာ ဘယ်လို အခြေအနေရှိလ.
.. လခွီး မှ ပဲ ငါတော့ ပညာပြ ခံနေရ ပြီ လို့ တွေးမိလိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့လေ အလားအလာကောင်းနေတယ် လို့ပဲ တွေးလိုက်ပါတယ်၊ စိတ်ကို နည်းနည်း လျှော့ ကာ သူပညာပေးတာ မသိဟန်ဆောင် ၍ ကျနော် က စပယ့်ကို ဘယ်ဆိုက်တွေ က ဘယ်လိုဒေါင်းရသည် ဆိုတာကို ပြရပါတော့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘေးက စပယ့် ညဝတ်အင်းကျီ အောက်မှာ ဘာမှ မပါဘူး ဆိုတာ သိရတော့ နှာက အရမ်းထန်နေပြီလေဗျာ၊ သူ့ကို ပဲ မောက်စ်ကိုင်ခိုင်းပြီး ကိုက ပါးစပ်က ညွှန်ကြားရင်း ကျနော့် လက်တွေက သူ့ ပေါင်တန်တွေကို ပွတ်ပေး နေလိုက်တယ်၊ စပယ့် ဆီက ဘာမှ ငြင်းသံ မကြားတော့ လူက ပိုရဲလာတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ ပေါင်ခွဆုံကြား က စောက်ဖုတ်ကို ....အိအိ တွေကရော၊ ကိုယ်နံ့ သင်းပျံ့ပျံ့ ကရော နဂိုလ်ထဲက အရှိန်ရနေ တဲ့ ကျနော် ကတော့ ဘောင်းဘီထဲ မှာ ညီတော်မောင် အတင်းရုန်းကန် နေတာကို အီစိမ့်နေ အောင် ခံနေရပြီဗျ၊ နောက် ပြီး သူနဲ့ အတူတူ ပွန်တွေ ကြည့်နေတယ် ဆိုတဲ့ ဖီလင်ကရော စဉ်းစားကြည့်တော့ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဖက်က မစရဲ ဘူးဗျ၊ သူက ပြဿနာ ရှာလိုက်ရင်၊ ကျနော့် အိမ်ထောင်ရေး ရော၊ သိက္ခာရော ကျ သွားမှာ၊လည်း လန့်တယ်၊ မီးစိမ်း မပြ မခြင်း မဝင်ရဲသေးတာပေါ့၊ ဆိုက်တခု မှာ ဖိလစ်ပီနာ ( ဖိလင်ပင်းသူ ) တယောက် က အမဲကောင်ကောင်ရဲ့ ဒစ်ကြီးကို လေးဘက်ထောက် စုပ်နေရာကို အနောက်ကနေ အဖြူတကောင်က ပြောင်းဖူးလောက်ရှိတဲ့ ဒစ်ကြီးနဲ့ လုပ်နေတဲံ ပုံ ဟိုက်ဒဖနေးရှင်းနဲ့ ကွန်ပြူတာ မော်နီတာ မှာ ဘွားကနဲ ပေါ်လာရော စပယ်က စားပွဲ ပေါ်လက်ထောက်ကုန်းကြည့်နေရာက ထလိုက်ပြီး ကျနော့် ဝိုင်ခွက်ရော သူ့ဝိုင်ခွက် ကိုပါ ယူပြီး မီးဖိုခန်းဘက်ကို ထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျနော့် မှာတော့ ရင်ထဲ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားရပါတယ်၊ သွားပါပြီ၊ ငါ စမ်းတာ လစ်မစ် ကျော်သွားပြီ ထင်တယ်၊ ဒီညတော့ အောင်ဖြာလိပ်ရတော့မယ်ထင်တယ် လို့ တွေးရင်း တွေး ရင်း ကွန်ပြူတာ မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ဘရောက်ဇာတက် တွေကို လိုက်ပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်၊ နောက် အခန်းဝ က အသံကြားလိုက်လို့မော့ကြည့်လိုက်တော့ စပယ်၊ သူ့ညဝတ်အင်းကျီက ရှေ့ကြယ်သီးတွေ ဖြုတ်ပြီး ဖွင့်ဟထားပြီး အထဲ မှာတော့ ဘာမှ မရှိ၊ ဘရာဇီယာ မရှိ အတွင်းခံ မရှိ၊ ကျွဲကောသီးလောက် မကြီးသော်လည်း အဲလောက် နီးပါး လုံးထွားလှသည့် နိူ့ကြီးနှစ်လုံး၊ နိူ့သီးခေါင်း ညိုညိုလေး တွေက် ထောင်မတ်နေသည်၊ စောက်ဖုတ် က အမွှေး ပြောင်နေအောင် မရိပ် ထားသော်လည်း၊ ကတ်ကျေး ညပ်ရှင်း ထားပုံရ သည်၊ တိတိကျကျ ရှင်းရှင်းပါးပါးလေး နှင့် အဖုတ်နူတ်ခမ်း နှစ်ခုကိုတော့ ရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေရတယ်။ ကျနော့် မှာ မေးရိုး ပြုတ်ကျသွားတော့ မတတ် ပါးစပ် အဟောင်းသားနှင့်၊ ညီတော်မောင် က အတင်းတိုး သဖြင့် ခေါင်းနုနု နှင့် ဘောင်ဘီ အသား ပွတ်မိတာက ပင် ကျနော့် ကို ဒူးခွေညွှတ်သွားလောက်အောင် ခံစားနေ ရတာပေါ့။ ..ကဲ နောက် ဘာတွေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရလဲ ပြအုန်း. ( ကြည့်ရုံပဲ ပြတာ ကိုင်ဖို့ မဟုတ် ).....သိပ်သေခြာတာပေါ့.အို အဲဒါက လုပ်ခ ဆိုရင်တော့ ကိုက ယူရမှာပေါ့..အပိုင်တော့ မယူသွားပါဘူး၊ ပြန်ထားခဲ့မှာပါ၊ အဟီး..သည့်စ်အာဖေါ်ရှိုးအုန်းလီး နော့်တူတပ်ခ်ျ.. စပယ်က စပ်ဖြဲဖြဲ နှင့် ကြယ်သီးတွေကို တကယ်ပြန်တပ်ရင်း၊ ကွန်ပြူတာနား လျှောက်လာကာ၊ ..လှလိုက်တာ စပယ်ရယ်.. မတ်တတ်ရပ်ရက် ဖြစ်နေသော ကျနော်က စပယ်ရှိရာကို လှမ်းလျှောက်သွားမလို့ ဟန်ပြင်လိုက်တော့၊ .ဘယ်လိုလဲ ဓါတ်ပုံထက် ပိုကောင်းလား... .... .အိုး နိူးနိူး....
..အား......အကိုကြီးနော် . .ပြတ်....် ..အဟီး...ု့ .လာပေ့စေ၊.ကိုကြီး လိုးတော့ ကွာ စပယ် မခံနိူင်တော့ဘူး၊ အဲဒါတွေ နောက်မှ လုပ်တော့.ဖြေးဖြေးနော် အရမ်းကျပ်နေသေးတယ်.အိ.အား...ကျွတ်စ..ရှလွတ.ကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ်၊..လက်ဖဝါးနဲ့ ပင့်အုပ်ကိုင်လိုက်ပါတော့တယ်၊ သူ့ အဖုတ်တခုလုံးလဲ စိုရွဲ နေပါပြီ၊ . ပါးစပ်က ပြောနေပေမဲ့ လူကတော့ အော်တို မစ်တစ် လှုပ်ရှားနေတာလေ၊ သိတယ် မဟုတ်လား ခေါင်းတရမ်း ရမ်း မာတင်းနေတဲ့ ကျနော့် ဒစ်ကြီးကို စပယ်က ဆုပ်ကိုင် ပြီး သူ့ အဖုတ်ဝ မှာ တေ့ပေးလိုက်တာနဲ့ ကျနော်က စပယ့် ခါးလေး ကို ကိုင် ပြီး အရသာ ရှိလှတဲ့ စပယ့် စောက်ပတ်ထဲ ကို တဖြေးဖြေး ခြင်း ထိုးသွင်း ထည့်လိုက် ပါတော့တယ်၊ .အင့.....် အီးအီး...အို့ အကိုကြီး.ကိုအောင်ကြည် သိရင် ရှော့ဂန်းနဲ့ လာမှာနော်....ခစ်ခစ်... .် .ပြတ်.ရှိပါတယ် စပယ်ရဲ့ မသိသူကျော် သွား သိသူ ဖေါ်စား ဆိုတာ မျိုးလေ ဟဲဟ.ဒီအဖုတ် ကို လိုးခွင့် ရရင် အသေခံလိုက်တော့မယ်.. ..ဲ . ကျနော်က လည်း နှစ်ခါ မပြောရပါဘူး၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ ကြယ်သီးဖြုတ် ဇစ်ဆွဲအတွင်း ခံဘောင်းဘီ ပါချွတ်လိုက်တာ ၁၀စက္ကန့်လောက်ပဲ ကြာမယ် ကျနော့် ကောင်ကြီးက စပယ့် စောက်ဖုတ်ဝကို ချိန်ပြီးသား ဖြစ်နေပြီ၊ စပယ်က စားပွဲ ကို လက်တဘက်ထောက် ထားရင်း နောက်လက်တဘက်နဲ့ ကျနော့် ကောင်ကြီးကို လက်နောက်ပြန် ဖမ်းဆုပ်လိုက် တယ်၊ .....အီး.် .... ကျနော် မအောင့်အီးနိူင်တော့ပါ၊ စားပွဲပေါ် တံတောင်ထောက်ကာ မော်နီတာ ကုန်းကြည့်နေတဲ့ စပယ့် ညဝတ် အင်းကျီ အောက်နားကို သူ့ ခါးကျင်ကျင်လေး ပေါ် လှန်တင်လိုက် ပြီး ပေါင်နှစ်လုံးကို ဘေးတွန်းကားလိုက်တော့ စပယ်က သူ့ဖင်ကလေး ကို နောက်ကော့ ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ကျနော် က အနောက်မှာဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ရင်း ၊ အရည်ရွှမ်း နေသော ခယ်မချော အဖုတ်ကို မော့ ရက် ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ .အမလေး၊ အကြီးကြီး ပါလား၊ ကိုကြီး အခုနတုန်းက ဘယ်မှာ ဖွက်ထားတာလည်း ခစ်ခစ်. .. စပယ့် ဖင်လုံးကြီး တွေ ကော့တက်လာတယ်၊ အခုန က ရေချိုးတုန်းက သေခြာသန့်ရှင်းလာလို့ ထင်တယ်၊ အမွှေး ပါးပါးလေး တွေက ဆပ်ပြာနံ့မွှေးမွှေး လေး နဲ့ အဖုတ်က ကျတဲ့ စောက်ရည်နံ့လေး နဲ့ ရောနေတယ်၊ စပယ့် စောက်ပတ်နုတ်ခမ်းသားလေး တွေက နု နေတယ် ကျနော့် လျှာ က သူ့ စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသား လေး ကို ထိုးခွဲ ပြီး အကွဲကြောင်း တလျှောက် ထိုးဆွနေရင်း ကျနော့် လက်ချောင်းထိပ်ကလေးနဲ့ သူ့ စောက်စေ့လေး ကိုပါလိမ့်ပွတ်ပေးနေတော့၊ စပယ် တယောက် လက်နှောက်ပြန်နဲ့ ကျနော့် ခေါင်းက ဆံပင် တွေကို ဆုပ်ကိုင် လာပါတော့တယ်၊ .ကျွတ်စ...
် ..် . ...အေးပါ..အေးပါ.ကောင်းလိုက်တာ စပယ်ရယ် စီးနေတာပဲ.အောင်ကြည် တကောင် နင့်ကို လုပ်ရော လုပ်ရ့လဲားကွာ.့ .လုပ်ပါတယ် ကိုကြီးရဲ့ သူ့ဟာက ကိုကြီးလောက်မှ မကြီးတာ...အီး ... တကယ်တန်းတော့ ကျနော်လည်း စကား မပြောနိူင်တော့ပါ စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ လုပ်လို့ကောင်းလှတဲ့ စပယ့် အဖုတ်လေးကို ပစ်ပစ် ဆောင့်လိုက်တိုင်း အတွင်း စောက်ခေါင်းသားလေး တွေရဲ့ နူးညံ့ နွေးထွေးတဲ့ အရသာ က ကျနော့် လိင်ချောင်းကြီး တချောင်းလုံး က အကြောတွေကို ထိတွေ့ ခံစားနေရတာ ကောင်းလိုက်တာ၊၊ နောက် ကျနော့် လက် ဖဝါး နှစ်ဘက်နဲ့ အုပ်ကိုင် လို့ အနေတော် ရွှေရင် အစုံကိုလည်း စပယ့်ညဝတ် အင်းကျီ အောက်က လက်လျိုပြီး တဘက်တချက် ဆုပ်နှယ်ရင်း၊ ကျနော့် ခါးကို ကော့ကော့ ဆောင့်နေမိတော့တယ်၊ ကျနော့် လိင်ချောင်းကြီး အဆုံးဝင်သွားတိုင်း အိကနဲ ကျနော့် ပေါင်ခြံနဲ့ ဖိမိတဲ့ စပယ့် ဖင်သားတွေကလည်း တင်းရင်း နေတာ အရသာ တမျိုးပေါ့၊ နောက် စပယ်ကလည်း ကျနော့် မိန်းမ မြနှင်းဆီ လို အသံတိတ် မနေဘူး၊ သူက ကောင်းရင် ကောင်းသလို အသံ မျိုးစုံကို အော်ဟစ် ခံနေတာမို့ ကျနော့် အတွက် က တမျိုး တဘာသာ ဖြစ်ပြီး စိတ်ပို ကြွရ ပြန်ပါတယ်၊ စပယ်က သူ့ခါးလောက် ရှိတဲ့ ဆံပင် ကို ခပ်လျှော့လျှော့လေး ထုံးထားတော့ ကျနော် ဆောင့်တဲ့ အရှိန်နဲ့ အခု တော့ ပြေကျ နေပြီး အုပ်ကောင်းလှ တဲ့ ဆံပင် ထွေးကြီး မို့ ဖွားကနဲ ဖွားကနဲ၊ ကျနော့် အဖို့လည်း အဲ လိုမျိုး ဆံပင် အရှည်ဖားယားနဲ့ မိန်းမ လည်း တခါမှ မချဘူး၊ တော့ နောက်တမျိုး ဆန်းတယ် ပြောရပါအုန်းမယ်၊ အဲ လို အဆန်းတွေ အကောင်းတွေ စုပြုံနေတော့ သိပ် အကြာကြီး မထိန်းထားနိူင်တော့ ပါဘူး၊ စပယ်လည်း အရမ်း ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ ပေးလာ ကျနော်လည်း ဆောင့်တာ မြန်လာပြီး နှစ်ယောက်စလုံး၊ တအင်းအင်း ၊ တအားအား နဲ့ ဒီည အတွက် ပထမ ဆုံး အချီကို အဆုံးသတ် လိုက်ကြပါတော့တယ်။ တချီပြီး သွားကြတော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် တယောက်နဲ့ တယောက် ပြော စရာ မလိုပဲ နဲ့ နူတ်ခမ်းချင်း စုပ်နမ်း နေမိတယ်၊ စပယ် က ဝိုင်သောက် အုန်းမလား မေးပေမဲ့ ကျနော်က ရေ ပဲ တောင်း လိုက် ပါ တယ်၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် သူတို့ မီးဖို ခန်းက ကောင်တာပေါ်တင်ထားတဲ့ ရေ တဗူး စီ ကောက်လာပြီး သူတို့ လင်မယား အိပ်တဲ့ အပေါ်ထပ်က အခန်း ကို တက်လာခဲ့ကြတယ်၊ အခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ ကျနော်က စပယ် ဝတ်ထားတဲ့ ညဝတ်အင်းကျီကို ဆွဲချွတ်ပြီး ကြမ်းပေါ် ပစ်ချလိုက်တယ်၊ ကျနော့် အင်းကျီလည်း ဒီ အတိုင်းပဲပေါ့၊ ဘောင်းဘီကတော့ ကွန်ပြူတာ အခန်းထဲ မှာ ပဲ ကျန်ခဲ့တယ်လေ၊ အခု န တချီပြီးကတဲ က ကျနော်က ပြန်မဝတ်တော့တာ၊ အဟီး၊ စပယ်ကို ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲထည့်ပြီး မော့ပေးလာတဲ့ သူ့မျက်နှာ တပြင်လုံးကို အနမ်းတွေ ချွေရင်း သူ့ နူတ်ခမ်းလေး တွေကိုလည်း ငုံစုပ်လိုက်တယ်၊ စပယ် ရဲ့ ထောင်မတ်နေတဲ့ နိူ့သီးခေါင်း လေး တွေက ကျနော့် ရင်ဘတ်ကို လာ ထိုးနေတာ ယားကျိကျိ နဲ့၊ ကျနော့် ကောင်ကြီး ကလည်း နောက် တပွဲ ဆင်နွဲ ဖို့ ရယ်ဒီ ဖြစ်နေပြီ ဆိုတာကို စပယ့် ဘိုက်သားလေးကို သွားထောက် ပြီး အချက်ပေးနေလေရဲ့။ စပယ်က လည်း ခပ်ထန်ထန်ပဲ ဗျ၊ သူ့ နူတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုက ကျနော့် ကို ပိုပြီး စိတ်တက် ကြွလာ စေလောက် အောင် ကို ကောင်းတယ်၊ ကျနော်က စပယ်ကို သူတို့ ရဲ့ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီး ဆီ ခေါ်သွားပြီး အိပ်ယာပေါ် အတူ လှဲလိုက်ကြတယ်၊ အနမ်းတွေ ကတော့ မပြတ်ဘူးပေါ့ဗျာ၊ အိပ်ယာပေါ် ရောက်တော့ စပယ်က ကျနော့်ကို ပက်လက်ဖြစ်အောင် တွန်းလိုက်ပြီး သူကဒူးထောက် ထိုင်လိုက်တယ်၊ ကျနော်က သူဘာများ လုပ်မလဲ လို့ ကြည့်နေတုန်း သူက ကျနော်ရဲ့ ထောင်မတ်နေတဲ့ ကောင်ကြီး ကို သူ့လက်ချောင်းကလေး တွေနဲ့ ဆုပ်ကိုင် လိုက်ပြီး ဒစ် အဖျားလေး ကို ငုံ့နမ်းလိုက်တယ်၊ နောက်တော့ သူ့ရဲ့ နူတ်ခမ်း လှလှ လေး ဖွင့်ပေးပြီး နွေးထွေး လှတဲ့ သူ့ ရဲ့ အာခံတွင်း မှာ ငုံ လိုက်ပြီး သကြားလုံးလေး လို စုပ်ပေးတယ်ဗျ၊ နောက် သူ့လျှာက ကျနော့် လီးထိတ် အကွဲ ကြောင်းလေးကို လာထိုးတော့ ကျနော် တွန့က်နဲ ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ သူ့ ဆံပင်ကို ယောင်ရမ်းပြီး ဆုပ်ကိုင်လိုက်တော့ ခပ်လျှော့လျှော့ ထုံးထားတဲ့ သူ့ ဆံပင်အုပ်ကြီးက ထွေးကနဲ ကျနော့် ပေါင်ပေါ် ကျလာတာပေါ့၊ နောက်တော့ ကျနော့် လိန်ချောင်း ကြီးကို စပယ်က သူ့ နူတ်ခမ်းလေး နှစ်ခု တင်းတင်း စိလို့ မျက်နှာကို ရှေ့တို့ နောက်ငင်လေး လုပ်ပေးတော့ ကောင်းလိုက်တာဗျာ၊ ကျနော်တော့ သူ့ ရဲ့ အုပ်ကောင်းလှတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီး ကိုပဲ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ထိုးဖွ ကစားနေမိတော့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ စပယ်က လည်း ခေသူ မဟုတ် .အင့.စပယ် စိတ်မသန့် ဘူး....ဟင့..သူ့ အကြောင်း မပြောပါနဲ. .
ပါးစပ်ထဲ မှာ ပြီးရ မှာလား စပယ့် ဖင်ပေါက်ထဲ မှာ ပြီးလို့ ရမလား.ဘူးဗျ၊ သူက ပေးသလို ပြန်လည်း ယူဖို့ လက်မနှေးဘူး ဆိုတာလည်း ပြလိုက်တယ်၊ အဲဒါကတော့၊ ကျနော့် လီးကို စုတ်နေရင်း က သူ့ကိုယ်လုံးကို ဒူးထောက်ရက် ကနေ လှည့်ပတ်ပြီး ကျနော့် ရင်ဘတ်ပေါ် ခွလိုက်တာပါပဲ နောက်တော့ သူ့ ဖင်ကြီးကို နောက့်ရွှေ့လိုက်တော့ သူ့ရဲ့ အမွှေးပါးပါး နဲ့ အဖုတ် ကြီးက ကျနော့် မျက်နှာရှေ့တည့်တည့် ရောက် လာတော့တာပေါ့၊ ကျနော်ကလည်း လက် အဲ ဟုတ်ပါဘူး လျှာ မနှေး ပါဘူးဗျာ ၊ပါးစပ်ရှေ့ ရောက်လာတဲ့ အဖုတ်ပဲ ၊ ဘယ်ငြင်းလို့ ရမှာလဲ သူ ပေါင် နှစ်ဖက်ကို ကျနော့်လက်နှစ်ဘက်နဲ့ အသာ မ ပြီး သူ့ အဖုတ်ကို ကျနော့် ပါးစပ်ပေါ်တည့်တည့် ကျအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပြီး စရက်တော့တာပေါ့ဗျာ၊ အဲ လို ကျနော် တို့ နှစ်ယောက် ဆစ်စတီနိူင်း လုပ်နေကြတာ ကျနော့် လျှာက သူ့ချက်ကောင်းကို သွားထိလိုက်လို့လား မသိဘူး၊ စပယ် ကျနော့် ဒစ်ကိုစုပ်နေတာ ခနရပ်သွားပြီး သူ့ဖင်ကြီးကို ကျနော့် ဆီ အတင်း ဖိကပ်ပစ်လိုက်တာ ကျနော် တောင် အသက်ရှုနည်းနည်း ကျပ်သွားတယ်ဗျာ၊ ကျနော့် လျှာမှာတော့ သူ့ အဖုတ် နံရံတွေ လှုပ်စိလှုပ်စိ ဖြစ်တာ ထိတွေ့ သိနေတော့ သူ ပြီးသွားတယ် ဆိုတာ သိလိုက် တယ်၊ ခနနေလို့ သူ ဖင်ပြန်ကြွသွားမှ ပဲ ကျနော်က ကျနော့် မျက်နှာနဲ့ တထွာလောက် ကွာသွားတဲ့ သူ့ အဖုတ်ထဲ ကျနော့် လက်ညိုးလက်ခလည် နှစ်ချောင်းပူး ထိုးထည့် ပြီး ဖင်းကားဖတ် လုပ်ပေးနေ လိုက် ပါတယ်၊ သူလည်း ကျနော့် ဒစ်ကို အသားကုန် စုပ်နေတော့ ကျနော်လည်း ဖီးတအားတက်လာပြီး သူ့စောက်ရည် တွေ စိုရွဲနေတဲ့ ကျနော့် လက်ခလည်ကို သူ့ ခရေပွင့်လေး ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်၊ အဲဒါတော့ သူ အငိုက်မိသွားတယ် ထင်တယ် ဖင်တချက် ခါသွားတယ်၊ ပါးစပ်ကတော့ ကျနော့် ဒစ်နဲ့ ပြည့်နေတာမို့ ဘာမှ မပြောနိူင်ပေမဲ့ မလုပ်နဲ့ လို့ ပြောတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖင်ကြီးကို ဟိုဘက်ဒီဘက်ရမ်း နေတယ်ဗျ၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်က အပိုင်မိနေပြီလေ၊ လက်ချောင်းလည်း တဆစ်လောက် ဝင်နေပြီ ဆိုတော့ နောက် နှစ်ဆစ်က ဘာမှ မခက်တော့ဘူးလေ၊ သူ့ ဖင်နည်းနည်း ငြိမ်သွားတော့ သူ့ဖင်ပေါက်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ကျနော့် လက်ချောင်းလည်း နည်းနည်း ခြောက်နေတာနဲ့ နောက်လက်တဘက်ထဲ ခေါင်းစောင်း တံတွေးထွေးချပြီး ထပ်စွတ်လိုက်ရပါတယ်၊ အခုတော့ သူလည်း နည်းနည်း အသားကျသွားပုံရတယ်၊ ဖင်ကြီး မရမ်းတော့ပဲ ကျနော့် လက်နဲ့ လုပ်နေတာကို ငြိမ်ခံနေရင်း ကျနော့် ဒစ်ကို ပဲ ဆက်စုပ် ပေးနေတယ်၊ ကျနော်လည်း သိပ် မကြာတော့ ဘူး ပြီးတော့ မယ် ဆိုတာ သိလို့၊ . စပယ်က စကားပြောလို့ မရ ကျနော့် ဒစ်ကိုလည်း သူ့ ပါးစပ်ထဲ က မလွတ် ပဲ နဲ့ ခေါင်းရမ်း ပြနေတော့ ကြည့်ရတာ သူ့ ဖင်ကို ချမှာ ကြောက်နေတယ် ထင်တယ် လေ ဟု တွေးရင်း စိတ်ကို လွတ်လိုက်တော့ ကျနော့် လီး ကြီးက သုတ်ရည်တွေ အရှိန်ပြင်းပြင်း နဲ့ စပယ့် အာဂေါင်ထဲ ပန်းထွက် သွားပါတော့တယ်။ စပယ်နဲ့ ကျနော် နဲ့ နှစ်ယောက်စလုံး မနက်ဖြန် အလုပ်ရှိသေးတယ်လေ ဆိုပြီး၊ ရေမိုးချိုးကြပြီး သူတို့ လင်မယား အိပ်ယာပေါ် မှာပဲ ဖက် ပြီး အိပ်လကိုကြပါတယ်၊ မနက် အစောကြီး ကျနော် နိူးလာတော့ ကျနော့် ကောင်ကြီးက ထုံးစံ အတိုင်း မာနေပြီလေ၊ အသက် မှန်မှန်လေး ရူပြီး အိပ်မောကျနေသေးတဲ့ စပယ့် ပါးပြင် လေး ကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်တော့ ကြောင်မလေး အကြောဆန့် သလို ဆန့် ပြီး နိူးလာတယ်၊ တချိန်ထဲ မှာပဲ သူ့ ဘိုက်လေး ကို ထောက်နေတဲ့ ကျနော့် ကောင်ကြီးကို သတိထားမိသွားတယ်၊မျက်နှာလေး က ပြုံးသွား တယ်၊ .....စပယ်..တကယ်ကြီးလား..ကိုအောင် နဲ့ များကွာပါ့.. ကျနော် က စပယ့် ပေါင်တလုံးကို ကျနော့် ခါးထစ် ပေါ်ကို ဆွဲတင် လိုက်ပါတယ်၊ အဲ တော့ ကျနော့် လိင်တန်ကြီးက စပယ့် အဖုတ်လေး ကို တန်းနေပြီပေါ့၊ ...ကိုကြီး ပြီးတော့ မယ်နော်.ကိုကြီး ဆီက အန်နာဂျီ သူ့ကို တဝက်လောက် ခွဲပေးထားဖို့ကောင်းတယ်၊ ခစ်ခစ်....ဟဲတော့..
.....ကဲ အဲဒါ ဆို ကိုကြီးရဲ့ ညီလေး ကို ဘရိတ်ဖတ်စ်ကျွေးလိုက်အုန်း. သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ကျနော် တို့ နှစ်ယောက်စလုံးရုံးတွေ ဆီကို နောက်ကျ ရောက်သွားကြပါတော့တယ်၊ ကျနော် သင်တန်း ကာလ တပတ် အတွင်း မှာ စပယ်က ကျနော့် ဟော်တယ် လိုက်အိပ်လိုက်၊ ကျနော်က သူ့အိမ် လိုက်အိပ်လိုက် နဲ့ ကျနော် တို့ နှစ်ယောက် သောင်းကျန်းကြပါတယ်၊ စနေ တနင်္ဂနွေ မှာတော့ စပယ့်အိမ် မှာပဲ တနေကုန် နေကြပြီး ချက်ပြုတ် စားသောက် ကြ ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြ၊ လိုးကြ လုပ်ကြပါတယ်။ အဲ ဒီ စနေနေ့ မှာပဲ စပယ်ရဲ့ ခရေ ကို ပါကင်ဖွင့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်၊ စပယ်က အစ မှာ နည်းနည်း ကြောက် သော်လည်း ကျနော် က ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားတာမို့ သိပ်တော့ မခက်ခဲ လှပါ၊ စီဗီအက်စ် စတိုး က ဝယ်လာတဲ့ အဲဒီကိစ္စတွေ သုံးတဲ့ ချောဆီ၊ အထုပ်ကလေး ကို အသုံးချ ပြီး စပယ့် ဖင်ပေါက်လေး ကို ကောင်းကောင်း လက်နဲ့ အသားကျအောင်လုပ်ပေး၊ အဲ နေရာကတော့ ဧည့်ခန်း မှာဗျ၊ အဟီး၊ ကျနော့် ဟတ်ဒရိုက်ထဲက ဟိုက်ဒဖနေးရှင်းနဲ့ ဒေါင်းလုပ်ထားတဲ့ အဲဒီ ဖင်ချ တဲ့ အခန်းပါတဲ့ အောဇာတ်ကားကို သူတို့ ဧည့်ခန်းက လက်မ ၆၀ အယ်အီးဒီ တီဗီမှာ ကျနော့် လက်တော့ နဲ့ ဆက် ဖွင့်ထားပြီး ၊ စပယ့်ကို စနူးတာ၊ သူနနဲ စိတ်ပါလာတော့မှ တီဗီကြည့်နေရင်းနဲ့ ဆိုဖါ အနောက်မှာရပ်ပြီး ဆိုဖါနောက်မှီပေါ်မှာ သူ့ကို ဘိုက်မှောက်ပြီး ကုန်းခိုင်း လိုက်တယ်၊ နောက် မှ အခု နက ပြောတဲ့ ချောဆီ ထိုးတာ၊ လက်နှစ်ချောင်းလောက် ကောင်းကောင်း ဝင်တော့ မှ၊ ကျနော့် ဒစ် ကြီး နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးလိုက်တာ၊ အဲဒီ အခါ မှာတော့ ကျနော်က ကွန်ဒန် စွတ်ထားတယ်လေ၊ သူ့ ဖင်ပေါက်က ဟိုဟာဒီဟာ ကြောင့် ကျနော့် ယူရီနယ် အင်ဖက်ရှင်း မဖြစ်ချင်ဘူးလေ၊ အဟီး ၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ညီ အမ တွေ ဖင်ဒီလောက်ကောင်းတာ ချချင်နေတာ ကြာတော့ အဲလို လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ၊ မြနှင်းဆီက ကျနော့် ကို မပေးဘူးဗျ၊ လင်မယားချင်း ဆိုတော့ လည်း ကျနော်က အတင်းတောင်းရင် ပါဗတ် လို့ အပြောခံရမှာလေ၊ မခရေ ကို ကျတော့လည်း ကျနော့် ဒစ်လေး နဲ့ သူ့ ဖင်ဝ ကို မသိမသာ အပေါက် မှားသလို တေ့ သေးတယ် ဗျ သူကလည်း ပါးတယ်၊ မရ ဘူး၊ မလုပ်နဲ့ ကွာ အဲဒါက နာတယ်၊ ငါ မကြိုက်ဘူးတဲ့၊ အဲဒီတုန်းက ကျနော့် မှာ ချောဆီလည်း မရှ၊ိ သူလည်း ပိတ်ပြောထားတော့ လုပ်လို့ မရတာ၊ အခု စပယ်ကျ မှပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကဲရတော့တယ်၊ စပယ်ကလည်း ဖင်တခါမှ မကုန်း ဖူးဘူး တဲ့ ဒါပေမဲ့ ကျနော့် စနစ်တကျ တဆင့် ချင်း လုပ်ပေးတော့ နောက်ဆုံး ကျနော့်ကောင်ကြီး အဆုံးထိ ဝင်သွားတာ တောင် ခံနိူင် သွားတယ်ဗျ၊ နောက် တော့ ဆိုဖါနောက် မှီကို သူ့လက် နှစ်ဘက်နဲ့ ထောက် ပြီး ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ ပေးလာတယ်ဗျ၊ ကျနော် လည်း စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ကို ဝုန်းပစ်လိုက်တာ ပြီးသွားတော့ ဆိုဖါပေါ်ကို နှစ်ယောက်စလုံးပစ်လဲ ကျသွားတော့ တာပါပဲ၊ အဲ လိုနဲ့ နောက် အပတ် အင်္ဂါနေ့ ကျတော့ သင်တန်းလဲ ပြီးပြီမို့ မစပယ်နဲ့ မခွဲ ချင်ပဲ ခွဲ ကာ ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့၊ စပယ်နဲ့ တပတ်လုံးလုံး မနားတမ်း ဝုန်းခဲ့ ရတော့ လူလည်း နည်းနည်း နွမ်းသွားတယ်၊ အဟီး ၊ တော်ကြာ မိန်းမ က လိုချင် လို့ တောင်းနေရက် နဲ့ ငါ မလုပ်နိူင်ရင် ဒုက္ခ ပဲ လို့ ပူနေမိ သေးတယ်၊ ထင် သလို မဟုတ်ပါဘူး၊ မြနှင်းဆီ လည်း ထုံးစံ အတိုင်း သူ့ အလုပ်ချိန်က နောက် ကျသွား နောက်ကျ ပြန် ဆိုတော့ သူပြန်လာတဲ့ အချိန် ကျနော်က တခေါခေါ ဖြစ်နေပြီ။ အလုပ်မှာလည်း ကျနော်က ဌာန အပြောင်း အလဲ နဲ့ ဆိုတော့ နည်းနည်း အလုပ်ရှုတ် လည်း ရှုတ်နေတယ်၊ အခု ရာထူးတိုးပြီး မန်နေဂျာ စူပါဗိုက်ဇာ လယ်ပယ်လောက် ရောက်လာတော့၊ အရင် ဘော့စ် လီလီ နဲ့ က လည်း အဆင့်က မတမ်းမယိမ်း ဖြစ်လာ တယ်၊ အခု ဘော့စ် အသစ် က လည်း နာမည်ကြီး၊ အလုပ် တအားလုပ် ပြီး ခိုင်းတဲ့ နေရာ မှာ လည်း မညှာဘူး၊ အားမနာဘူး၊ အပေါက် ဆိုး တယ် ဆိုပြီး နာမည် ကြီးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လေ ဝက်ဖြစ်မှ တော့ မစင်ကြောက် နေလို့ ရမလား၊ ကိုယ်လည်း ကျေနပ်လောက်တဲ့ ဝင်ငွေလေး ရှိနေတာဆိုတော့ ကြည့် လှုပ်ရှားရမှာပေါ့၊အဲ လို အတွေးနဲ့ စိတ်ကိုလျှော့ထားပြီး အောက်က ဝင်ရတယ်၊ အဟီး။ ပထမ ဆုံးစ တွေ့ ကထဲက အဆက် မပြတ်ကို ပြောလိုက်တာ သူလိုချင်တာတွေ ကို ကျနော် တောင် ခေါင်းထဲ မှာ တော်တော် လေး တွေးနေရတယ်၊ ငါ ဒီဌာန မှာ ဆဗိုက် ဖြစ်ပါ့မလားပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ခေါင်းအေးအေး ထားပြီး သူလိုချင်တာ တွေ တချက်ချင်း ဘရိတ်ဒေါင်း စာရွက်ပေါ်မှာ ချရေး ပြီး ပလန်လုပ် လိုက်တော့လည်း သိပ်မခက် တော့ပါဘူး၊ တခုပဲ ရှိတယ်၊ ကျနော့် အောက်မှာ လုပ်နေတဲ့ သူတွေကို .
တော့ နည်းနည်းမောင်းရ တာပေါ့၊ အဟီး၊ ဒါနဲ့ ကျနော့် ဘော့စ် အသစ် နဲ့ မိတ်ဆက် မပေးရသေးဘူး၊ သူ့ ရဲ့ ဖတ်စ်နိမ်း က လာလဲ ( La Leh ) တဲ့၊ သူက ဒီနေ့ ခေတ် အီရမ် လို့ ခေါ်နေကြတဲ့ နိူင်ငံက ပါရှမ် ( ပါရှား လူမျိုးပေါ့ ) အီရမ် လူမျိုးတွေ ကို ပါရှား တွေမှန်း ကျနော် အီရမ် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ တွဲ လာတော့မှ သိလာရတာ၊ သူတို့ က လည်း အိုမာခရမ် ကို အရမ်းဂုဏ်ယူ တာ၊ ကျနော် အိုမာခရမ် ကဗျာတွေ ကို သိတယ် ဆိုတော့တောင် သူတို့ က အင်း အိုမာခရမ် ကတော့ တကမ္ဘာလုံး မသိတဲ့ သူ မရှိပါဘူး လုပ်နေသေးတယ်၊ အဲဒီနိူင်ငံက ဗျ၊ မစ်စစ်လာလဲ က၊ ခလေး နှစ်ယောက် အမေ၊ ခလေး တွေက ကြီးကုန်ပြီ ကောလိပ်တွေ ရောက်ကုန်ကြပြီ သူ့ ကြည့်ရတာတော့ သိပ်မကြီး သေးသလို ပဲ အရမ်းနုတယ်၊ အသက်လည်း တကယ်တော့ ကြီးသေးပုံ မရဘူး၊ သူတို့ နိူင်ငံမှာ မိန်းခလေး တွေက ဆယ့်လေး ငါးနှစ်လောက် ဆို အိမ်ထောင်ပြု လို့ရနေပြီ၊ သူက ပညာတတ်မို့ နည်းနည်း နောက်ကျ တာ ဖြစ်ပေမဲ့ ယောက်ကျား ရတုန်းက အသက် ၂၀ တောင် မပြည့်သေးဘူးလို့ သူတို့ လူမျိုး တွေ ဆီက သတင်းကြားရတယ်။ လာလဲ ဆိုတာကလည်း သူတို့ ဖါစီ ( သူတို့ ပြောတဲ့ စကားကို ဖာစီလို့ ခေါ်တယ်) လို အဓိပ္ပါယ်က ကျုးလစ် ( tulip ) ကို ခေါ်တာ ပဲ ဆိုတော့ ၊ ငါ့ မှာ ပန်း နဲ့ လာတွေ့ ပြန်ပြီ လို့ တွေးလိုက်မိတာ ပေါ့၊ မဟုတ်ဘူးလား၊ အခု မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တယ်၊ ကျနော်နဲ့ လာပတ်သက် သမျှ အမျိုးသမီးတွေ အကုန်လုံးက ပန်း နာမည် တွေ ချည်း ပဲ ဖြစ်နေတာလေ၊ အင်း ဒီတခါတော့ မစ်စစ် လာလဲ နဲ့ ကတော့ မဖြစ်နိူင်ပါဘူး လို့ ကျနော် တွေးလိုက်မိတယ်၊ ဖြစ်ခဲ့ရင်ရော ဆိုတဲ့ အတွေးက ကျနော့် ဖွားဘက်တော် ကို နွေးကနဲ သွေးပူသွားစေ ခဲ့တယ်၊ လာလဲ ကို ပုံဖေါ်ရရင်တော့ မျက်နှာသွယ်သွယ်၊ မေးစေ့ချွန်ချွန်၊ နှာတန်ဖြောင့်ဖြောင့် စင်းစင်းရှည်ရှည်၊ မျက်တောင်တွေက အရှည်ကြီး၊ ကုလားမ မင်းသမီးတွေ လိုပဲ၊ ဆံပင် က အညို ကို အနီရောင် နည်းနည်းလေး သန်းနေတယ်၊ အနီကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး၊ မျက်လုံးက အညိုရောင်၊ အရပ်ကတော့ ၅ပေ ၅လက်မ လောက်ပဲ ရှိမယ်၊ ဘော်ဒီကတော့ သူတို့ လူမျိုးတွေ ထဲ မှာတော့ သွယ်တယ် ပြောရမယ်၊ ကျနော် သိတဲ့ အီရမ် အမျိုးသမီး တွေက တော့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ၊ ဘော်ဒီ တွေပါ လိုက်ကြီး လာတတ်တယ်၊ ခါးပါပျောက်ရော အဟီး၊ လာလဲက တော့ အဲ လို မဟုတ်ဘူး၊ မြနှင်းဆီ လောက်ပဲ ဘော်ဒီက ၊ နောက် သူက အဝတ် အစားကို အမြဲ တမ်း ဘစ်စနက် စု အဆင့်မြင့်မြင့် တွေ ပဲ ဝတ်လေ့ရှိ တော့ လူကို အပြင်မှာ တွေ့လိုက်ရင်၊ ဖတ်စ်ကလပ်စ် လေဒီမှန်း သိသာတယ်၊ နောက် ပြီး မောင်းနေတာကလည်း မာစေးဒီးစ် ဘန့်ဇ် အက်ကလပ်စ်၊ ယောက်ကျားကလည်း ကော်ပိုရေးရှင်းတခုက စီအီးအိုလိုလို ဘာလိုလို ပြောသံကြားတာပဲ။ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းချူပ်ရရင်တော့ ကျနော့် ရဲ့ ကြိုးစားပြီး လုပ်ပြလိုက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး က မစ်စစ်လာလဲ ရဲ့ ယုံကြည်မှု ကို ကျနော် ရလိုက်တာပါပဲ၊ သူ ကျနော့်ကို စိတ်ချ သွားပြီးတဲ့ နောက် မှာတော့ သူများတွေ ပြောသလို၊ မစ်စစ်လာလဲ ဆိုးတယ် ဆိုတာ မဟုတ်ကြောင်းကို သိလာခဲ့ရပါတယ်။ မစ်စစ် လာလဲ ကိုယ့်အပေါ်ကို ယုံကြည်အားထားလာတောင် လုပ်ပြပေးလိုက်ရတဲ့ အတွက် နောက် အကျိုးတခု ရတာက တော့ ခိုဇားမား ( khuzama ) လို့ခေါ်တဲ့ အာရပ် အမျိုးသမီးလေး နဲ့ ရင်းနီးသွားရတာပါပဲ၊ အဲဒီ အမျိုးသမီးက ဆော်ဒီ က၊ သူ လည်း သူ့ အမျိုးသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျ တုန်းက ၁၆ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ် ပြောတယ်၊ သူ က အမေရိက မှာတော့ ပုံမှန် အဝတ်အစားပဲ ဝတ်တယ်၊ စကဒ် တွေ ဘာတွေတော့ မဝတ်ဘူး၊ ဘောင်းဘီ အရှည် ပဲ ဝတ်တာ များတယ်၊ သူ ဆော်ဒီ အာရေးဗီးယား ပြန်ရင် တော့ ဟိုမှာ ခေါင်းမြီးခြုံရတယ် ပြောတယ်၊ ဒီမှာလို ဝတ်လို့ မရဘူးတဲ့၊ လူ က သွယ်သလို ထင်ရပေမဲ့ ဖင်က တော့ ကြီးတယ်၊ အာရပ်မ တွေ ထဲ မှာကလည်း ဖင်မကြီးတဲ့ မိန်းမ က ခပ်ရှားရှားရယ်၊ မျက်နှာလေး ကတော့ အရမ်းလှတယ်၊ မျက်လုံးတွေ က ကြည်နေတာ ပဲ၊နာတန်လေးက လည်း စင်းတယ်၊ အသား အရည်ကလည်း ဝင်းတယ်၊ အဖြူတွေ လိုဖြုတာ လည်း မဟုတ်ဘူး၊ တရုပ်မ တွေလို ဖြူတာ လည်း မဟုတ်ဘူး၊ အသားအရည်က ညှက်ပြီး ဝင်းနေတာ၊ အာရပ်မ တိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူး၊ တချို့တွေ ဆို ညိုညစ်ညစ် နဲ့ပါ။ အင်း တိုတို ပြောရရင်တော့ ကျနော်က မစ်စစ် လာလဲ အတွက် အလုပ်လုပ်ရတော့ အောက်က လူတွေကိုလည်း မဖြစ်မနေ ပရက်ရှာတော့ ပေးရတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့် နဂိုလ် စိတ်ဓါတ် ကိုက သူများကို အရမ်းတွန်းမဲ့ အစား တချို့ဟာတွေ ကိုယ်ပဲ လုပ်လိုက်တော့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော့် အောက်မှာ လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေ ထဲ မှာ ခိုဇားမား ကလေးက တော့ လုပ်ရှာတယ်၊ သူ့ရဲ့ မတွယ် မကပ် လုပ်ရှာတဲ့ စိတဓ်ါတ်ကြောင့် သူက ကျနော့် ဖေးဘရိတ် စတပ် လည်း ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့။ .
.... ....ဦး.ဟေး ကေဇီ..နင့် ကို ငါ အလုပ်တွေ တအားခိုင်းထားသလို ဖြစ်နေပြီ၊ ပြန်တော့မလား.နင်..ဆောရီးပဲ .ဒီကြားထဲ မှာ ပိတောက်ဝါနဲ့ ကျနော်နဲ့ ချပ်တာ ကလည်း အခု ဆိုရင် တခါချပ်ရင် ချပ်ထဲ မှာ တချီ ပြီး ဖြစ်နေကြတဲ့ အထိ တိုးတက်နေကြပြီ၊ ဒီနေ့ ချပ်မှာ သူ့ ကို ကျနော် ဘယ်လို ရက် မယ်၊ ဘယ်လို ပုံစံ နဲ့ လုပ်ချင်တယ် ဆိုတာ ပြောပြီး အဆုံးသတ် သွားရင် ၊ နောက်တခါချပ်ကျ ရင် သူက ကျနော့် ကို ဘယ်လို မှုတ်ပေး မှာ၊ သူက ဘယ်လို ပုံစံ မျိုးနဲ့ အလုပ်ခံချင်တာ၊ စတာမျိုး အပြန်အလှန် ဖြစ်နေကြတာပေါ့။ နောက် ကျနော် စပြီး ဇာတ်လမ်းလေး ရေးနေတဲ့ ဆိုက်က ပဲ ကျနော့်ကို အားပေး အားမြှောက် လုပ်ကြတဲ့ အောစာပေ ရေးသူ တွေ နဲ့ လည်း ခင်မင်လာခဲ့တယ်၊ ကျနော့် ကိုလည်း သူတို့က ကလောင် နိမ်း နဲ့ ပဲ သိကြသလို ၊ ကျနော်က လည်း သူတို့ ကို ကလောင် နိမ်းနဲ့ ပဲ သိကြတာပါ၊ ဒါပေမဲ့ အဲ လို သူငယ်ချင်း မျိုး အပြင်မှာ ဘယ်လိုမှ မရ နိူင် ဘူးလေ၊ စိတ်ထဲ ရှိတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလို့ရတာကိုး၊ ကိုယ့် အပြင်လောက ရဲ့ အနေအထား နာမည် တွေကိုလည်း မသိကြတော့ အထင်သေးမှာလည်း စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ဘူး၊ ပြောစရာ ရှိတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလာနိူင်ကြတယ်လေ၊ အဲဒီမှာ ဂျော်နီပွမ်ပွမ် ဆိုတဲ့ စာရေးသူ တယောက် နဲ့ သွားခင်မိတယ်၊ တခါတလေ သူ့ ဂျီတော့ စိမ်းနေတာ တွေ့ ရင် ကျနော် က ဝင် နုတ်ဆက် လိုက်ပြီး စကားစမြီ ပြောဖြစ်ကြတယ်၊ အဲ မှာ ကျနော် တခုသိရတာက ဦးဂျော်နီ၊ ( သူ့ အရေးအသား၊ သူ့ အတွေ့ အကြုံတွေ ကို ဖတ်ကြည့်ရတာနဲ့ သူ က ကျနော့်ထက် အသက်ကြီး မှာပဲ ဆိုတာ သေခြာလို့ ကျနော်က ဦးဂျော်နီ လို့ ခေါ်လိုက်တာလေ၊ အဟဲ ) က သူ အွန်လငိုးက နေ ခင်နေရ တဲ့ ကောင်မလေး တယောက် ရှိကြောင်း၊ တက္ကသိုလ် က ဆရာမ ဘာညာ ပြော ပြီး ၊ စကား ပြောတာ လည်း ဗမာလိုတော့ သိပ်မပီတော့ကြောင်း၊ ငယ်ငယ်ထဲက နိူင်ငံခြား ရောက်နေကြောင်းပြော လာတော့ ကျနော့် ခေါင်းထဲ မခရေ ကို ပြေးမြင် မိလိုက်တယ်၊ အဲဒါနဲ့ ဦးဂျော်နီ ကိုလှမ်းအစ်လကိုတယ် ခင်ဗျား ပြောနေတဲ့ ကောင်မလေး က မီးမီး မဟုတ်လား ဆိုတော့ ဘဲကြီး လှန့်ဖြန့် သွားတယ်၊ မင်း ဘယ်လိုသိတာလဲ ဘာညာနဲ့ ပေါ့၊ အဟီး ၊ ကျနော်က ရမ်းတုတ်တာပါဗျာ၊ အဲ လို အွန်လိုင်းမှာ ခင်ဗျားတို့ လို ဘူတာကြီး တွေ ဆိုရင် မီးမီး တွေနဲ့ ပဲ တွေ့ တတ် လွန်းလို့လေ လို့ ရွှီးလိုက် တယ်၊ အင်တင်တင် နဲ့ သိပ် မကျေနပ်ပေမဲ့ ကျနော့် ဆီက ဒီထက် ပိုထွက်လာမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိတော့ ဆက်မမေးတော့ ဘူးဗျ၊ အဟီး။ အဲ ခိုဇားမား နဲ့ အကြောင်းပြန်ဆက်ရအောင်ဗျာ၊ တနေ့ မှာ ကျနော် တို့ နှစ်ယောက်ပဲ ရုံးမှာ ကျန်တော့တယ်၊ အကုန်လုံး အလျိုအလျို လစ်ကုန်ကြပြီ ၊ နောက်နေ့ က စနေပိတ်ရက် ဆိုတော့ ကျနော်လည်း ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး ၊ သူ့ ကိုလည်း ပြန်ရင် ပြန်တော့လေ လို့ပြောပြီး ကျနော်က ကျနော့် ရုံးခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာပြီး လုပ်စရာရှိတာလုပ်နေလိုက်တယ်၊ နောက် နည်းနည်း ပျင်းလာတာနဲ့ ကျနော့် ဗမာအီးဘုတ်ကော်လက်ရှင်း တွေ ဒရော့ဘောက်စ် ထဲ ထည့ထ်ားတာ ပြန်ဖွင့်ပြီး ဖတ်နေလိုက်တယ်၊ ဒီနေ့ ညက မြနှင်းဆီ လည်း အိမ်မှာ ရှိမှာ ဆိုတော့ အရေးတကြီး ပြန်စရာ လည်း မလိုဘူး၊ နောက် အခု ကျနော့် အလုပ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ ကိုလည်း ပြောပြ ထားတာ ဆိုတော့ မြနှင်းဆီ လည်း သဘောပေါက်တယ်လေ။ ကျနော် စာတွေ ဖတ်ပြီးဖီး တက် လို့ ညီတော်မောင်က ဘောင်းဘီထဲ မှာ မာကျော နေပြီ၊ အဲဒီ အချိန်မှာ ခိုဇာမား ကျနော့် အခန်းထဲ ဝင်လာတယ်။ .. .ဟင်.အခု သူက ငါ့ သား ဘေ့စ်ဘော ပွဲ မပြီးသေးလို့တ. .ဲ့ .ဟင့်အင်း ရပါတယ်.ငါ့ကို အပြန် လိုက်ပို့ပေးလို့ ရမလား.နင် ဒီနေ့ ကားမမောင်းလာဘူးလား..ရတာပေါ့ ..ငါ့ကား ဆားဗစ် လုပ်နေလို့ မနက်က ငါ ကားကြုံနဲ့ လိုက်လာတာ၊ အာမက် လာကြိုမယ် လို့လုပ်ထားတာ........
......အစ်စ် အိုကေ..ရ တယ်လေ အချိန်ရပါတယ်၊ ငါ့သား ဘေ့စ်ဘောပွဲ က ကြာတတ်တယ်၊ ပွဲပြီးရင်လည်း သူတို့ သားအဖ က တခုခု ဝင်စား ကြအုန်းမှာ၊ ငါ လည်း တခုခု စားမယ် နောက်ကျ မယ်လို့ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်..ကေဇီ နင် အချိန် ရ မလား ငါလည်း ဗိုက်ဆာလို့ တခုခု စားရအောင်၊. ..... အဲဒါနဲ့ ကျနော် လည်း ဖရီးဝေး ကို မတက်သေးပဲ စားသောက်ဆိုင် တွေ ရှိတတ်တဲ့ ဘက်ကို မောင်းလာခဲ့ တယ်၊ ဘလက်အန်းဂတ် စတိတ်ဟောက်စ် တွေ့တာနဲ့ ကားပါတ်ကင်လော့ထဲ ချိုးဝင်လိုက်တယ်၊ နောက်မှ ချက်ချင်း တခုကို သတိရသွားပြီး၊ ......... .သိုင်းကျူ.... ... ကျနော်လည်း ကွန်ပြူ ပိတ် ကျနော့် လက်တော့ သိမ်း၊ ပြီး ခိုဇားမား နဲ့ ထွက်လာခဲ့ကြတယ်၊ လမ်း မှာ ကားမောင်းနေရင်းက ကျနော် လည်း ဗိုက်ဆာလာလို့၊ .ငါလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ၊ နင်တို့ အိမ်က ငါ သွားမဲ့ လမ်းနဲ့ သိပ် မဝေးပါဘူး. ကျနော်တို့ ဆိုင်ထဲ ဝင်လိုက်တော့ နှစ်ယောက် ဆိုတော့ ဘု ယူမလားဆိုတော့ အိုကေ လို့ပြောလိုက် တာ၊ အခန်းထောင့် ချောင်ကျကျ တနေရာက ဆိုဖာအဝိုင်း နဲ့ စားပွဲ ဝိုင်းလေး တခုရတယ်၊ စားပွဲခုံက အဝိုင်း၊ ဆိုဖါက ပစောက်ပုံ တဆက်ထဲ အခန်းထောင့်လေး မှာ ဘေးမှာက နံရံ နဲ့ ဆိုတော့ တော်တော် လေး လွတ်လပ်ပါတယ်၊ ကျနော့် အတွက် ဘီယာမှာလိုက် ပြီး သူ့ ကို တော့ သူလိုချင်တဲ့ အိုက်စ်တီး ပဲ မှာပေးလိုက်ပါတယ်၊ စားပွဲထိုးကောင်မ လေးက ကျနော်တို့ သောက်စရာတွေ အရင်လာချပေးပြီး ကျနော်တို့ မှာလိုက်တဲ့ စားစရာတွေ သွားပြင်ဆင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်သား ခန ငြိမ်နေကြပါတယ်၊ ကျနော်က ခိုဇားမား ရဲ့ မျက်နှာသိပ်မကောင်း လို့၊ အာယူအိုကေ လို့ မေးလိုက်တော့ ၊ ခိုဇားမား ရုတ်တရက် မျက်ရည်တွေ ကျလာပါတယ်၊ ကျနော်တို့ ဆိုဖါက တဆက်ထဲ ဆိုတော့ ကျနော်က သူ့အနားကို အမြန်ဖင်ဒရွှေ့ နဲ့ ရွှေ့ သွားပြီး ပုခုံးလေး ကိုကိုင်လိုက်တာနဲ့ သူက ကျနော့် ရင်ဘတ်ကို မျက်နှာအပ်ပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချပါ တော့တယ်၊ ကျနော်လည်း သူငိုနေတာ အားရ အောင် အသာ လွတ်ပေးထားလိုက်ပြီး သူ့ကျော်ပြင်လေး ကိုပဲ ပွတ်ပေးနေမိပါတယ်၊ သူလက်မောင်းသားလေး တဘက်ကို လည်း လက်တဘက်က ထိန်းကိုင်ပေးထားရတော့ ၊ သူ့ နူးညံ့လှတဲ့ အထိအတွေ့နဲ့ မိန်းမ အနံ့ လေး က ကျနော့် ညီတော်မောင် ကို တဖြေးဖြေး ချင်း မာလာ စေခဲ့ပါတယ်၊ စောက်ကောင် သူများ ဝမ်းနည်းနေ တာကို တောင် လီးကတောင် ချင်သေး တယ် လို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ်တောင် ကျိန်ဆဲ မိပါသေးတယ်၊ အဟီး တကယ်ပါ၊ နောက် တော့ ငိုလို့ အားရ သွားလို့ ကျနော့် ရင်ဘတ်က သူ့ မျက်နှာခွာလိုက်မှ ကျနော်က စားပွဲ ပေါ်က တစ်ရှုးလေး တွေ ယူပေးလိုက်ပါတယ် သူက မျက်ရည်တွေ ကို ဖွဖွလေး သုတ်ရင်း ၊ ….အော် ကေဇီ ငါ အခု မှ သတိရတယ်၊ နင်က ဟာလာသား မှ စားတာ မဟုတ်လား......ဆောရီး... .ဟင့်အင်း မဟုတ်ပါဘူး ၊ တတ်နိူင်ရင်တော့ ဟာလာကို ပရီဖားလုပ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ရတယ် ငါ ဒီက စတိတ်ကို ကြိုက်ပါတယ်. ….
အဟမ်း..ခနနေတော့မှ သူက စပြောပါတော့တယ်၊ သူတို့ အိမ်ထောင်ကျကျ ခြင်း မှာ သမီးတယောက် မွေး ခဲ့ တော့အခု ဆိုရင် သမီးက ဟိုက်စကူးမှာ ရောက်နေပြီပေါ့၊ နောက် သမီးနဲ့ ၈နှစ်လောက် ခြားပြီးမှ သားကို မွေးလာခဲ့တယ်၊ သားလည်း မွေးပြီးရော အာမက် ( သူ့ယောက်ကျား ) က သူ့ အပေါ် လုံးဝကို ဂရု မစိုက်တော့ဘူး တဲ့၊ သားနဲ့ ပဲ တချိန်လုံး ပဲ၊ ပထမ နှစ်ပိုင်းတွေကတော့ သူလည်း ပျော်တာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ သားလေး ကျောင်းစ နေပြီး နောက်ပိုင်းကျတော့ အာမက် က ပိုဆိုးသွားတယ်၊ သူ့ ကိုတောင် အလေးကို မထားတော့တာတဲ့ ၊သူ လည်း သားကို ချစ်တာ ပေမဲ့ သွေးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့ ကိုယ်၊ ဆိုတာ့ အိပ်ယာထဲ မှာ တောင်းတ မိတာပဲ တဲ့ ၊ အာမက် က သူ့ ကို တောင် ဖက် မအိပ်တော့ဘူးတဲ့၊ အဲ တော့ မှ ကျနော်လည်း သိရတော့တယ် အာမက် က ခိုဇားမား ကိုယူတဲ့ အချိန်မှာ ခိုဇားမား က ၁၆ နှစ် အာမက် ၃၆ နှစ် ရှိပြီ ဆိုပဲ၊ ဆိုတော့ အခု ခိုဇားမာက ၃၂ ဆိုတော့ အာမက်က ၅၂ လောက်ပေါ့၊ အင်း ကျနော့် စိတ်ထဲ မှာတော့ အာမက် က သူ ကောင်းကောင်း မပေးနိူင်တော့ တာကို သားပေါ်မှာ ဂရုစိုက်လို့မိန်းမ ကို စိတ်မဝင်စားတော့ သလိ၊ု လုပ်နေတာများလား လို့ သံသယ တော့ ဖြစ်မိတယ်၊ . လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်၊ ..အဟမ်း....... ကျနော်က ပြောပြော ဆိုဆို နဲ့ သူ့ မျက်နာနားကို ကပ်ပြီး မျက်လုံးချင်းတေ့တေ့ ဆိုင်ဆိုင် ကြည့်လိုက်ပါတယ်၊ သူ့ မျက်လုံးအစုံ က ရွမ်းလက် နေ ပြီး အသနားခံ သလို ၊ စိတ်ခေါ် သလို မျိုး မို့ ကျနော် က သူ့ နူတ်ခမ်းလွှာကို တခါထဲ ဖမ်းစုပ် နမ်း ပစ်လိုက်ပါတယ်၊ သူကလည်း ကျနော့် လည်ဂုတ်ပေါ် လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ခိုပြီး ပြန်နမ်းလာသလို ကျနော့် လက်တွေကလည်း သူ့ ခါးကျင်ကျင် လေးကို ထိန်းကိုင်လိုက်မိပါတယ်၊ . စားစရာတွေ ယူလာတဲ့ စားပွဲထိုးမလေး ရဲ့ ချောင်းဟန့်သံကြောင့် ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ကမန်းကတန်း ကိုယ်ချင်း ခွာလိုက်ကြပြီး ၊ မချိုမချဉ်နဲ့ ကြည့်ရင်း စားစရာတွေ ချပေးနေတဲ့ စားပွဲထိုးမလေး ကို ရှက်ပြုံးပြုံး ပြလိုက်ရင်း၊ သိုင်းကျူး ပြောလိုက်ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ စားသောက်ပြီး အဲဒီ စားသောက်ဆိုင်က ထွက်လာပြီး ကျနော့် ကားပေါ်ရောက်တော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ရမက်ပြင်းပြ တဲ့ အနမ်းတွေ နဲ့ နမ်းဖြစ်ကြပါတယ်၊ ကျနော့် လက်တွေကတော့ အကျင့်ပါပြီးသား မို့ သူ့ရဲ့ ဖြိုးအိ လှတဲ့ ရွှေရင် အစုံကို အင်္ကျီအပေါ်က ပဲ ဆုပ်ကိုင် ပေးနေပြီး၊ ကျနော် မျက်စေ့ကျ နေခဲ့ရဲ့တဲ့ သူ့ ဖင်ကြီး တွေကို လည်း ဆုပန်ယ် ပေးမိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီည အဖို့ မိုးချူပ် နေပြီ မို့၊ သိပ် အချိန် ဆွဲ လို့ မရ ပဲ၊ သူ့ အိမ်ကို ကားမောင်း လိုက်ပို့ပေးလိုက်ရပါတယ်၊ သူ့ အိမ်ရောက်တော့၊ အာမက် တို့ သားအဖ လည်း ရောက်နေကြပြီ ဆိုတော့၊ ကျနော်လည်း အောက်ဆင်း မနေတော့ပါဘူး၊ ခိုဇားမား ကို ကျနော့် ဟမ်မာပေါ် မှာပဲ အနမ်းခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး တွေ ပေးပြီး ဂွတ်နိူက်လုပ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ .အာယူ ခရေဇီ... ..ကေဇီ နင့်လို ဒီလောက် ချောပြီး ဆက်ဆီ ဖြစ်တဲ့ မိန်းမ တယောက်ကို အာမက် က ပစ်ထားတယ် ဆိုတာ ဒီကောင် ရူး သွားလို့ ပဲ နေမှာပဲ ….. ဦး နင်တကယ်ပြောတာလား ငါစိတ်ချမ်းသာ အောင် ပြောနေတာ မဟုတ်လား ငါ့ လို ခလေး နှစ်ယောက် အမေ ကို ဘယ်သူက စိတ်ဝင်စားတော့ မှာလဲ ….
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မြနှင်းဆီ ကအိပ်မောကျ နေပြီ ဗျ၊ ကျနော့် မှာ ခိုဇားမား နဲ့ တင်းလာခဲ့ရ တာ ဖြေဖျောက်ဖို့ လိုနေပြီလေ၊ နို့မို့ ဆို ဘယ်လို အိပ်လို့ရတော့မှာလဲ၊ ဗမာပြည် တုန်းက ဦးလေး သူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်း နောက်လေ့ရှိတဲ့ နိူးဆော်စာ လည်း ပါမလာတော့ နည်းနည်း တော့ ခက်နေတယ်၊ စကားစပ်တုန်း ခေတ်လူငယ် တွေ မသိမှာစိုးလို့ ရှင်းပြလိုက်အုန်းမယ်၊ အရင်ခေတ်က လူကြီးတွေ အပေါင်းအသင်း တွေနဲ့ မူးယစ်ပျော်ပါး ပြီး အိမ်ပြန်လာရင် မိန်းမ အိပ်ပျော်နေတာကို အတင်းနိုး လုပ်ရင် မကောင်းတတ်လို့၊ ခေါက်ဆွဲ ကျော်၊ ထမင်း ကျော် အစရှိတာလေး ဝယ်သွားပြီး ၊ အိမ်ရောက်ရင် မိန်းမ ကို နိူး၊ မိန်းမရေ မင်း အတွက် ငါ စားစေချင်လို့ ခေါက်ဆွဲ ကျော်၊ ထမင်းကျော်လေး ဝယ်လာတယ် လို့ဆိုပြီး နိုးရတယ်တဲ့၊ မိန်းမက ငါ့ယောက်ကျား ငါ့တကယ်ချစ်တာ ပါလား ဆိုပြီး မေတ္တာ တွေ လည်း ယိုဖိတ်လို့၊ နောက် ခေါက်ဆွဲကျော် လေး ထစား လိုက်တော့လည်း မျက်လုံးလေး ကျယ်၊ ဗိုက်ကလေး တင်း သွားပြီ ဆိုရင် ရယ်ဒီ ဖြစ်ပြီ ပေါ့၊ အဟီး၊ အဲဒါကြောင့် အပေါင်း အသင်း တွေ နဲ့ သောက်စား မူးယစ်ပြီး အိမ်ပြန်ခါနီး ဆိုရင် ၊ နိူးဆော်စာ လေး ဆိုပြီး ဝယ်ဝယ်သွား ကြလေ့ရှိတယ်တဲ့ ဗျ၊ အဟီး၊ ဒီမှာတော့ အဲ လို သွားကျွေးရင် ဖနှောင့်နဲ့ အပေါက်ခံရ မှာဗျ၊ သူတို့ က တတ်နိူင်ရင် ညနေစာတောင် မစားကြဘူး၊ အဟီး စားရင်လည်း နည်းနည်း ပဲ ၊ အိပ်ခါနီး စားရင် အစာမကြေ ပဲအဆီတိုးတာတို့ ၊ ဘိုက်ခေါက်ထူလာမှာတို့ ကို ကြောက်တယ်လေ၊ အဟီး။ မတတ်နငိူ်ဘူး၊ အင်းကျီဘောင်းဘီချွတ် ပြီး ပီဂျေ လေး လဲ ပြီး ကုတင်ပေါ်တက် မြနှင်းဆီ ခြုံထားတဲ့ ကွန်ဖော့တာ အောက် အသာတိုးဝင်လိုက်တယ်၊ ကိုယ့်ကွန်ဖေါ့တာ ( ဗမာ အသုံအနူန်း ဆိုတော့ စောင် ပေါ့ဗျာ ) လေး လှန်ပြီး ကိုယ့်မိန်းမ ကိုယ် အသာ လေ့လာလိုက်တယ်၊ အား၊ မြနှင်းဆီကလည်း ကျနော့် ကို ကျောပေးပြီး တစောင်းလေး အိပ်နေတာ၊ ညဝတ်အင်္ကျီမရမ်းစေ့ရောင် ပိုးသား ချောချောလေးနဲ့ ပေါင်ရင်းလောက်ပဲ ရောက် တဲ့ဟာလေး၊ ဟိုတခါ သူ့ ညီမ ဇီဇဝါ ယူဝတ် တဲ့ ဒီဇိုင်း မျိုး အရောင်ပဲ ကွာတာ၊ ဒါပေမဲ့ သူ့ဖင်က ဇီဇဝါထက် ကြီး တော့ သူ့ခါးလေးကနေပြီး ကားတက် နေလိုက်တာ၊ တကယ့တ်ွံတေးအိုးကြီး လိုပဲလေ၊ အဟီး၊ အခုနလေး က မှ ခိုဇားမား နဲ့ သွေးပူ ခဲ့ထားလို့လား မသိဘူး ကိုယ့်မိန်းမ ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရ တာတောင် သွားရည် တောက်တောက် ကျလာတယ်၊ ကျနော့် ညဝတ်ဘောင်းဘီ ကို လျှောချပြီး ချွတ်လိုက်တော့ ညီတောင် မောင် က မာတင်း တောင့်နေပြီ၊ မြနှင်းဆီ ရဲ့ ညဝတ်အင်္ကျီအောက်နားလေးကို အသာလေး မပြီး သူ့ဖင်လုံးကြီး တွေ ပေါ်သွားတဲ့ အထိ လှန်တင်လိုက်တယ်၊ အဲဒါက စောင်အောက်မှာ လုပ်နေတာ စောင်ကို ဆွဲ မလှန်ရဲလူး၊ တော်ကြာ ချမ်းလိုက်တာ ဆ်ိုပြီး ထပွမ် နေမှာ စိုးလို့၊ အဟီး၊ နောက်တော့ ကျနော့် ကောင်ကြီး ကို အသာလေး သူ့ ဖင်နှစ်လုံးကြား အောက်ကနေပြီး ဖြေးဖြေးချင်း သွင်း လိုက်တယ်၊ ကျနော့် ကောင်ကြီးက ပဲ တအားနွေး နေလို့ လား မသိ၊ သူ့ အသားတွေ က နည်းနည်း အေးအေး လေးလိုပဲ၊ သူ့ပေါင်ခွဆုံထဲ ရောက်သွားမှ နွေးသွားတယ်၊ သူ့ ပင်တီက လည်း ပါးပါး ပျော့ပျော့လေး၊ သူ့ ဖင်လုံးကြီးကို ကျနော့်ပေါင်ခြံ ဖိမိတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော့် ကောင်ကြီးက သူ့ စောက်ဖုတ်ပေါ်မှာ ပင်တီ အသားလေး ခံပြီး အမြှောင်းလိုက်ကပ်နေပြီ၊ ကျနော်က အသာလေး ဖင်ကို ကော့ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးတော့ ကျနော့် ကျနော့် ညီတော်မောင် ရဲ့ ခေါင်းက သူ့ စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်း ကို ပင်တီ ပေါ်ကနေ ပဲ ပွတ်ပေးနေသလို ဖြစ်နေတာပေါ့၊ သူ့ဆီက ပဲ ထွက်ကျ နေတာလား၊ ကျနော့် လီးထိတ်က ပဲ ရှေ့ပြေး အရည်ကြောင့်ပဲ လား မသိ၊ စိုတိုတို ခံစားနေရတယ်၊ အဲလောက် မှာတော့ သူလည်း လူးလွန့် လာပြီလေ၊ မြနှင်းဆီက သူ့ ဖင်ကြီး ကို အနောက်ဘက်ကော့တင် ပေးလိုက်တယ်၊ သူ့ လက်တွေက ကျနော့် ခေါင်းကို နောက်ပြန်စမ်းပြီး လှမ်းပွတ်ပေးနေတယ်၊ ကျနော်က အခြေနေ ကောင်းတာ တွေ့ ရတော့ သူ့ ညာဘက်ပေါင်လုံးကြီးအောက်ကို ကျနော့် ညာဒူးနဲ့ ထိုးပြီး တပေါင်ကျော် ဖြစ်အောင် လုပ် လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့မှ ကျနော့် လက်တဘက်နဲ့ သူ့ ပေါင်ခွဆုံ ကို စမ်းပြီး သူ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ရဲ့ ပေါင်ရင်း က အလက်စတစ်မျှော့ကြိုးလေး ကို ဆွဲ မပြီး ကျနော့် ကောင်ကြီးကို ထိုးထည့်လိုက်တယ်၊ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ ဆွဲချွတ်ရင် လူက ပုံစံတွေ ပြောင်း သူ့ကိုလည်း ဟိုလှည့်ဒီလှည့် လုပ်ခိုင်းနေရ အုန်းမှာ ဆိုတော့ အဲဒီနည်း က အကောင်းဆုံးပဲလေ အခု က အဟီး။ ကျနော့် ကောင်ကြီးက သူ့ ဘောင်းဘီခြေထောက်ပေါက် ကနေပဲ ဝင်သွားပြီး အဖုတ်ဝ ကိုလည်း တန်းရောက် သွားတာပဲလေ၊ လင် မယားလုပ်လာတာလည်း ကြာပြီ ဆိုတော့ အထာသိနေပြီလေ၊ ခနလေး နဲ့ ပဲ ကျနော်တော့ နှစ်ယောက် တပေါင်ကျော် ပုံစံ နဲ့ အရှိန်ပြင်းပြင်း လိုးနေကြပြီလေ၊ ကျနော့် စိတ်ထဲ မှာတော့ ခိုဇားမား ရဲ့ ဖင်ကြီးတွေ မြင်နေပြီး ခုလို တပေါင်ကျော် လုပ်နေရတာ အားမရ တော့ဘူး အစွမ်းကုန်ကြမ်းချင်လာတယ်၊ အဲဒါနဲ့ မြနှင်းဆီ ခါးလေး ကို ကိုင် ပြီး ကိုယ်လုံးကို .
.. .......မှောက်ရက် လုပ်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့ သူက လည်း အထာပေါက်တယ်လေ၊ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပြီး ကော့ပေးလာတယ်၊ ချက်ချင်း ပဲ ကျနော်က သူ့နောက် မှာ မုဆိုးထိုငန်ဲ့ သူက ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပုံစံ ဖြစ်သွားတယ်၊ ကျနော် မျက်စေ့ကို စုံမှိတ် ပြီး မြနှင်းဆီရဲ့ ခါးလေး ကို ကိုင် ဆွဲက တဖုန်းဖုန်း နဲ့ ကို ဆောင့်မိနေတော့တယ်၊ စိတ်ထဲ မှာ ခိုဇားမား ရဲ့ ဖင်ကြီးကို မှန်းပြီးတော့ ပေါ့၊ အဲဒီ ပုံစံနဲ့ သိပ် မကြာပါဘူး မြနှင်းဆီ လည်း ဖင်ကြီး ကော့ကော့တက်လာ ကျနော်က လည်း ဖိဖိ ဆောင့်ဆိုတော့ ကျနော့် လီးကြီး က စက်သနတ် ပစ်သလို သုတ်ရည်တွေ မြနှင်းဆီ စောက်ခေါင်းထဲ တထုတ်ထုတ် ပစ်ထုတ် လိုက်ရပါတော့တယ်။ တနင်္လာနေ့ ရုံးပြန်တက်တော့၊ ခိုဇားမား နဲ့ ကျနော် မျက်လုံးချင်း ဆုံမိကြတဲ့ အချိန် မှာ သူ့ မျက်လုံး လှလှ လေး တွေက အရည် ရွမ်းလဲ့ နေပြီး နူတ်ခမ်း လေးတွေက ပြုံးယောင်သန်းနေတယ် လို့ ကျနော် ထင်မိတယ်၊ ကျနော်က သူ့ ကား အခြေအနေ မေးကြည့်တော့၊ မရသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်၊ သူတို့ မှာထားတဲ့ စပယ်ရာပတ်စ် မရောက်လာသေးလို့တဲ့၊ ဒီညနေလည်း အာမက်က သူ့ အလုပ်က နောက်ကျ မှာမို့ လာမကြိုနိူင် ဘူးလို့ ပြောပါတယ်၊ ကျနော်က ငါ လိုက်ပို့ပေးမယ် လို့ပြော လိုက်တော့ ၊ ကျေးဇူးပဲ တဲ့၊ ညနေစာတော့ မစားတော့ ဘူးနော် လို့ နောက်သလို ပြောင်သလိုနဲ့ ပြောပါတယ်၊ ကျနော်က လည်း စားချင်ရင် အချိန်မရွေးပါလို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကျနော် က တော်ကြာ ရုံးက လူတွေ ဘာညာကွိကွ တွေ ပြောနေကြမှာ စိုးလို့ ၊ ခိုဇားမား ကို နင် ဘူတာရုံ လမ်းကွေ့ နားက စောင့် ငါလာခေါ်မယ် လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်၊ သူလည်း သဘောပေါက်ပါတယ်။ အတိုချုံးရရင်တော့ ကျနော် ရော သူရော ဒီနေ့ တော့ ရုံး ကို ပုံမှန် အချိန် ဆင်းကြတယ်ပေါ့ဗျာ၊ အဟစ်၊ ကျနော့် အိပ်ချသရီး ကို ကွေ့လိုက်တာနဲ့ လမ်းထောင့်မှာ ရပ်နေတဲ့ ခိုဇားမား ကို တွေ့ရတယ်၊ သူကားပေါ် ရောက်တော့ အချိန်ရလား၊ တခုခု သွားစားရအောင် ဆိုတော့၊ သူ့ အိမ်လိုက်ခဲ့ပါလား စားစရာ တချို့ရှိတယ်၊ သူတို့ ရိုးရာ စာ ချက်ထားတာ ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲ ဒါနဲ့ သူတို့ အိမ်ရောက်သွားရော ဆိုပါတော့ဗျာ၊ အိမ်က တော့ တထပ်အိမ်လေး ပါပဲ၊ ဘေးမှာ ကားဂို ထောင်လေး တွဲရက်နဲ့ ကျနော့်ကားကို ကားဂိုထောင် ရှေ့က ကွန်ကရစ် ဒရိုက်ဝေး မှာပဲ ရပ်လိုက်တယ်၊ .အော် ကေဇီ ရော၊ ကို လိုက်ပို့ပေးရမလား ၊ အားမနာနဲ့နော် လိုက်သွားချင်တယ် ဆိုရင်.အင်း တော်တော် နဲု့ ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ သူ့ အမ မွေးနေ့ မို့ သားကျောင်းကြိုပြီး အဲဒီတန်းသွားမှာလေ. .ဟင့်အင်း၊ သူ့ အဲဒီ အမနဲ့ ငါနဲ့က မတည့်ဘူး၊ အဲဒါကြောင့်သူလည်း ငါ့ကို မခေါ်တာ ငါလည်း မလိုက်ချင်ဘူး၊ သားကတော့ သူ့ ဒေါ်ကြီး မို့ လိုက်ရမယ် ဆိုပြီ သူအတင်းခေါ်သွားတာ. ကျနော့် စိတ်ထဲ မှာတော့ ဟ၊ ပွပြီဟ၊ တော်သေးတယ် စားသောက်ဆိုင် သွားစား အချိန်ဖြုန်းတာထက် စာရင် အိမ်မှာ က ပို အခွင့်အရေးရတာပေါ့ လို့တွေးနေမိတယ်၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် အိမ်ထဲ ဝင်ပြီးလို့ ခိုဇားမား က သူ့ အိမ်တံခါးကို ဂလန့် ထိုးလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ပဲ ကျနော်က အနောက်ကနေ သူ့ကိုယ်လုံး ကို သိမ်းကျုံးဖက်လိုက် ပါတယ်၊ ကျနော့် မာတောင်နေတဲ့ ကောင်ကြီး က သူ့ ဖင်ဆုံကြီးကို အိကနဲ ထောက်မိပါတယ်၊ ကျနော့်ဘက်လှည့်လာတဲ့ သူ့မျက်နှာလှလှလေး ပေါ် ကို အနမ်းမိုး တွေ အဆက်မပြတ် ချွေပေးပြီး နူတ်ခမ်းလုံးလုံးထူထူ လေး တွေကို ..အာမက် ကား မတွေ့ ပါလား အိမ်ပြန် မရောက်သေးဘူးထင်တယ်... .
ကျနော့် နူတ်ခမ်းတွေနဲ့ ဖိကပ် စုပ်ယူလိုက်တော့ သူလည်း အငမ်း မရ တုန့်ပြန်လာပါတယ်၊ကျနော်က သူ့ရဲ့ ချိုမြိန် လှတဲ့ နူတ်ခမ်းလေး တွေကို ငုံစုပ်ရင်း သူ့ရဲ့ အိစက်နေတဲ့ ဖင်ကြီး တွေကို အားရ ပါးရ ဆုပ်နှယ်နေမိတယ်၊ သူ တို့ အိမ်က ဝင်ဝင်ခြင်း မှာပဲ ဧည့်ခန်း ဆိုတော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ပွေ့ရင်း ဖက်ရင်းနဲ့ ဧည့်ခန်း အလယ်က ဆိုဖါပေါ် ရောက် သွားကြတယ်။ တကယ်တမ်း ဖက်မိတော့မှ သူ့ကိုယ်လုံးက တော်တော်လေး ထူထူ ထဲထဲ ပါလား ဆိုတာသိရတယ်၊ လက်မောင်းတွေ ခြေသလုံးတွေ လည်း နည်းနည်းတော့ တုတ်တုတ်လေး ဗျ၊ သူ့လက်တွေက ကျနော့် ခါးပါတ်ကို ဖြေနေသလို၊ ကျနော်ကလည်း သူ့ စကဒ်က ဇစ်ကို ဆွဲချနေတယ်လေ၊ သူ့စကဒ်ရော အတွင်းခံရော ကျွတ်သွားတော့ သူ့ပေါင်လုံးကြီး တွေက တုတ်တာပဲ၊ ကျနော် လုပ်ဖူးသမျှထဲ မှာ ပေါင်လုံး အကြီး ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ စကဒ်ဝတ်ထားတော့ သိပ်မသိသာဘူး၊ ဖင်ကြီးက တော့ ကြီးတာ သိသာတယ်၊ စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း အမွှေး တွေ ပြောင်နေအောင်ရိပ်ထားလို့ ပြောင်ပြီး ထင်းနေတယ် ကျနော့် လက်ဖဝါးက သူ့ စောက်ဖုတ်ကြီးပေါ် အုပ်ကိုင်လိုက်တော့ စိုတိုတို ဖြစ်နေပြီ၊ ကျနော့် လက်ချောင်းထိပ်တွေနဲ့ သူ့ အဖုတ်နူတ်ခမ်းလေး တွေကို ပွတ်သပ်ရင်း စောက်စေ့လေး ကို လက်ခလည်ထိပ်ကလေး နဲ့ဖိပွတ်ပေးနေမိတယ်၊ သူ့ လက်တွေက လည်း ကျနော့်ကောင်ကြီး ကို ကောင်းကောင်း ပွတ် ပြီး ကိုင်နေပြီလေ၊ နောက်တော့ ကျနော့်ကို ဆိုဖါပေါ် ထိုင်နေရက်ထားလိုက်ပြီး သူက ဆိုဖါအောက် ဆင်း ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်ရင်း ကျနော့် အလံတိုင်ကြီး ကို ဒစ်ဖျားကနေ ငုံ စုပ်လိုက်တယ်၊ ကျနော်လည်း ထိုင်နေရက် ဆိုတော့ အားနေတဲ့ လက်တွေက သူ့ အင်းကျီ အနောက်က ဇစ်ကို ဆွဲချပြီး ဘရာဇီယာ ဂျိတ်ကို ပါဖြုတ်ချလိုက်တယ်၊ အကုန်ကျွတ်သွားတော့ သူက ကျနော့် ဒစ်ကို ငုံစုပ်နေရာကနေပြီး ကိုယ်ကို မတ်၊ လက်နှစ်ဖက်မြှောက်ပေးတာနဲ့ အင်းကျီရော ဘရာဇီယာပါ တခါထဲ ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တော့ တယ်၊ နောက် သူလည်း ပြန်ငုံ့ပြီး ကျနော့် ဒစ် ကို လည်း စုပ်ရော ကျနော်က သူ့ ကျွဲကော်သီးလောက် နိူ့ကြီး တွေကို ကောင်းကောင်း ဆုပ်နှယ်ပေးပါတော့တယ်၊ သူကလည်း လီးစုပ်ရတာ တော်တော် ဝါသနာ ပါလားမသိဘူးဗျာ၊ ကောင်းလိုက်တာ ကျနော့် လီးကြီး တချောင်းလုံး သူ့ အာခံတွင်းက ပူနွေးနွေး နဲ့ ကောင်းလှ သလို၊ တစစ်စစ် စုပ်ပေးနေလို့ သေးပေါက် ချင်လာလောက်အောင်ကို ကောင်းပါတယ်ဗျာ၊ ပထမဆုံး အချီကိုတော့ ကျနော်က သူ့ ပါးစပ်ထဲ မပြီးချင် လို့ သူ့ ပုခုံးလေး ကို တွန်းပြီး နောက်ဆုတ်ခိုင်း လိုက်ရတယ်၊ သူက အလိုက်သိပါတယ်၊ ဆိုဖါပေါ် ပက်လက် လှဲလိုက်တဲ့ ကျနော့် ပေါ်ကို တက်ခွပြီး ဆောင့် ကြောင့ထ်ိုင်လိုက်တယ်၊ ကျနော့် ထောင်မတ်နေတဲ့ လီးကြီးနဲ့ သူ့ရဲ့ ပြောင်ချောဖောင်းတင်း နေတဲ့ အဖုတ် ကြီးက တည့်နေတာပေါ့၊ သူက ကျနော့် လီးကြီးကို သူ့လက်တဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်၊ ပြီး သူ့ အဖုတ်ဝမှ တေ့ပေးရင်း ဖြေးဖြေးခြင်း ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်၊ ကျနော့် ရဲ့ မာတင်း နေပြီ ဖြစ်တဲ့ လိင်ချောင်းကြီးက ပူနွေးစိုစွတ် တဲ့ ခိုဇားမားရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို ဖြေးဖြေးချင်း ဝင်သွားတော့တယ်ဗျာ၊ ကျနော့်ကို ပြုံးပြုံးလေး ကြည့် နေတဲ့ ခိုဇားမား တယောက် ကျနော့်လိင်တန်ကြီး ဆုံးခါနီး လောက်မှာ နည်းနည်း လေး မျက်နျာရှုံ့ သွားတယ်၊ နောက်တော့ သူ့ဖင်ကြီးတွေကို ပြန်ကြွလကိုတယ်၊ ကျနော့် လိင်တန်ကြီးမှာ သူ့ စောက်ဖုတ်အတွင်းသား တွေ ပွတ်ဆွဲ သွားလိုက်တာ၊ အဟီး ကောင်းလိုက်တာဗျာလို့ ပဲ ပြောပါရစေတော့၊ ကျနော့် လီးကြီး သူ့ အဖုတ်ထဲက ကျွတ်မထွက်ခင်လေး မှ သူက ပြန်ထိုင်ချတယ်၊ ဖြေးဖြေးချင်း ပါပဲ၊ အဲလို သူ့ဖင်ကြီးတွေ ထိုင်ချလိုက် ကြွလိုက်နဲ့ ကျနော့် လီးကြီး သူ့ အဖုတ်ထဲ ဝင်ထွက်နေတာ အသားကျလာတော့ နည်းနည်း အရှိန်ရပြီး မြန်လာတယ်၊ ကျနော့် ဆီးခုံနဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးလည်း တဖြေးဖြေး နဲ့ တဖတ်ဖတ် ရိုက်လာတယ်၊ သူက နောက်တော့ ကျနော့်ပုခုံးတဖက်တချက်ပေါ်မှာ လက်နှစ်ဘက်ကို ထောက်၊ ကျနော့်ပေါ် မှောက်လိုက်ပြီးမှ ဖင်ကြီးတွေကို ပဲ ကြွပြီး ကျနော့် ကို တဖတ်ဖတ် ဆောင့်တော့တာ၊ ကျနော်လည်း ဒီတခါမှ မိန်းမ တယောက်က ကိုယ့်ကို လိုးဆောင့်တာ ခံရဘူးတော့တယ်လို့ ပြောရမယ်၊ သက်သာလိုက်တာဗျာ၊ ကောင်းကလည်း ကောင်း၊ ဒါပေမဲ့ သိတယ် မဟုတ်လား ကိုယ်က ပဲ တချိန်လုံးဆောင့်ခဲ့တာ ဆိုတော့ အားမရ ပါဘူး အောက်ကနေလဲ ကော့ကော့ ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်၊ ဖုတ်ဖတ် စွိစတ် ပေါ့၊ မကြာပါဘူး သူရော ကျနော်ရော အရှိန်ကောင်းလာ ယားလာကြပြီး ကာမ အရသာ အထွတ်အထိတ်ကို ရောက်သွားကြတာပေါ့ဗျာ။ သူလည်း ပြီးသွားတော့ ကျနော့် ကိုယ်ပေါ်ကို မှောက်ရက်ကျ လာပြီး ဖက်ထားရင်း နားနေတယ်၊ ကျနော်လည်း သူ့ကို ဖက်ထားရင်း လက်တဘက်ကမှ သူ့ဖင်ကြီးတွေကို ကိုင်လို့ကောင်းကောင်း နဲ့ လက်ဝါးတဘက်နဲ့ ပွတ်သပ် ပြီး ဆုပ်နှယ်နေမိတယ်။ .
ဒါနဲ့ ခိုဇားမား နင့် နာမည်က ရိုးရိုးနာမည် ပဲလား ဒါမှ မဟုတ် အဓိပ္ပါယ်ရှိသလား..ဟေ့..ဲ ..ခိုဇားမား ဆိုတာ အာရေဗစ် လို လဗန်ဒါ (Lavender) ကို ဆိုလိုတာပါ.. ….အော် ပန်းပွင့်လေး ပဲပေါ့၊ …... ကျနော်က ပြောရင်း ဆိုရင်းက ခိုဇားမား ရဲ့ အနောက်မှာ ကပ်ရပ်လိုက်ပြီး ဆံပင်ကို မပြီး အပေါ်တင်ထုံး ထားလို့ ဝင်းနေတဲ့ ဂုတ်သားလေး ...့် .ဟွန. ရိုးရိုးနာမည်လို့ ဆိုလိုတာက ခရစ်ယန်တို့ မွတ်စလင် တို့ တချို့က ဘိုင်ဘယ်တို့ ကိုရမ် တို့ ထဲမှာ ပါတဲ့ နာမည်ကို တိုက်ရိုက်ယူသုံးကြတယ် လေ၊ အဓိပ္ပါယ်က အဓိက မဟုတ်ဘူးလေ၊ ကျနော်တို့ ဗမာနာမည် ဆိုလည်း ဥပမာ မောင်ဘ ဆိုရင် ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မလဲ ရိုးရိုးနာမည် လို့ပဲ ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား၊ ..ခနနေမှ သူက ဆိုဖာအောက်က သူ့အတွင်းခံလေး လှမ်းဆွဲ ပြီး ထထိုင်လိုက်တယ်၊ အဖုတ်ထဲက အရည်တွေ ထွက်မကျအောင် ကျနော့်ကောင်ကြီး ဆီက သူ့ အဖုတ်ကို ဆွဲနုတ်ပြီးတာနဲ့ သူ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး နဲ့ ပိတ်ပြီး မီးဖိုခန်းဖက်ကို ပြေးရှာတယ်၊ ကျနော်လည်း ဆိုဖါပေါ်မှာ လီးတန်းလန်း ကြီးနဲ့ ထိုင်မနေချင်တာနဲ့ စားပွဲပေါ်က တစ်ရှုး လှမ်းဆွဲ ပြီး ကျနော့်ကောင်ကြီးကို နည်းနည်း သုပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ မှ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီနဲ့ ဘောင်းဘီ ကို ပြန်ဝတ်ထားလိုက်တယ်၊ ခါးပတ်တော့ မပတ်သေးဘူး လေး သူပြီးရင် ကိုယ်လည်း သွားဆေးရအုန်းမှာပဲ၊ အာမက် ဘယ်အချိန်ရောက် ပြန်ရောက် မလဲ လို့ သူ့ကို သေခြာမေးရ မယ်လို့လည်း စဉ်းစားထားတယ်၊ တော်ကြာ ပြန်လာလို့ သူ့မိန်းမနဲ့ ကိုယ်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ တွေ့ရင် အထင် လွဲနေအုန်းမယ်၊ ခွိ၊ မှားလို့ အထင်မှန်နေအုန်းမယ် ပြောတာ။ ခနအကြာမှာတော့ သူတို့ မီးဖိုခန်းမှာ ခိုဇားမား ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ ပီတာဘရက် နဲ့ ဟောမို့ ( ကျနော်တို့ ပဲပြုတ် နံပြား နဲ အတူတူပါပဲ၊ သူတို့ ရဲ့ ပဲကို ခြေထားတာ ) ကို စားနေကြပါတယ်၊ ကျနော်ရေချိုးခန်းထဲ ဝင် ကိုယ့်ကောင်ကြီး ဆေးကြောသန့်စင်နေတုန်း၊ ခိုဇားမားကလည်း အိမ်နေရင်း အဝတ်အစား လဲထားပြီးလို့ အမြင်တမျိုးလေး နဲ့ လှနေတယ်၊ အပေါ်ပိုင်းက ခါးတို ဘလောက်စ် လက်တို နဲ့ အောက်က ပိတ်သားပါးပါး ပန်းပွင့်တွေနဲ့ ဂါဝန်ရှည်ကြီး ဝတ်ထားတယ်၊ စာရင်းသောက်ရင်း စကားစမြီပြောကြတော့၊ အာမက်တယောက် တော်တော်နဲ့ ပြန်လာအုန်းမှာ မဟုတ်ကြောင်းသိရ တော့ မပြန်ခင် နောက်တချီ တော့ ဆွဲသွားအုန်းမှ ပဲ လို့ ကျနော် တွေးရင်း ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ .. ကျနော့်ခေါင်းထဲ မှာတော့ တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ၊ အဟီး၊ ငါနဲ့ လာကြုံရသမျှ မိန်းမ တွေအကုန်လုံး ပန်း တွေ အပင်တွေ နာမည် နဲ့ ချည်း ပါပဲလားလို့ တွေးမိတယ်။ ….ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး အာမက် တော်တော်နဲ့ မပြန်လာသေးဘူး ဆိုရင် ငါတို့ အချိန်ရသေးတယ် လို့ တွေးမိလို့ပါ. .ကဲ လာဗန်ဒါ လေး မွေးလား လို့ စမ်းကြည့်အုန်းမယ်၊....သူတော်တော် ကဲ..အဟစ်ဟစ်...ငါပြော တဲ့ထဲ မှာ ဘာရယ်စရာ ပါလို့လ.အချိန်ရှိတိုင်းရော ဒီက အလုပ်ခံမှာ မို့လို့လား.....အဟီး.. . အန်မယ်.
.. ကျနော်လည်း ကမာန်းကတန်း ခါးပတ်ချွတ် ၊ ဇစ်ဖြုတ်အတွင်းခံဘောင်းဘီပါအကုန် မီးဖိုခန်းကြမ်းပြင်ပေါ် ပုံချလိုက်တဲ့ အချိန်၊ ခိုဇားမားကလည်း သူ့ဂါဝန်ဖားဖား ကြီးကို ခါးထိအောင်လှန်တင် လို့ ထမင်းစားစားပွဲပေါ် ကို တတောင်ထောက်ရင်း ကုန်းပေးရှာတယ်၊ သူ့ ခါးကျင်ကျင်လေး က ကားစွံ့ ထွက်လာတဲ့ ဖင်လုံးကြီးတွေက ဖရဲသီးကြီး နှစ်လုံး လိုပဲ အားရ ပါးရ မို့ ကျနော်က လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင် ရင်း ဘေးကို ဖြဲပေးကြည့်တော့ ခရေပွင့် ညိုညို လေးနဲ့ အောက်က မို့မို့ဖောင်းဖောင်း စောက်ဖုတ်ကြီးက အရည်ကြည် ရွှမ်းလဲ့ နေတာ တွေ့ရပါတယ်၊ ကျနော်လည်း သူ့ဖင်ကြီး တလုံးကို လက်တဘက်နဲ့ တွန်းထားရင်း နောက်လက်တဖက်နဲ့ ကျနော့်ကောင်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ သူ့ အဖုတ်ဝကို တေ့ပေးလိုက်ပါ တော့တယ်၊ ဒီအချီ လုပ်ရတာ ကတော့ အားရ ပါးရ ရှိလှ သလို အချိန်လည်း တော်တော် ကြာတယ်ဗျ၊ သူကလည်း စားပွဲခုံပေါ် တံတောင်ထောက်ရင်း ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးသလို၊ ကျနော်က လည်း ဒူးကို ကွေး လီးကြီးကို ဒစ်ပေါ်ကာနီးနောက် ဆွဲထုပ်ပြီးတော့ မှ ကော့ကော့ ဆောင့်ပေးတယ်၊ ကျနော့် ဆီးခုံနဲ့ သူ့ ဖင်လုံးကြီးတွေ တဖတ်ဖတ် ရိုက်မိပြီး ဖင်လုံးကြီးတွေက လှိုင်းလုံးတွေလို တုံတုံ ထွက်သွားတာ ကလည်း ကြည့်လို့ ကောင်းမှ ကောင်း၊ အရှိန်ဂရလာတော့ နှစ်ယောက်စလုံး အသံတွေ ထွက်လာကြတယ်၊ အီး အီးအားအား ပေါ့၊ အဟီးဟီး၊ နောက်တော့ သူ့ အဖုတ်ထဲက အတွင်းသားတွေက ကျနော့် လီးကြီးကို ဆုပ်လိုက်လျှော့လိုက် လို လုပ်ပေးလာတော့ ကျနော်လည်း မထိန်း ထား နိူင်တော့ပဲ သုပ်ရည်တွေ တဖြုတ်ဖြုတ် ပန်းထည့်ပစ်လိုက် မိပါတော့တယ်။ . ..ကို နမ်းလိုက်ပါတယ်၊ သူ့ခါးကျင်ကျင်လေး ကို လက်ဝါး နှစ်ဘက်နဲ့ ညှပ် ကိုင် ပြီး ကျနော့် ပေါင်ခြံ ကို ဆွဲယူကပ်လိုက်တော့ ကျနော့် ဘောင်းဘီ ထဲမှာ မာလာပြီ ဖြစ်တဲ့ လိင်ချောင်းက သူ့ ဂါဝန်အသားပျော့ပျော့ အောက်က အိစက်စက် တင်လုံး ကြီး နှစ်လုံးကြား အမြှောင်းလိုက် ဖိကပ်နေတော့ တာပေါ့၊ ခိုဇားမားက ခစ်ခစ် နဲ့ လည်ပင်း ယားသလိုလေး ခေါင်းနောက်မော့လိုက်ပြီး လက်နောက်ပြန် နဲ့ ကျနော့် ကောင်ကြီးကို ဘောင်းဘီပေါ်ကပဲ ပွတ်ပေးနေတယ်၊ ကျနော့် လက်ဖဝါးတွေက ဘရာဇီယာ မဝတ်ထား တဲ့ သူ့နိူ့ကြီးတွေ ကို အင်္ကျီပေါ်က နေ အုပ်ကိုင် ပြီး ဆုပ်နှယ် ဇိမ်ခံနေတော့၊ခိုဇားမားက မျက်စောင်းလေး ချစ်စရာပစ်ရင်း .အာမက် ပြန်လာတော့မှာနော်..ဒါဆိုလည်း အချိန် မဖြုန်းတော့ဘူးလေ၊ စားပွဲပေါ်ပဲ လက်ထောက်ထားလိုက်တော့..
Documents Similar To Flower
Mya Thi Da
သေခြင်းနှင့် ယှဉ်၍ လောင်းသည်…
Nyo Chawla Ym Oh
Ma TintaIn
Ngaye and Ayatar
Achit Sone Anwar Mone
Ma Ma Hla Hla (Pawthut)